shwezinu: October 2010
ပန်းသတင်း (စက်တင်ဘာ ၃၁)
စာရေးသူ - နုနုရည် (အင်းဝ)
နံနက်ခင်း လေပြည်သည် အေးမြညင်သာစွာ တိုက်ခိုက်နေသည်။ မီးဖိုမှ မီးညွန့် များသည် ရဲရဲနီနီကာ ဟုန်းဟုန်းတောက်လျက်ရှိ၏။ မိဒိုးသည် ထမင်းအိုးကို မနိုင်တနိုင့်မကာ မီးဖိုပေါ်တင်လိုက်၏။ ကျပ်ခိုးမှိုင်း များဖြင့် ညစ်ပေနေသော အိုးဖုံးကို ဆန်ဆေးရည်ဖြင့် ဆေးပြီး ဖုံးလိုက်သည်။
ညနေ အတွက် ချန်ထားသောဆန်ကို ပုဆိုးနှင့် ပြန်ထုပ်၏။ ရေအိုးနားမှ မန်ကျည်းရွက်ထုပ်ကို သိားယူကာ ကြမ်းပေါ်ဖင်ချ အထိုင်လိုက် ဗြိခနဲ မြည်ကာ ထဘီမြဲသွားယူကာ ထဘီပြဲသွားပြီကို မိဒိုးသိလိုက်၏။ ကပျာကယာ ထကာ ထဘီကိုလှည့်ကြ့ည့်လိုက်တော့ တစ်ထွာခန်သုာရှိအစုတ်ကြီး။
သည်ထဘီက အမေထားခဲ့သော ထဘီသုံးထည်အနက်က နောက်ဆုံးထဘီ။
မိဒိုးထဘီ ကို အသာလှည့်ဝတ်ကာ ဖြည်းညင်းစွာထိုင်ချပြီးမှ မန်ကျည်းရွက်သင် ၏။
နောက်နေ့ မှ အရီိးလေးတို့အိမ်က အပ်နှင့်အပ်ချည်ငှားပြီး သီရမည်။
မန်ကျည်းရွက်တွေက တမြန်နေ့ကတည်းက ခူးထားသည်မို့ နည်းနည်းနွမ်းနေကြ ပြီ။ မနပ်ဖြန် အတွက် မန်ကျည်းရွက် ကို ပြန်ထုပ်ထားလိုက်၏။ အိမ်ရှေ့တွင် ကစားနေကြသော မိဒိုး၏အောက် အငယ်မ သုံးယောက် က မီးဖိုးချောင်ဆီသို့ တကြည့်တည်း ကြည့်နေကြသည်။ မန်ကျည်းရွက်အိုးထဲသို့ ငါးပိထုပ်ထဲမှ လက်ကျုန် ငါးပိ နည်းနည်းကို ပစ်ထည့်လိုက်၏။ ဆီပုလင်းကို လောင်းချသော် လည်း ကျလာသည် မှာ တစ်စက် နှစ်စက်။ မိဒိုးက ပုလင်းဖင်ကို လက်နှင့် ရိုက်ချ၏။ ဒီနေ့ညနေ အဖေ့ဆီက ပိုက်ဆံရမှ မနက်ဖြန် အတွက် အားလုံးဝယ်ရ မည်။
မန်ကျည်းရွက် ဟင်းအိုး တပွတ်ပွတ်ဆူချိန်တွင် အိမ်ရှေ့မှ ဆွမ်းတော်ဗျို့ ဟူသောအသံကို ကြားရ၏။ ထုံးစံ အတိုင်း မိဒိုးက ကန်တော့ဆွမ်း ဟု သွက်လက် စွာအော်လိုက်သည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား အေးမောင်က ဆွမ်းဗျပ် ကို ရွက်ထားရင်းက မိဒိုးကို မျက်စောင်းထိုးလေသည်။
မိဒိုး ခေါ်သံ အဆုံးတွင် အငယ်သုံးယောက် အပြေး အလွှားလာကြသည်။
ထမင်းရည် နီရဲရဲတစ်ဇလုံနှင့် မန်ကျုည်းရွက်ဟင်းကို အလယ်ထားလျက် ခေါင်းမ ဖော်အောင် စားကြ၏။ ဆံပင်နီနီနှင့် ခေါင်းလေးလုံးသည် မြစ်ဆိပ်တွင် ရေငုပ် ကြလွန်းသဖြင့် ဆီနှင့် မတွေ့ရသော ဆံပင်များမှာ နီရဲ နေကြသည်။
'သမီး ရော့ဟေ့ ပိုက်ဆံ'
အဖေက ပခုံးပေါ်မှ တက်နှစ်ချောင်းကို တဲခေါင်းပန်းတွင်ထောင်ပြီးသည်နှင့် မိဒိုးကို ပိုက်ဆံပေး၏။ ကျပ်တန် ငါးရွက်။ အဖေ့ မျက်နှာမှ ချွှေးသီးချွေးပေါက်များ ကို မိဒိုး ငေးကြည့်နေရင်း အဖေငှင်ငှားခ သုံးကျုပ် ပေးပြဲီးပြီနော်ဟု အလောသုံး ဆယ်မေးလိုက်၏။ အဖေက မိဒိုးကို ကြည့်၍ ပြုံး၏။
'ပေးပြီးပါပြီ သမီးရဲ့၊ ဟူး ဒီနေ့မစားသာဘူးဟေ့' ရေနီကျပြဲီး ရေသိပ်စီးနေတယ်'
မိဒိုးက အဖေပြောသမျှကိုသာ ခေါင်းညိတ်နေရင်း ငွေငါးကျပ်နှင့် ဈေးဝယ်ရန် တွက်ဆန်တစ်ပြည်က လေးကျပ်။ ဒါနဲ့ကိုပဲ လေးကျပ်ရှိနေပြီ။ အသင်းဘုတ်အုပ် နဲ့ ထုတ်ရင် နှစ်ကျုပ်ဆယ်ပြားပဲ ကျတာ။ အမေ ဆုံးတုန်း က ငါးဆယ်နှင့်ပေါင်ထား သော အသင်းဘုတ်အုပ်ကို ခုထိမရွေးနိုင်သေးတာ နာတာပဲ။ ထားပါလေ။ ဆီနှစ် ကျပ်ခွဲသားက ပြားရှစ်ဆယ်။ ပြားနှစ်ဆယ်ပဲ ကျန်တော့သည်။ မန်ကျည်းရွက် ချက်ဖို့် ငါးပိက မ၀ယ်လို့မဖြစ်။ တစ်မတ်ဖိုးကိုတောင်မှ ရွာလယ်ဈေးသည်ဒေါ် ကြီးမှင်က သိပ်ရောင်းချင် တာ မဟုတ်။ ပြားနှစ်ဆယ်ဖိုးရောင်းပါ့မလားဟု မိဒိုး ပူပန်မိ၏။
'ဟဲ့ မိဒိုး ... မီးဖိုပေါ်ကအိုးဝေကျနေပြီ၊ ဘာအုိုးလဲ'
'ရပါတယ် အဖေရဲ့၊ အဝေရာရွက်ပြုတ်ထားတာပါ၊ ဒီနေ့ည အဝေရာ သုပ်နဲ့ မန်ကျည်းရွက်ဟင်း '
မီးဖိုပေါ် က အိုးကိုမိဒိုးသွားဖွင့်လိုက်သည်။ စိမ်းဝါ၀ါအရည်များက ပွက်ပွက်ဆူနေကြသည်။ အဝေရာရွက် တစ်ခက်ကို ဆတ်ခနဲ ဆိတ်ကြည့်လိုက် ၏။ မနူးသေးပေ။ မီးဆွပေးလိုက်ပြီး ပိုက်ဆံကို ထည့်သိမ်း လိုက်၏။
' ဟေ့ ... ငါက ခြောက်ဆင့်ရောက်ပြီနော်၊ ခြောက်ဆင့်ခုန်ရမှာ'
ဖန်ခုန်တမ်းကစားနေသော နေရာမှ အလတ်မ၏ အသံစူးစူးက ၀မ်းသာအားရ ထွက်ပေါ်လာသည်။ သူ့ညီမသုံးယောက် ဖန်ခုတ်တမ်းကစားနေသည်ကို ကြည့် ရင်းမိဒိုး ရုတ်တရက်ကစားချင်စိတ် ပေါ်လာသည်။ မိဒိုးမကစားရတာကြလှပြီ။ အမေရှိတုန်းကဆို ရွာလယ်ပိုင်းထိတောင် သွားကစားရ၏။ မြစ်ဆိပ်သောင်ပြင် ပေါ်တွင်လည်း သူငယ်ချင်းများနှင့် ဘိုအိမ်ဆောက်ရသည်မှာလည်း ကြာပြီ။
မိဒိုး သည် ထဘီကို ခပ်တင်းတင်းပြင်ဝတ်ပြီး တဲရှေ့သို့ပြေးသွားလျက် အလတ်မ ခုန်မြည်ပြုနေသော ခြောက်ဆင့် ကို လွှားခနဲ ခုန်ကျော်လိုက်၏။ ပါးစပ်ကလည်း ငါခုန်တာ တွေ့လားဟေ့ ဟု ၀မ်းသာအားရ အော်၏။ အလတ်မ နှုတ်ခမ်းစူ၏။
'ငါခုန်နေတာ ဘာလုပ်နင် ၀င်ခုန်တာလဲ၊ သွားမပါဘူး'
'အိုး ... ပါမှာပေါ့၊ နင်မခုန်နိုင်တိုင်း ..... နင်က အီးဘောသော'
မိဒိုး က သူ့ညီမကို စ၏။
'နင်နော် နင်၊ အပျိုက အပျိုလိုနေပါလား၊ အပျိုဆိုတာ ကလေးတွေထဲ မပါဘူး သွား'
'ဘာ ... ကြည့်စမ်း၊ ဘာအပျိုလဲ ... ငါလဲ ကလေးပဲ '
ကလေးစိတ်တစ်ဝက် နှင့် မိဒိုးပြန်အော်၏။
' အမယ် ...နင် ကလေးဆိုရင် နင်ဘာပြုလို့ ရေချိုးတုန်းက အဖေ့ ရေလဲနဲ့ ချိုးလဲ၊ ငါတို့လို ချိုးပါလားကဲ '
မိဒိုးရှက်သွား၏။ အဖေ့ဆီကို မလုံမလဲ လှမ်းကြည့်ရင်း ရှက်ရှက်နှင့် အလတ်မ ခေါင်းကို 'ဒေါက်' ခနဲ နေအောင် ခေါက်ပစ်လိုက်လေသည်။
မန်ကျည်းရွက် ခူးတိုင်း မိဒိုးကောက်လာသော မန်ကျည်းကိုင်းများနှင့် ဆူးစည်း လုပ်နေသော အဖေ့ဘေး တွင် မိဒိုးတို့ညီမတစ်တွေ ၀ိုင်းနေကြလေသည်။ အဖေက အကိုင်းအခက်ရှုပ်သော မန်ကျည်းကိုင်းများကို စု၍ အရင်းမှ ကြိုးဖြင့် တင်းနေအောင် ချည်သည်။
'ပြီးပြီလားအဖေ၊ မြစ်ထဲကို အခု သွားချရအောင်နော် အဖေ'
အငယ်ဆုံးမက စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြောသည်။ မိဒိုးတို့တစ်ရွာလုံးလိုလို ဆူးစည်းချလေ့ရှိ၏။ မန်ကျည်းကိုင်းနှင့် လုပ်သော ဆူးစည်းမှာ ငါးသိပ်မပါသော် လည်း နှစ်ရက်တစ်ခါ၊ သုံးရက်တစ်ခါ ဖော်လျှင် တစ်ချက်စာ လောက်တော့ ရတတ်လေသည်။ ဆူးစည်းကို ရေတိမ်တိမ်တွင်ချရ၏။ ရေတိမ်တွင်သွားနေ တတ်သော ငါးသေးလေးများမှာ မန်ကျည်းကိုင်းရှုပ်ရှုပ်တွင်ဝင်တိုးမိပြီး မထွက်နိုင် ကြတော့ပေ။ တချို့ နည်းနည်း တတ် နိုင်သူများက ကြိုးတန်းအရှည်ကြီးဖြင့် မျှားတန်းတန်းကြလေသည်။
ဆူးစည်းကို ထမ်းလျက်သွားသော အဖေ့နောက်မှ မိဒိုးတို့ခုန်ပေါက်လိုက်လာကြ ၏။ အဖေက ရေတိမ်တိမ် တွင် ဆူးစည်းကို မြုပ်အောင်ချပြီး စိုက်ထားသော ငါးလုံးတိုင်း ချည်နေ၏။ အငယ် သုံးယောက်လုံး ရေထဲတွင် တ၀ုန်းဝုန်း ကူးနေ ကြပြီ။ အလတ်မက သဲကြမ်းများနှင့် ချေးတွန်းရင်းမိဒိုးကို လှမ်းပြောင်ပြနေ၏။ ညီမ က အငယ်နှစ်ယောက်က ရေထဲတွင် ငုပ်လိုက်ဖော်လိုက်နှင့် ကူးခတ်နေကြ၏။ မိဒိုးသည် လက်မောင်း ပိန်ပိန်လေး ပေါ်သို့ မကြာခဏ လျှောကျနေသော ရှင်မီးအင်္ကျံပေါ်ဆွဲဆွဲတင်ရင်း ဟိုတုန်းကလို အ၀တ်အစား များကို အမြန်ချွတ်ကာ ရေထဲပြေးဆင်းချင်စိတ် ပေါ်လာသည်။ အဖေက ၀ါးလုံးတိုင်မြဲအောင် အုတ်ခဲကျိုး နှင့် ထုနေရင်း လှမ်းပြောသည်။
"ဟဲ့ ... မိဒိုး၊ ရေချိုးမှာ ချိုးလေ၊ ဘာလုပ်နေတာလဲ"
မိဒိုး သည် အဖေ၀တ်ထားသော ရေလဲပုဆိုးကို မသိမသာကြည့်ရင်း ခပ်တိုးတိုးပြန်ပြောလိုက်သည်။
"တော်ပြီ အဖေ ... ဒီနေ့ ရေမချိုးတော့ဘူး"
အေးစိမ့်စွာ တိုက်ခတ်လာသော လေ၏ အထိအတွေ့ကြောင့် မိဒိုး ဖျတ်ခနဲ လန့်နိုးလာခဲ့သည်။ မိဒိုး ကိုယ်ပေါ် တွင် စောင်မရှိတော့ပေ။ အငယ်သုံးယောက်သည် စောင်ကို သူတို့ဘက် ဆွဲယူသွားပြီး ပူးကပ် ခြုံကာ အိပ်ပျော် နေကြသည်။ မိုးလင်းတော့မည်။ အလင်းရောင် မှုန်ပျပျကို မြင်နေရပြီ၊ မိဒိုးက ထဘီကို အသာ ဆွဲခြုံကာ မျက်လုံးများကို ပြန်မှိတ်လိုက်သည်။ ဗိုက်ထဲတွင် ဟာနေသည်။ ဗိုက်ဆာ သည် ဆိုကာမှ သည်နေ့ မနက် ဟင်းချက်စရာ မရှိ။ မန်ကျည်းရွက်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဝေရာရွက်ဖြစ်ဖြစ် သွားခူး ရလိမ့်မည်။
ငါးပိနည်းနည်း ရှိသေးသည်။ ငါးပိ နည်းနည်းကို သည်နေ့အတွက် ခွဲချန်လိုက်သဖြင့် မနေ့ ညက မန်ကျည်းရွက်ဟင်း မှာ ချဉ်လိုက်သည်မှ စုတ်စုတ်လန့်နေသည်။ အငယ်ဆုံးမက မျက်နှာရှုံ့မဲ့မဲ့ နှင့် "အဖေ ဆူးစည်း သွားမဖော်သေးဘူးလား" ဟု ထမင်းစားမပြီးမချင်း တတွတ်တွတ် မေးလေသည်။ မိဒိုးသည် အိပ်ရာ မှ ကပျာကယာ ခုန်ထလိုက်သည်။ ဟုတ်သားပဲ။ ဆူးစည်းချထားတာ ဒီနေ့ဆို နှစ်ရက် တောင် ရှိသွားပြီ။ မိဒိုးသည် တဲအောက်ကို ခုန်ဆင်းလိုက်၏။ အဖေ့ကို ကြည့်တော့ အိပ်မောကျနေ တုန်းပင်။
မိဒိုးသည် မြစ်ဆိပ်သို့ ခပ်သွက်သွက် လျှောက်ခဲ့၏။ မြစ်ပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာသော အရုဏ်ဦး လေက အေးမြလှသည်။ မိဒိုး ထဘီကို ဆွဲခြုံလိုက်သည်။ မြစ်ဆိပ်တွင် မည်သူမျှ မရှိသေးပေ။ မိဒိုးတို့ ဆူးစည်း မှာ တခြားဆူးစည်းများနှင့် အတော်လေး လှမ်းလေသည်။ သို့သော် မိဒိုးသည် ဆူးစည်း ဖော်ဖို့ကိုသာ စိတ်စော နေသဖြင့် ကြောက်ရကောင်းမှန်း မသိပေ။ ထဘီကို ခပ်တိုတို ပြင်ဝတ်ပြီး မိဒိုး ရေထဲသို့ ဆင်းလိုက်သည်။ ဆူးစည်းကို အသာ မပြီး ကုန်းပေါ်သို့ ချသည်။ ကျလာပါစေ ငါးတွေ အများကြီး အများကြီ။ မိဒိုးသည် စိတ်အား ထက်သန်စွာ ဆူးစည်းကို လှုပ်ခါလိုက်၏။ မိဒိုး မျက်နှာ ရှုံ့မဲ့သွား၏။ ငါးက တစ်ကောင်တစ်မြီးမှ ကျမလာပေ။ ဘာလို့ပါလိမ့်။ ရေနီကျနေလို့လား။ မိဒိုး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြင့် ဆူးစည်းကို ရေထဲပြန်ချပြီး နီရဲသော မြစ်ပြင်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်၏။ အလို။ မိဒိုး မျက်လုံးများ ၀င်းလက်သွား၏။ ရေနက်ပိုင်းတွင် တန်းထားသော များတန်း တစ်နေရာသည် လှုပ်ရှား ယိမ်းထိုးနေ ပေသည်။
ထောင်ထားသော ငါးအရှင်က သေလောက်ပြီ။ ရှင်နေလျှင်လည်း ဒါလောက် မလှုပ်ယမ်းနိုင်။ ဟုတ်ပြီ။ ငါးကြီးတစ်ကောင်မိနေတာပဲ ဖြစ်ရမည်။ မိဒိုး ဘာကိုမှ စဉ်းစားမနေတော့။ ရေထဲသို့ အမြန်ဆင်းရင်း မျှားတန်းဆီသို့ ကူးသွားလိုက်သည်။ မိဒိုးသည် လှုပ်နေသော နေရာတွင် ကိုယ်ကို အသာဖော့ထားရင်း ကြိုးကို မကြည့်လိုက်သည်။ မိဒိုးထင်သည့်အတိုင်းပင်၊ ငါးပတ်ကြီ။ နည်းတဲ့အကောင်ကြီး မဟုတ်။ ၀မ်းသာ လိုက်သည် မှာ ပြောစရာမရှိ။ မည်သူ့ မျှားတန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြုတ်မည်။
မိဒိုးသည် ခြေထောက် နှစ်ချောင်းကို အားပြုကာ ရေကို ယက်၍ ယက်၍ ကိုယ်ဖော့ရင်း လက်နှစ်ဖက်လုံးဖြင့် ငါးကို ဖြုတ်လေ သည်။ ငါးပတ်ကြီးကား တဖြန်းဖြန်း ရုန်းကန်နေပေသည်။ ဖြုတ်ရသည်မှာ မိဒိုး ထင်သလောက် မလွယ်။ အမှန်မှာ မျှားတန်းဖော်လျှင် လှေပေါ်မှနေ၍ အေးအေးဆေးဆေး ဖော်လေ့ ရှိကြသည်။
ရေစီးသည် မိဒိုးအောက်ပိုင်းကို အရှိန်ဖြင့် တွန်းထိုးနေပေသည်။ ရေစီးထဲတွင် ပါသွားမလို ဖြစ်နေ သည်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုသာ အဆက်မပြတ်ကူးယက်ရင်း ငါးကိုသာ မဲဖြုတ်သည်။ ခုနေများ မျှားတန်း ဖော်တဲ့ လူ ရောက်လာမှဖြင့် ဟူသော အတွေးဖြင့် ဇောချွေးများပင် ပြနလာသည်။ အားစိုက် ကာ မိဒိုး ဆက်ဖြုတ် ပြန်သည်။ ငါးပတ်ကြီး မော၍ နည်းနည်းအငြိမ်တွင် တအားဆောင့်ဆွဲပစ်လိုက် သည်။ ရပြီ။ ငါးပတ်ကြီး ကို မလွတ်စေရန် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ရင်း ကမ်းစပ်သို့ ခြေထောက်ဖြင့်သာ အမြန်ကူးသည်။ ၀မ်းသာလိုက်သည် မှာ မိဒိုး တုန်ယင်၍တောင်နေသည်။ မိဒိုး ကုန်းပေါ်သို့ အမြန်ပြေးတက်လိုက်သည်။
"အို ... အမယ်လေး"
မိဒိုး အလန့်တကြား အော်ရင်း မြေကြီးပေါ်တွင် ထိုင်ချလိုက်မိ၏။ မိဒိုး ကိုယ်ပေါ်မှ ထဘီလေး မရှိတော့ ပြီ။ ရေစီးနှင့်အတူ မျောပါသွားခဲ့ပြီ။ ဇောနှင့် ငါးကိုသာ မဲဖြုတ်နေသည်မို့ မိဒိုး ထဘီ ကျွတ်ကျသွားမှန်း ကိုပင် မသိနိုင်တော့။ မိဒိုး တစ်ကိုယ်လုံး ရှက်စိတ်ဖြင့် တုန်ယင်လာ၏။ သွားပြီ။ အမေ့ထားခဲ့သော မိဒိုး ၏ တစ်ထည် တည်းသော ထဘီလေး။ မျက်ရည်တွေ ၀ဲလာ၏။ အိမ်ကို မည်သို့ ပြန်ရမည်နည်း။ မိုးလင်း စပြု နေပြီ။ လူတွေနိုးနေကြပြီ။
ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို မိဒိုး ဘယ်လိုဖြတ်ပြန်ရပါမလဲ။ မြေကြီးပေါ်တွင် ငါးပတ်ကြီးသည် ပါးဟက်ကြီးကို ဟလျက် အသက်ရှူနေ၏။ မြစ်ညာဆီမှ ငှက်အချို့ စုန်ဆင်းလာကြ ပြီ။ မကြာမီ လူတွေလာကြတော့မည်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဘာလုပ်ရမလဲ။ အိမ်ကို ဘယ်လို ပြန်ရပါ့မလဲ ဟု တွေးရင်း ရုတ်တရက် ဗိုက်ထဲက ဆာလောင်လာပြန်သည်။ မိဒိုးသည် ငါးပတ်ကြီးကို ဆတ်ခနဲ ကောက်ယူလိုက်၏။ အံကို တင်းတင်းကြိတ်ကာ မျက်စိ ကို စုံမှိတ်ပြီး တအားကုန်ပြေးလေသည်။ ရွာလယ်လမ်းမသို့ ရောက်တော့မည်။ ဘုရားရေ။ လူတွေ ထွက်လာ နေကြပြီ။ ရှက်စရာကောင်းလိုက် တဲ့ဖြစ်ခြင်း။ မိဒိုး တအားပြေးရင်း မျက်ရည်များ စီးကျလာ၏။
"အို ... ဟဲ့ ... မိဒိုး"
"ဟဲ့ ကောင်မလေး ဘာဖြစ်လာ ..."
လူတွေ၏ အံ့သြကြီးစွာ အော်လိုက်သော အသံများကို မိဒိုး မကြားပေ။ အံကို တင်းတင်းကြိတ်ထား သော မိဒိုး သည် မျက်ရည်များ စီးကျလျက် ငါးပတ်ကြီးကို တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ရင်း အိမ်ဆီသို့ တအား ပြေးနေ ပေသည်။
စာရေးသူ - နုနုရည်(အင်းဝ)
၁၉၈၄ မတ်လ ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်း
Posted by SHWE ZIN U at 6:24 AM9comments Links to this post
Labels: ပန်းသတင်း (စက်တင်ဘာ ၂ဝ၁ဝ)
တက္ကသိုလ် နေဝင်း ဘာသာပြန် ဇင်ဘာဘွေ အခန်း (၄ဝ) အဆက် (၂)
ဖွန်ဂါရာဘီ သည် ရုရှဗိုလ်မှူးကြီးအား မျက်ရိပ်ပြလျက် လမ်းဘေးတစ်နေရာတွင် ဒူးထောက် ၍ နေရာ ယူလိုက် သည်။ နှစ်ယောက်စလုံး သေနတ်လက်နက်များ အဆင့်သင့်ထုတ်ကိုင်ထားပြီး ဖြစ်လေသည်။
သူတို့ ရောက်ရှိသော နေရာမှ ရှေ့သို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်သော် တောင်ခြေသို့ သွားသည့်လမ်း သည် တစ်နေရာတွင် ပျောက်ကွယ်သွားသည်ကို သတိပြုမိကြသည်။
တွန်ဂါတာတို့ ပုန်းအောင်းနေရာ လျှို့ဝှက်စခန်းသို့ သွားသည့်လမ်းပင် ဖြစ်ရပေမည်။
ဖွန်ဂါဘီရာသည် ကျေနပ်သဘောကျဟန်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြီး ဘူခါရင်ဘက်သို့ လှည့်၍
"မာတာဘယ်လီ ခြေခွေးပုန်းအောင်းနေတဲ့ နေရာကိုတော့ ရောက်လာပြီဗျ။ အခု ဒီကောင် ဘယ်လိုမှ ကျုပ်လက် က ပြေးမလွတ်တော့ဘူး" ဟု ပြောလိုက်သည်။
"ရှိုနာတွေ လာနေပြီ၊ အမြန်ပြေးကြပါတော့၊ ရှိုနာတွေ လာနေပြီ၊ သူတို့က ..."
အမျိုးသမီးတစ်ဦး က မာတာဘယ်လီဘာသာဖြင့် ဟစ်အော်သတိပေးသံသည် ကားတန်းလန်းနှင့်ပင် ပျောက်ကွယ် ရပ်စဲသွားလေသည်။
မီးဖိုနားတွင် ကင်းစောင့်နေသူ ဆာရာသည် ကပျာကာ ထလိုက်င်္ရာ ဟင်းချက်သော အိုးကြီး တစ်လုံး ကို တိုက်မိပြီး အိုးကြီး မှောက်ကျသွားလေသည်။
သို့သော် ဆာရာ က လုံးဝဂရုမစိုက်ဘဲ မြေအောက်ရေအိုင်သို့ ဆင်းသည့် လမ်းကျဉ်းဆီသို့ အလျင် အမြန် ပြေးသွား လေသည်။
"အို ... အရှင်သခင်၊ ရှိုနာစစ်သားတွေ လာကုန်ပါပြီ။ အရှင့်အား ဖမ်းဆီးရန် ရှိုနာတွေ လာကုန်နေပြီ"
ဆာရာ က နားလည်ဟန်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြပြန်သည်။
ခရိတ် သည် ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ပိုက်လျက်ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆာရာအား ပွေ့ထား ကာ ရေအောက်ထဲ ငုပ်ဆင်းသွားလေသည်။
ရေအောက်ဘက် သို့ မရောက်မီ လမ်းတစ်ဝက်တွင် ဆာရာသည် အသက်ရှူရန် ကြိုးစားလာရာ ခရိတ် လည်း မိမိတို့အဖို့ ပြသနာတော့ ပေါ်ပြီဟု ချက်ချင်းရိပ်မိလေသည်။
ဆာရာ၏ မျက်နှာဖုံးခေါင်းဆောင်းကိရိယာအတွင်းသို့ ရေများဝင်လာရာ သူမသည် အသက်ရှူ ရခက်ဟန် လူးလွန့်ရုန်းကန်နေသည်။ ခရိတ်လည်း မနည်းကြိုး၍ ဆာရာအား ဖမ်းကိုင်ထား ရလေသည်။
ရေအောက် ဥမင်လမ်းကျဉ်းအ၀အနီးသို့ ရောက်သောအခါ ခရိတ်သည် ကိုယ်အလေးချိန်များ အောင် ကိုင်ထား သော ကျောက်တုံးကြိးကို လွှတ်ချလိုက်လေသည်။
ဤတွင် ဘွိုင်ယင်ဆီခေါ် ကိုယ်ပေါ့ပါးမှုသည် ချက်ချင်းပြောင်းလဲလာတော့သည်။ ဆာရာ၏ ကိုယ် သည် ပေါ့ပါး လျက် အပေါ်သို့ မြောက်တက်သွားရာ သူမ၏တံတောင်ဆစ်တစ်ဖက်က ခရိတ်၏ မျက်နှာကို ၀င်ဆောင့်မိလေသည်။နာကျင်လွန်းသဖြင့်ခရိတ်သည် ဆာရာအား ဖမ်းကိုင်ထားသည့် လကတစ်ဖက် ကိုလွှတ်လိုက်မိရာ သူမ၏ ကိုယ်သည် ပေါ့ပါးစွာဖြင့် အပေါ်သို့ တက်သွားလေသည်။
သည်တော့မှ ခရိတ်လည်း သတိရပြီး လျင်မြန်စွာလိုက်၍ ဆာရာ၏ ခြေတစ်ဖက်ကို ဖမ်းဆွဲထား လိုက်ရ လေသည်။ ထို့နောက် သူ၏ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကာ ခရိတ်သည် မြေအောက်လိုဏ်ဂူလမ်း ပေါက်အတွင်းသို့ အတင်း ဆွဲခေါ် သွားလေသည်။
ဆာရာ၏ မျက်နှာဖုံးခေါင်းဆောင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကိရိယာတို့သည် ချို့ယွင်းပျက်စီးနေပြီဖြစ် ကြောင်း ထင်ရှား နေပြီဖြစ်ရာ ခရိတ်သည် ဆာရာ၏ကိုယ်မှ ပစ္စည်းကိရိယာများကို ဖြုတ်ပစ် လိုက်သည်။
ဆာရာသည် သိသိသာသာ အားနည်းလာပြီဖြစ်၍ စောစောကကို ရုန်းကန်ခြင်း တွန်းထိုးခြင်းများ မ လုပ် နိုင် တော့ချေ။ ယင်းသို့ အားနည်းပြီး လှုပ်ရှားမှုမလုပ်နိုင်ခြင်းသည် အကောင်းမဟုတ်၊ ရေမွန်း၍ ရေနစ် သေဆုံးတော့ မည့် အရိပ်လက္ခဏာ ဖြစ်လေသည်။
ခရိတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆာရာအား ငြိမ်အောင်ချုပ်ထိန်းရာ၌ အလွန်အားစိုက်ရသောကြောင့် သူ၏ အောက်ဆီဂျင်ဘူးထဲမှ အောက်ဆီဂျင်များ ပို၍ လျင်မြန်စွာ ကုန်သွားလေရာ သူ၏ ရင်တွင်းမှ အဆုတ်များ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေဘိသကဲ့သို့ ခံစားနေရလေသည်။ ဤတွင် ခရိတ် သည် သူ့ကိုယ်သူ ပြန် သုံးသပ် ကြည့်ရာ မှ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားလေသည်။
သူသည်လည်း ဆာရာကဲ့သို့ပင် အဆုတ်ထဲ ရေများဝင်ကာ ရေနစ်မွန်းနေပြီင်္ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပြီး တုန်လှုပ် ချောက်ခြား မိခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ဟုတ်ပါပြီ၊ ဆာရာနှင့် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ရေအောက်ထဲမှာပင် အသေဆိုးကြရတော့မည် ဖြစ်ပေသည်။
ခရိတ်သည် သတိမလစ်ရန် အထူးကြိုးစား၍ စိတ်ကို တင်းထားသည့်ကြားမှ သတိလက်လွတ် ချင်သလို ဖြစ်လာသည်။ သတိလစ်သွားလျှင်ကား လုံးဝ ပြန်လည်သတိရတော့မည် မဟုတ်ဟု လည်း သိနေပေသည်။
ထိုခဏ ၌ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ၏ဆံပင်ကို ဆွဲလိုက်သလို ခံစားရပြီးနောက် မကြာမီ ရေမျက် နှာပြင် ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာလေသည်။
အသင့်စောင့်နေသူ ဆယ်လီသည် ရေအောက်ထဲ၌ ခရိတ်နှင့် ဆာရာတို့ ရေနစ်မွန်းတော့မည့်အ ဖြစ်ကို သူတို့၏ လက်နှိ်ပ်ဓါတ်မီးရောင်ဖြင့် မြင်ပြီး ရိပ်မိသဖြင့် သူမကိုယ်တိုင် ရေထဲခုန်ဆင်းကာ ခရိတ်၏ဆံပင်ကို ဖမ်းဆွဲ တင်လိုက်ခြင်းလေသည်။
ဆာရာမှာမူ လုံးဝသတိမရတော့ဘဲ ရေထဲတွင် မှောက်လျက်မျောနေပြီ ဖြစ်သည်။
ခရိတ် သည် အထူးစိုးရိမ်လာမိသဖြင့် ဆယ်လ အား အကူအညီ တောင်းလိုက်သည်။
"ဆယ်လီ---ဆယ်လီ ငါ့ကို ၀ိုင်းကူပါဦး။ ဆာရာကို ရေထဲက မြန်မြန်ဆယ်ထုတ်မှ ဖြစ်မယ်။ မြန်မြန် လုပ်စမ်းပါ။"
ဆယ်လီလည်း အခြေအနေကို ချက်ချင်းသဘောပေါက်မိသဖြင့် ခရိတ်နှင့်အတူ နှစ်ယောက်အင်အားဖြင့် ဆာရာ အား လျင်မြန်စွာ ရေထဲမှ ဆွဲတင်လိုက်ကြလေသည်။
ခရိတ်သည် ဆာရာ၏ပါးစပ်ထဲသို့ လက်ညှိုးထိုး၍ ရေတွေ အန်ထွက်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရာ ကံအား လျော်စွာ ရေများ အန်ထွက်လာပြီး သူမသည် အသက်ပြန်ရှူစ ပြုလာလေသည်။
သည်တော့ မှ ခရ်ိတ်လည်း စိတ်ချသွားကာ သူ၏ လတ်တလော တာဝန်အကြောင်း ပြန်စဉ်းစား နိုင်တော့သည်။
"ဒီမယ် ဆယ်လီ ရေငုပ်ဝတ်စုံနဲ့ ကိရိယာတွေက သုံးလို့မရတော့ဘူး။ ပျက်စီးကုန်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ငါ တစ်ခေါက်ပြန်ရေငုပ်ရလိမ့်ဦးမယ်။ ဟိုပေါ်မှာ တွန်ဂါတာတစ်ယောက်တည်း ပြန်သွားပြီး ဒီကို ခေါ်လာခဲ့မှ ဖြစ်မယ်။"
"ဟင် ---ရှင် တစ်ခေါက် ပြန်သွားလို့ ဖြစ်ပါမလား။ ရှင် သေသွားလိမ့်မယ်။"
ဆယ်လီ စိုးရိမ်၍ ပြောရှာသော်လည်း ခရိတ်က လက်မခံဘဲ ခေါင်းခါလိုက်သည်။
"မသွားလို့ မဖြစ်ဘူး။ ငါ့သူငယ်ချင်း တွန်ဂါတာကို သွားခေါ်မှ ဖြစ်မယ်"
"ဒါဖြင့် လည်း သတိထား သွားပါနော်။ ရှင် ချောချောမောမော ပြန်လာခဲ့ပါ ဒါလင်ရယ်"
သို့ရာတွင် မြေအောက်ရေအိုင်သို့ ပြန်ရောက်သွားပြီး ခေါင်းဖော်ကြည့်လိုက်သောအခါ သူ၏ မျက်လုံး ကျိန်းစပ် လျက် အသက်ရှူ၍ မရသလို ဖြစ်လာလေသည်။
ရန်သူရှိနာစစ်သား များက ဂူအတွင်းသို့ဝင်လာပြီး ဂက်စ်ဓါတ်ငွေ့များ လွှတ်ထားကြောင်း သိသာ ထင်ရှား နေပေသည်။
တွန်ဂါတာ ကိုမူ ရေထဲတွင် ခါးမြှပ်အောင် ဆင်းလျက် ကျောက်တုံှးှကြီးတစ်တုံးအကွယ်တွင် ၀ပ်နေသည်ကို မြင်ရ လေသည်။ သူ၏ ရှပ်အကျီင်မှာ စုတ်နေပြီး အင်္ကျီမှပိတ်စကို နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်တွင် ပတ်ထားသည် ကို လည်း သတိပြုမိလေသည်။"
သူငယ်ချင်း ဂူတစ်ခုလုံးမှာ ရှိုနာစစ်သားတွေ ရောက်နေပြီ"
တွန်ဂါတာ ပြော၍မဆုံးမီပင် အသံချဲ့စက်ဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်လိုအော်ပြောသံကို ကြားရ လေသည်။
"ခင်ဗျား တို့ အခုချက်ချင်း လက်နက်ချ အညံ့ခံရင် ခင်ဗျားတို့ကို အနာတရမဖြစ်စေရဘူး။ ခုချက်ချင်း လက်နက်ချ လိုက်ပါ"
ယင်းသို့ ရာဇသံပေးလိုက်သည်ကို ပိုမို လေးနက်စေရန် လက်တွေ့ပြသည့် သဘောပဲလား မသိ။ အဝေးသို့ လက်ပစ်ဗုံး ပစ်လွှတ်သည့် လောင်ချာ လက်နက်ဆွဲသံကြားလိုက်ရပြီး မရှေးမနှောင်းမှာပင် မျက်ရည်ယို ဗုံးတစ်လုံး ဂူအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကျလာလေသည်။
"သူတို့တွေက ဂူအောက်ကို အလုံးအရင်းနဲ့ ဆင်းလိုက်လာကြပြီး ကျုပ်တစ်ယောက်တည်းနဲ့ သူတို့ကို တားလို့ မရဘူး။"
တွန်ဂါတာက ပြောရင်းနှင့် သူ၏ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဖြင့် ရန်သူဘက်သို့ တစ်ချက်ဆွဲပစ်လိုက်သည်။
နောက်ထပ် ပစ်၍မရတော့ချေ။ ကျည်ဆန် လုံးဝကုန်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
တွန်ဂါတာသည် စိတ်ပျက်ပျက်နှင့် ရိုင်ဖယ်သေနတ်ကို ရေထဲပစ်ချလိုက်ပြီးနောက် မိမိတို့အတွက် နောက်ဆုံး အခြေအနေတွင် အသုံးပြုရန် ၀ှက်ထားသော ကျည်ဆန်လေးထောင့်ကို သတိရကာ သွားယူမည် ပြုရာ ခရိတ်က ရိပ်မိသဖြင့် ဟန့်တားလိုက်သည်။
"သူငယ်ချင်း ဒီလိုလုပ်ဖို့ မလိုသေးပါဘူး။ အခု ကျုပ်တို့ ဒီရေအောက်က ငုပ်သွားရင် တစ်နေရာမှာ ထွက်ပေါက် ရှိတယ်"
ခရိတ် က ဖျောင်းဖျသလို ပြောလိုက်သည်။
"ကျုပ်က ရေမကူးတတ်ဘူးလို့ ပြောထားပြီ မဟုတ်လား"
"မဆိုင်ပါဘူး၊ ခင်ဗျားလိုပဲ လုံးဝရေမကူးတတ်တဲ့ ဆာရာကိုတောင် ကျုပ်ကရေအောက်ထဲက တစ်ခေါက် ခေါ် သွားပြီးခဲ့ပြီ။ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျုပ်က ဖြစ်အောင် ရေငုပ်ခေါ်သွားနိုင်မှာပါ။
တွန်ဂါတာက ခရိတ်၏မျက်နှာကို သေချာစွာ အကဲခတ်ကြည့်နေရာ ခရိတ်က
"သူငယ်ချင်း ကျုပ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစမ်းပါ"ဟုပြောလိုက်သည်။
"ဆာရာက ဘေးကင်းရာကို ရောက်သွားပြီနော်။
"ဟုတ်ပါတယ် သူငယ်ချင်း၊ ဆာရာဟာ ဟိုမှာ စိတ်ချရတဲ့နေရာ ရောက်နေပြီ ဆိုတာ ကျုပ် တာဝန်ခံပါတယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းအနေနဲ့ ရန်သူဘက်က လက်ရဖမ်းဆီးတာကို အဖမ်းခံလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဆာရာနဲ့တကွ ခင်ဗျားတို့ မာတာဘယ်လီ လူထုကိုငဲ့ပြီး ခင်ဗျားက ရန်သူကို ဆက်တိုက်မှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း စဉ်းစားပါဦး။
"ခရိတ်က ဤသို့ပြောလိုက်ခြင်းမှာ တွန်ဂါတာသည် သူတို့ မာတာဘယ်လီ လူမျိုးတွေ ဖိနှိပ်ခံနေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ရေးကို ထိပ်တန်းတင် ဦးစားပေးမည်ဟု တထစ်ချသိ၍ ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
သည်တော့ မှ တွန်ဂါလည်း ခရိတ်၏ စကားကို နားထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
"ကောင်းပြီ ကျုပ် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသာပြောပါ"
"ဘာမှ အထူးလုပ်စရာ မရှိဘူး။ လေကို ၀၀ရှူပြီး အသက်အောင့်ထားလိုက်ပါ။ ကျုပ်က သူငယ်ချင်းကို ရေငုပ်ပြီး ရေအောက်ထဲက ဆွဲခေါ်သွားမယ်"
ထို့နောက် ခရိတ်သည် တွန်ခါတာအား ဆွဲခေါ်ကာ ရေထဲငုပ်ဆင်းသွားလေသည်။ အမှန်တော့ သူသည် အလွန်ပင်ပန်းအားနည်းနေပြီဖြစ်၍ တွန်ဂါထာ၏ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို အလွန်ပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့် ဆွဲခေါ် သွားရ လေသည်။
ရေအောက် ဥမင်လမ်းကျဉ်းသို့ ရောက်သောအခါ ခရိတ်သည် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်နည်းပါးမှုကြောင့် သတိမေ့ချင် သလို ဖြစ်လာသည်။ သတိမမေ့အောင် စိတ်ကို ကြိုးစားတင်း၍ အပေါ်ရေမျက်နှာပြင်ဆီ သို့ တက်ရန် ကူးသွားလေသည်။ သို့သော် ကြာရှည်မထိန်းနိုင်ဘဲ ခရိတ်သည် ရေထဲမှာပင် သတိမေ့ သွားလေ တော့သည်။
သတိမေ့သွားခါနီး သူ၏ စိတ်ထဲတွင် ငါတော့ သေရတော့မှာပဲဟု ထင်မိလိုက်လေသည်။
သို့ရာတွင် မကြာမီ သတိပြန်ရလာတော့မှ မသေသေးကြောင်း သိရလေသည်။ သူ၏ ဘေးနားတွင် လူတွေ ရှိနေမှန်းလည်း သိနေသည်။
ထို့ပြင် ချစ်သူ ဆယ်လီ၏ အသံဖြင့်
"ခရိတ် ... ခရိတ် ... ဒါလင် သတိရလာပြီ မဟုတ်လားဟင်" ပြောသံလည်း ကြားလိုက်ရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တစ်စုံတစ်ယောက်က -
"ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ ပြန်သတိရလာပါပြီ" ဟု ပြောလိုက်သည်။
သူတို့အားလုံးသည် ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေကြလေသည်။
မိန်းကလေး နှစ်ဦးက ထိုနေရာရှိ သစ်သားလှေကားရင်းတွင် ရှိနေကြပြီး ခရိတ်ကို လှေကားတိုင်ရင်းတွင် မှီနေစေ ရန် ၀ိုင်းထိန်းထားကြလေသည်။
တွန်ဂါတာကတော့ ကိုယ်တစ်ပိုင်း ရေထဲမှာပင် ရှိနေလျက် ခရိတ်၏ ဦးခေါင်းရှေ့သို့ ငိုက်ကျမသွားအောင် လက်ဖြင့် ကိုင်ထိန်းထားသည်။
အမှန်တော့ ခရိတ် သတိမေ့သွားချိန်တွင် တွန်ဂါတာက ၀င်ကူထိန်းပေးထား၍သာ ရေနစ်မသေခဲ့ခြင်းဖြစ် လေရာ ခရိတ်သည် အားပြတ်နေသည့်ကြားမှပင် တွန်ဂါတာအား ပြုံးပြလိုက်သည်။
" ဒါနဲ့များ သူငယ်ချင်းက ရေမကူးတတ်ဘူး၊ ရေကို ကြောက်သလေး ဘာလေးနဲ့ ပြောခဲ့သေးတယ် "
ခရိတ်က တွန်ဂါတာအား အထူးကျေးဇူးတင်ဟန်ဖြင့် ပြောလိုက်လေသည်။
ဆယ်လီ သည် အသားတွေ ဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ချမ်းနေရာမှ ...
" ကျွန်မတို့ ဒီမှာ ကြာရှည်ဆက်နေလို့ မဖြစ်ဘူးရှင့် "ဟု လက်တွေ့ အခြေအနေကို သတိပေးလိုက်သလို ပြောလိုက် သည်။
" ဒီနေရာက ထွက်ဖို့ရာ လမ်းတစ်ခုပဲ ရှိတယ် "
ထိုအခါ အားလုံးသည် သစ်သားလှေကားမှ တက်သွားရမည့် မီးခိုးပြောင်းတိုင်ကဲ့သို့ အပေါက်ကျဉ်းဆီသို့ မော့ကြည့်လိုက်ကြသည်။ ထိုနေရာမှ တက်သွားပါက ဘာတွေရှိ၍ ဘယ်နေရာ ရောက်သွားမည်ကိုကား မသိရချေ။
ခရိတ်သည် အားပြတ်လျက်ရှိနေသော်လည်း တွန်ဂါတာ၏ လက်ကိုတွန်းဖယ်ပစ်ကာ ထလိုက်သည်။ ထို့နောက် သစ်သားလှေကား၏ အခြေအနေကို သေချာစွာ လေ့လာစစ်ဆေးကြည့်လေသည်။
ထိုလှေကားမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းဆေးဆရာ (မှော်ဆရာကြီး) များက သစ်ခေါက်ကြိုးများဖြင့် လှေကားကို တုပ်ချည်ကာ ပြုလုပ်ထားလေသည်။ နှစ်ပရိစ္ဆေဒ ကြာမြင့်လှပြီဖြစ်၍ လှေကားသည် ခိုင်ခံ့ပုံ မရတော့ချေ။
" လှေကားကလည်း ကျွန်မတို့အားလုံးတက်ဖို့ ခိုင်ပါ့မလားရှင့် "
ဆာရာက မေးလိုက်ရာ ခရိတ်သည် လှေကားအခြေအနေကို သေချာစွာ ပြန်ကြည့်ပြီးမှ ဖြေလေသည်။
" တစ်ယောက်ချင်း တက်မှဖြစ်မယ်။ လှေကားက သိပ်မခိုင်တော့ဘူး။ အရင်ဆုံး ဆယ်လီက တက်သွား။ ပြီးတော့မှ ဆာရာက လိုက်တက်ရမယ်။ မင်းတို့တက်ရင် ကြိုးတစ်ချောင်းပါ ယူသွား။ အပေါ်ရောက်ရင် အဲဒီကြိုး နဲ့ ကင်းဗတ်အိတ်တွေရယ်၊ မီးအိမ်တွေရယ် ကြိုးနဲ့ ဆွဲတင်ယူရမယ် "
ဆယ်လီသည် ခရီတ်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ကြိုးခွေကို ပခုံးတွင် လွယ်ကာ သစ်သားလှေကားမှ စတင် တက် လေသည်။
သူမ ခပ်သွက်သွက် တက်သွားသဖြင့် လျေကားသည် အသံများမြည်လျက် သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ကြောင့် ဟိုဘက်သည်ဘက် ယိမ်းယိုင်လျက်ရှိလေသည်။
ဆယ်လီ က မီးအိမ်တစ်ခုပါ ယူဆောင်၍ တက်သွားလေရာ အပေါ်နားသို့ ရောက်သောအခါ လူကို မမြင်ရ တော့ဘဲ မီးအိမ်မှ အလင်းရောင်ကိုသာ အောက်မှ လူများက မြင်နေရတော့သည်။
ခဏ မျှကြာလျှင် မီးအိမ်၏ အလင်းရောင်ပါ ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။
" ဆယ်လီ ... ဆယ်လီ "
အောက်မှ လှမ်းအော်ခေါ်ကြည့်သောအခါ ချက်ချင်းပင် သူမက ပြန်ထူးလေသည်။
" ကျွန်မ ဒီပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ အိုကေပါပဲ၊ ဒီပေါ်မှာ ပလက်ဖောင်းလိုလိုတစ်ခုရှိတယ်ရှင့် "
" ဘယ်လောက်ကြီးသလဲကွဲ့ "
" တော်တော် ကြီးပါတယ်။ ကျွန်မ အခု ကြိုးကို ပြန်ချပေးလိုက်မယ် "
ဆယ်လီက ပြောပြီး ကြိုးစကို အောက်သို့ ပြန်ချပေးလိုက်ရာ တွန်ဂါတာသည် ကင်းဗတ်အိတ်များကို ကြိုးစ တွင် ချည်နှောင်ပေးလိုက်သည်။
" ကဲ ... ဆယ်လီရေ ကြိုးစကို ဆွဲတင်တော့ဟေ့ "
ဆယ်လီ သည် ကြိုးစကို အပေါ်သို့ ဆွဲတင်ယူလိုက်သည်။
" အိုကေ အခု ဆာရာကို လွှတ်တင်လိုက်တော့ "
ဆယ်လီ က အပေါ်မှ လှမ်းပြောသဖြင့် ဆာရာသည် လှေကားမှ တက်သွားလေသည်။
မကြာမီ မိန်းကလေးနှစ်ဦး တီးတိုးပြောသံကို သဲ့သဲ့မျှ ကြားကြရလေသည်။
" အိုကေ နောက်တစ်ယောက် တက်လာပေတော့ "
ဆယ်လီ က အပေါ်မှ ခေါ်ပြန်သဖြင့် ခရိတ်သည် တွန်ဂါတာအား -
" ကဲ ... သူငယ်ချင်း အရင်တက်သွားပါ " ဟုပြောလိုက်သည်။
သို့သော် တွန်ဂါတာက လှေကားဆီသို့ မသွားဘဲ ...
" သူငယ်ချင်းက ကိုယ်အလေးချိန် နည်းတယ်မဟုတ်လား၊ ခင်ဗျား အရင်သွားနှင့်ပါ "ဟု ပြောရာ ခရိတ်သည် စိတ်မရှည် သလို ဖြစ်လာလေသည်။
" ကျုပ်က သွားဆိုရင် သွားစမ်းပါဗျာ ပြန်ပြီး ငြင်းခုံမနေပါနဲ့ မြမနမြန်သာသွားလိုက်စမ်းပါ "
သည်တော့မှ တွန်ဂါတာသည် ဆက်မငြင်းတော့ဘဲ သစ်သားလှေကားပေါ်သို့ စတင်တက်လိုက်သည်။ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်က အတော်များလေရာ သစ်သားလှေကားဟောင်းသည် ဒဏ်ကို ခံနိုင်ပုံမရချေ။ လှေကားထစ် တစ်ခုသည် တွန်ဂါတာ၏ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မခံနိုင်ဘဲ ပြုတ်ထွက်ကျသွားလေသည်။
" သူငယ်ချင်း အောက်က ရှောင်လိုက်ဦး "
တွန်ဂါတာက အရေးတကြီး ဟစ်အော်သတိပေးလိုက်သဖြင့် ခရိတ်လည်း လျင်မြန်ဖျတ်လတ်စွာ တစ်ဖက်သို့ တိမ်းရှောင်လိုက်စဉ်မှာပင် လှေကားမှ ပြုတ်ကျလာသော သစ်သားတန်းသည် ခရိတ်၏ ဘေးမှ ကပ်၍ အောက်သို့ ကျသွားလေသည်။
တွန်ဂါတာက သတိထားလျက် လှေကားမှ အပေါ်သို့ ဆက်တက်သွားလေရာ လူပါ ပျောက်ကွယ်သွားလေ သည်။
သို့သော် သူ၏ အသံကိုတော့ ကြားနေရသည်။
" သူငယ်ချင်း ခရိတ်၊ လှေကားကတက်ရင် အထူးသတိထားပြီး တက်ပါ။ လှေကားက တော်တော်ဆွေး နေပြီ။ လုံးဝ မခိုင်တော့ဘူး "
ခရိတ်လည်း ရေထဲမှ အပေါ်သို့ လျင်မြန်စွာ တက်၍ သူ၏ ခြေတုတစ်ဖက်ကို တပ်ဆင်လိုက်လေသည်။
" အိုကေ ကျုပ်တက်လာတော့မယ် "
ပြောပြောဆိုဆို ခရိတ်သည် သစ်သားလှေကားမှ စတင်တွယ်တက်လေသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် ဆန္ဒစောပြီး ရှေ့လောကြီးစွာဖြင့် တက်သွားသောကြောင့် နဂိုက ဆွေးနေသော လှေကားသည် ကျိုးပဲ့ပြုတ် ကျတော့မလို အသံများ မြည်စပြုလာလေသည်။
ခရိတ်လည်း ထိတ်လန့်လျက် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တွင်း၏ အပေါ်နှုတ်ခမ်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော သစ်သားတန်းကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရသည်။ သူ၏ ခြေနှစ်ဖက်က သစ်သားလှေကားထစ်ပေါ်တွင် မရှိဘဲ လွတ်နေပြီ ဖြစ်လေသည်။
" သူငယ်ချင်း တွန်ဂါတာ ကျုပ် ဘယ်လိုမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူး။ နောက်ထပ် လှုပ်တာနဲ့ လှေကားတစ်ခုလုံး ပျက်ကျပြီး ကျုပ်ပါ အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ် "
ခရိတ် က အပေါ်သို့ လှမ်းပြောလိုက်သဖြင့် တွန်ဂါတာသည် အပေါ်မှနေ၍ ကြိုးစတစ်ခု ချပေးလေသည်။
ခရိတ် က ထိုကြိုးကို ဖမ်းဆွဲကိုင်မိလျှင် တွန်ဂါတာသည် အပေါ်မှ ဆွဲတင်လိုက်သည်။
ခရိတ်သည် အလွန်ပင်ပန်းပြီး အားနည်းနေပြီဖြစ်ရာ တွန်ဂါတာ၏ ခွန်အားဗလအထူးကောင်းမွန်၍သာ ယခုကဲ့သို့ မိမိအား ကောင်းစွာဆွဲတင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိကာ တွန်ဂါတာအား အထူး ကျေးဇူးတင် မိလေသည်။
ကြိုးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲတင်၍ မကြာမီ အပေါ်သို့ ရောက်သွားလေရာ ဆယ်လီ၏ မျက်နှာကလေးကို မြင် လိုက်ရသောအခါ ခရိတ်သည် ချက်ချင်းပင် အားတက်သွားမိလေသည်။
အပေါ်သို့ ရောက်သွားပြီးနောက် ခရိတ်သည် ခေတ္တနားနေပြီးမှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်လေ သည်။
ယခု သူတို့လေးဦးရောက်ရှိနေသော ပလက်ဖောင်းသဖွယ် ကျောက်ပြားမှာ ထုံးကျောက်များဖြင့် သဘာဝ အလျောက် ဖြစ်နေသော ကျောက်ပြားကြီးတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် သူတို့သည် လိုဏ်ဂူကြီး၏ အပြင်ဘက်သို့ မရောက်သေး။ ဂူကြီး၏ ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းတစ်နေရာတွင်ပင် ရှိနေကြသေးသည်။ သေချာစွာ ကြည့်လိုက်သောအခါ ထိုနေရာမှတစ်ဆင့် သွား နိုင်သည့် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းငယ်တစ်ခုကို တွေ့ရပြန်လေသည်။
" အဲဒီ လိုဏ်ခေါင်းလမ်းက သွားကြရမှာပဲထင်တယ်။ တခြားလမ်းလည်း မရှိဘူး။ တစ်ချိန်တုန်းက မှော်ဆရာကြီးတွေလည်း ဒီလမ်းက သွားခဲ့တာ ဖြစ်မှာပါပဲ "
ဆယ်လီက ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်သည်။
မည်သူကမှ ပြန်မပြောကြချေ။ အားလုံးမှာ မောပန်းပြီး ရိုးတွင်းခြင်ဆီသို့ တိုင်အောင် အအေးဒဏ်ကို ခံနေကြရလေသည်။
" ဒီလိုပဲ ထိုင်နေကြလို့ မဖြစ်ဘူးရှင့်။ ကျွန်မတို့ အားလုံးကြိုးစားပြီး လှုပ်ရှားသွားလာနေမှ တော်လိမ့်မယ် "
ဆယ်လီက ထပ်မ့ပြောလိုက်တော့မှ ခရိတ်သည် ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်နေရာမှ ကြိုးစား၍ မတ်တတ်ထ လိုက်သည်။
Posted by SHWE ZIN U at 5:52 AM4comments Links to this post
မြစိမ်းပြာ ကမာရွတ် အပိုင်း (၂၁)
အဲဒါပေါ့၊ ဦးအကြောင်းကို မသိကြသေးတော့ လတ်မေမေတို့၊ လတ်မောင်နှမတွေ တို့က ဦးကိုအရက်ပဲ သောက်နေတဲ့ လူပျိုကြီးကျောင်းဆရာလို့ ထင်ကြသေးတာ။ လတ်ကို အမျိုးဖျတ်တာပေါ့။ အသက်ကြီးတယ်၊ အရက်သောက်တယ်၊ လူ့ခွစာကြီး၊ ပိုက်ဆံလည်း မရှိဘူး၊ ဘာညာနဲ့ပေါ့။ အဲ- အင်္ဂလိပ်စာ သိပ်တော်တာနဲ့ ကျူရှင်အောင်မြင်တာကိုတော့ သူတို့အသိအမှတ်ပြုရတယ်လေ။ လတ်တို့မောင်နှမတွေအကုန်လုံး၊ လတ်တို့ တစ်ဆွေ တစ်မျိုး လုံး ဦးရဲ့ တစ်ပည့်တွေချည်းကိုး။
ဦးနဲ့လတ်ရဲ့ ဖူစာကလဲဆန်းပါတယ်။ လတ်တက္ကသိုလ်မှာ ဦးအင်္ဂလပ်စာ ကလပ်စ်က နာမည်ကြီးလွန်းလို့ ကိုယ့်မေဂျာနှင့်မဆိုင်ဘဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လိုက်တက်တာလေ။ ဦးကလပ်စ် နာမည်ကြီးတာကလဲ တခြားဆရာ တွေလို ချောလို့ လှလို့မဟုတ်ဘူး။ စာသင်သိပ်ကောင်းပြီး ဦးရဲ့အသံနဲ့ ဟန်ပန်က ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီး တာ။ပြီးတော့အော်တဲ့ ငေါက်တဲ့နေရာမှာလဲ အဲဒီကတည်းက နာမည်ကြီး ပါ သတော်။ (ခုတော့လဲ ကိုယ်မှာ လက်တွေ့ပေါ့)
ဦးက စည်းကမ်းအရာမှာလဲ နာမည်ကြီး။သူ့ကလပ်စ်ဟာ သူစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်မှ စကား မပြောရဘူး။ ဟေ.. ဟားနဲ့လဲ သံသေးသံညောင်မအော်ရဘူး ဆရာကရယ်စရာပြောရင် ရယ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်ရုံ သင်ရုံပဲ မပြီးနိုင်မစီးနိုင် တအားအော်မရယ်ဘူး။
သူ့စည်းကမ်းကို လိုက်နာနိုင်ရင် ကလပ်စ်ထဲဝင်ခဲ့၊ မလိုက်နာနိုင်ရင်မ၀င်ခဲ့နဲ့။ ၀င်ခဲ့ပြီးမှ စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက် လို့ကတော့ ဦးသက်ဦးအကြောင်းပြလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ "ဟေ့ကောင်" ဆိုတဲ့ ဒေါသအော်သံ ဟာ ကလပ်စ် တစ်ခုလုံးကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေပြီးမှ အဲဒီစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တဲ့ ကျောင်းသားကို ပက်ပက် စက်စက် လက်ညှိုးငေါက်ငေါက် ထိုးပြီးပြောတော့တယ်။ ပြီးတော့မှ "ဂက်အောက်" ဆိုတဲ့ မိုးချုန်း သလို အော်သံကြီးနဲ့ ထွတ်သွားခိုင်းတော့တာပဲ (ခု...ကျူရှင်မှာလဲအဲလိုပါပဲ)။
လတ်ကဦးကလပ်စ်မှာ ဦးဒေါသဖြစ်တာနဲ့တစ်ခါကြုံဖူးတယ်၊ ဦးအော်လိုက်တာ လတ်တုန်သွားပြီး ဖောင်တိန်တောင်လွတ်ကျသွားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ မလတ်လတ်ထွေးက ဦးကို စိတ်ဝင်စား နေပြီလေ။ အိပ်မက်တွေမှာတောင် ထည့်မက်တတ်နေ ပြီလေ။ ကွယ်ရာမှာဦးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျောင်းသူ တွေ ချစ်စနိုးခေါ်တဲ့ ဦးသက်ဦး အဖျားဆွတ်အတိုကောက် "ဦး" ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုလဲ လတ်ခေါ် နေတတ်ပြီ။
ဦးကတော့ လတ်ကို ပထမ သတိမထားမိပါဘူး။ နောက်မှ လတ်က ကဲပြီး ဦးနဲ့နီးအောင် ရှေ့ဆုံးတွေမှာ သွားထိုင် မှ ဦးသတိထားမိတာပါ။ ဒါတောင်ခပ်တည်တည် ကြီးကြည့်တာပါ။ အဲဒီခပ်တည်တည် အကြည့်ကြီး ကို လတ်ကသာ ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်ရတာ။
ဒီလိုနဲ့ စာမေးပွဲဖြေခါနီး၊ ကျောင်းပိတ်ခါနီး လတ်သွားတတ်တဲ့အချိန်မှာ ကလပ်စ်ပြီးတော့ လတ်ချန်နေ ခဲ့တယ်။ ကလပ်စ်ထဲမှာ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေနဲ့ ဦးကြာကြာနေတတ်တယ်ဆိုတာ လတ်သိတာကိုး။
လတ်လူတွေရှင်းအောင် စောင့်နေတယ်။ ရည်းစားစကားပြောမလို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးကိုခွဲခွာခြင်းအနေနဲ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါ။ လတ်က ဖိုင်နယ်လေ။ ဦးနဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်။
လူတွေရှင်းတာနဲ့ ဦးထိုင်နေတဲ့ စားပွဲပေါ်ကို ဒိုင်ယာရီ အသစ်လေးလတ်သွားတင် လိုက်တယ်။ ပေးသာ ပေးရတာ၊ ကြောက်ကြောက်နဲ့ပါ။ "ဆရာ့အတွက် လက်ဆောင်" ဆိုတဲ့စကား ပြောတာတောင်တုန်လို့။
စာအုပ်တင်ပြီးတာ နဲ့ လတ်က လစ်ပြေးမလို့ရှိသေး၊ ထူးခြားစွာ နူးညံ့ချိုသာနေတဲ့ အသံတစ်ခုက "နေဦးလေ" တဲ့။ မယုံနိုင်စရာ ပြုံးကြည့်နေတဲ့ ဦးရဲ့သိမ်မွှေ့တည်ငြိမ်တဲ့ မျက်နှာကို လတ်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ "ဒီမှာ...လာကြည့်စမ်း"တဲ့ ဦးလက်ညှိုး ထိုးပြနေတဲ့ စားပွဲပေါ်ကို လတ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ ကြည့် လိုက်တော့ မြေဖြူနဲ့ဆွဲထားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းပုံလေးတွေ။ ဆံပင်တိုတို ပခုံးဝဲလေးနဲ့။ အဲဒီ မြေဖြူ ပန်းချီပုံတွေထဲက ကောင်မလေးဟာလတ်ပေါ့။ လတ်လတ်ထွေးပေါ့။ ကြည့်စမ်း အလျင်နေ့ တွေကတည်း က ကလပ်စ်ကို တစ်ခုခုလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခိုင်းထားတဲ့အချိန်ဆို.. ဦးတစ်ယောက်စားပွဲပေါ်မှာ မြေဖြူ နဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ် လုပ်နေတာ ဒါတွေကိုး။
လတ်လေ...အဲဒီတုန်းက အရမ်ပျော်သွားတာပဲ သိလား။ ဒါပေမယ့် ဦးနဲ့လတ်တို့ နောက်နှစ်နှစ်နေမှ ပြန်ဆုံ ရတာပါနော်။ အဲဒီနေ့က လတ်ရှက်ပြီး ချက်ချင်းထွတ်ပြေးခဲ့တာပဲ နောက်တော့ လတ်ကျောခိုင်းပြီး၊ မူလတန်း ကျူရှင်ဆရာမ လုပ်တဲ့ ကျောင်းကိုလဲ မရောက် ဖြစ်ပါဘူး။ နှစ်နှစ်လောက် ရှိတော့မှ ဦး တစ်ယောက် ကျောင်းကထွတ်ပြီး ကျူရှင်ဖွင့်နေတယ် ဆိုတော့မှ လတ် ညီမလေးတစ်ယောက်ကို အကြောင်း ပြပြီး လတ် နဲ့ ဦးပြန်တွေ့ကြတာ။
အိမ်ကသဘောမတူဘူးဆိုတော့လဲ လတ်ဦးရှိရာကို ဆင်းလာခဲ့တာပဲ။ ဦးသူငယ်ချင်း အခန်းပေါ့။ ဦးက အဲဒီမှာ နေတာကိုး ။တက္ကစီတစ်စီနဲ့ လတ်ရဲ့အ၀တ်အစား သေတ္တာ အလုအပ ပစ္စည်းသတ္တာ အကုန် ပါတယ်။ ဘယ်သူကလိုက်ပို့တုံးဆိုတော့ ဦးရဲ့တပည့်ဟောင်း လတ်ရဲ့ အစ်ကိုလေးလေ။ အိမ်မှာ သူတစ်ယောက် ပဲ လတ်ဘက် က မဲပေးတာလေ။
အိမ်မှာလူကြီးတွေရော၊ ကလေးတွေရောမရှိတဲ့အချိန် လတ်က သေတ္တာထမ်းချ၊ ကားငှားပြီးလိုက်ပို့တာ။ ဦးတောင် အံ့သြလို့။
နောက်တော့လဲ မေမေနေမကောင်းတဲ့အချိန် သူတို့လာခေါ်ကြပြီး ပြေလည်တာပါပဲ။ ရယ်စရာ ပြောတတ် တဲ့ လတ်ဖေဖေက အမြဲပြောတယ်။ "ငါတော့ဝဋ်လည်ပါပြီကွာ၊ ငါ့သားကြီးဆရာဝန်ကို ယောက္ခမ က ဆရာ၊ဆရာနဲ့ ခေါ်ရတာကို ငါကအသားယူနေတာ၊ ခုတော့ ငါ့မယ် သမက်ကို ဆရာ ခေါ်ရတော့မယ်"တဲ့ ရယ်ရတယ်။ ဦးကို ဖေဖေက သားသမီးတွေရဲ့ဆရာဆိုပြီး ဆရာခေါ်တာကိုး။ ဒါပေမယ့် လတ်ဖေဖေ က လည်တယ်။ သမက်ဖြစ်မှ ဆရာမခေါ်တော့ဘူး။ ပြောင်းခေါ်တယ်။ "ကိုသက်ဦး" တဲ့။
လတ်ပြုံးလိုက်မိတယ်။ ဖေဖေနဲ့မတွေ့ရတာတောင်ကြာပြီ၊ ဒီတစ်ပတ်နားရက်ကိုတော့ သွားနိုင်အောင် ကြိုးစား ရမယ်။
လတ်ကကော်ဖီဖျော်ပြီးသားကို ပန်းကန်နှစ်ခုထဲလောင်းထည့်လိုက်ရင်း အခန်းထဲမှာ မင်းမူ နေတဲ့ ကွီကွီ ကွာကွာစက်သံနှစ်ခု ကို လွှမ်းသွားအောင် အော်လိုက်တယ်။ "ဦးရေ.. အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ" "အိုကေ.. အိုအေ"
စားစရာသောက်စရာတွေကို စတီးလင်ဗန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီး လတ်ဧည့်ခန်းကို ထွက်လာတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ဦးက ရေဒီယိုတစ်ဖက် ၊ရီမုတ်ကွန်ထရိုးကို တစ်ဖက်ကိုင်လို့ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ..။
တီဗွီမှာ သူမကြည့်ချင်တာ၊ မမြင်ချင်တာပါရင် ဒေါသနဲ့မြန်မြန်ပိတ်ဖို့ ရီမုတ်ကွန်ထရိုး က အမြဲ ကိုင်ထား ရတာလေ။ " ဦး..စားလေ"
ရေဒီယိုကို နားနားကပ်ထောင်နေရာက ဦးခေါင်းညိတ်လိုက်တာနဲ့ "ဟတ်ချိုး"ဆိုတဲ့ ချေသံ ထွက်လာတော့ တာပဲ။"ဟော..ချေပြီဗျို့၊ ကျုပ်အအေးပတ်ပြန်ပြီထင်တယ်"
"ကောင်းတယ်၊ကောင်းတယ်၊ပပ်မှာပေါ့ ၊ကလေးကျနေတာပဲ လတ်ပြောတာဘယ် တော့မှ နားမထောင် ဘူး အကျီင်္တုံးလုံး ကျွတ်ကြီးနဲ့ မနေပါနဲ့၊စွပ်ကျယ်လက်ပြတ်လေး ၀တ်ထားပါလို့ အာပေါက် မတတ် ပြောတယ်၊ ဒါချွေးအေးပတ်တာနားလည်လား၊ အပြင်က ပြန်တာနဲ့ ချွေးတွေသံတွေနဲ့ အကျီင်္ကိုချွတ် ၊ပြီးတော့ တုံးလုံးကျွတ်နဲ့နေဆိုတော့ ချွေးအေးပတ်တာပေါ့" "ကျုပ်ဒီလိုပဲ နေတတ်တာပဲ ဥစ္စာ" "ခဏခဏ ဖြစ်နေတော့ ဘယ်ကောင်းဦးမလဲဦးရဲ့"
ချွေးအေးပတ်ပြီး နှာမွှန်ခြင်းကိစ္စနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လတ်ဦးနဲ့စကားပြောရပြီ။ သူများလိုခံနိုင်ရည် ရှိတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ နှာခေါင်းကြီးက ပိတ်ပြန်ပြီ။ နှာသံကြီးနဲ့ စာသင်ရတာမကောင်းဘူးနဲ့။ ဒေါသကကြီး ပြီး တစ်ဖျစ် တောက်တောက် နဲ့ မပြီးတော့ဘူး။ ဟောပြောရင်းဆိုရင်းချေပြန်ပြီ။ ဟတ်ချိုးတွေဆက်တိုက်လာပြန်ပြီ။
"ဦးဆေးသောက်ရအောင်" လတ်က ဖျိုးဖျိုးဖျတ်ဖျတ်နဲ့ ထိုင်ရာကထပြီး ဆေးသွားယူပေးတယ်။ တစ်လက်စ တည်း စပို့ရှပ်အကျီင်္တစ်ထည်ပါ ယူခဲ့တယ်။
"ရော့..အကျီင်္အလျင်ဝတ်ရမယ်" ဦးမျက်နှာက ရှုံ့မဲ့သွားတယ်။ "အိမ်မှာနေရင် ကျုပ်ကအကျီင်္ကို မ၀တ်ချင်တာ အခန်းကြီးက သိပ်အိုက်တာ၊ လှောင်နေတာ" "၀တ်ပါဦးရယ်၊ မ၀တ်ရင် ဦး ဖျားလိမ့်မယ်၊ ကလပ်စ် ပျက်လိမ့်မယ်" "ခက်တာပဲ"
ဦးကညီးညီးညူညူနဲ့ အကျီင်္ဝတ်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ချက်ချေလိုက်တယ်။ ကဲတွေ့တယ်မဟုတ်လား၊ ရော့... ဆေးသောက် ဘာမီတွန်လေ "ဘာမီတန်ပါ၊ ဘယ်နှယ့်ဘာမီတန်လဲ၊ လတ်မေ့သွားလို့ " အသံထွက် က သိပ်ညံ့တာပဲ အဲဒါသင်တဲ့ ဆရာညံ့လို့ပေါ့" ဆေးသောက်နေတဲ့ဦးကို လတ်မျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်။ ကျုပ်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူးနော်၊ ခင်ဗျားရဲ့ ငယ်စာသင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဆရာညံ့တာပေါ့။
ဦးက ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ဖြန့်ပြလိုက်သေးတယ်။ စာသင်ခန်းထဲမှာ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တွေ သဘောကျတဲက ဆရာဦးသက်ဦးရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာ တစ်ခုပေါ့။
အိုး...ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ။ ဆိုနေတဲ့ပုံကြီးကလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်း ၀လိုက်တာ လာခဲ့စမ်း။
ဦး က သူ့ရီမုတ်ကွန်ထရိုးကိုအားရပါးရ နှိပ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဟတ်ချိုးတစ်ချက် ချေလိုက်တယ်။
ဟာနှာရည်တွေယိုလာပြီကွာ၊ ဒုက္ခပဲ၊ လက်ကိုင်ပ၀ါ၊ လက်ကိုင်ပ၀ါ..ချတ်လစ် "ရမယ်..ရမယ်ဦး။
လတ်တစ်ယောက် အိပ်ခန်းထဲ ပြေးရပြန်တယ်။ ဦးကလက်ကိုင်ပ၀ါ အဖြူလေးကို မြန်မြန်လှမ်းယူရင်း နှပ်ညှစ်တယ်။ ဒေါသနဲ့။ နှပ်ညှစ်တာတောင်ဒေါသနဲ့။ ဦးဟာလေ တကယ်ပဲ။
"တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆိုးလာပြီ၊ ဦးဒီည ဘောင်းဘီဝတ်အိပ်။ ဒါပဲ ။ မကျေနပ်သလို စောဒကတက်ချင်သေးတဲ့ ဦးကို လတ်မျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်တော့မှ ငြိမ်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ အအေးပတ်နေတာကို။ ညမှာစောင်လဲကပ်လို့မရ၊ ဘာလဲကပ်လို့မရတဲ့ လူဟာ ဘောင်းဘီဝတ်အိပ်မှပဲ ဖြစ်မှာပေါ့်။
နောက်တော့မဖြစ်ဘူး၊ ဦးအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ စွပ်ကျယ်ဝတ်၊စွပ်ကျယ်ဝတ်ဆိုတဲ့ အသံလေးကို ကက်ဆက်နဲ့သွင်းပြီး ဖွင့်ပြထားရမယ်။ "လုပ်ပြန်ပြီ ဘာကက်ဆက်လဲ။ "ကက်ဆက်"ပါ " လတ်မှ မခေါ်တတ်ဘဲ" "ခေါ်တတ်အောင်ခေါ်ပေါ့ ၊ အမှားကြီးအတိုင်း အသံထွက်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ"
တော်ပြီ၊ လတ်စိတ်ညစ်တယ်၊ သူလိုမှ လတ်အသံမထွက်တတ်ဘဲ။ ကြာတော့ ဦးရှေ့မှာ အသံ ထွက်ရမှာ ကြောက်တာ နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကို မသုံးပဲရှောင်ကြဉ်ခဲ့တာ လတ်အင်္ဂလိပ်စာမှ တတ်သေးရဲ့ လားတောင် မသိတော့ဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘီအေဘွဲ့ရမှန်း တောင် မေ့နေပါပြီ။ အသံထွက် ပြင် တဲ့ နေရာ မှာတော့ အိမ်ကမိန်းမမပြောနဲ့၊ လမ်းမှာကြုံ တဲ့လူတောင်ပြင်ပေးတာ၊ သူ့ရှေ့မှာ အကြားမတော် လာလုပ်လို့ ကတော့ အားမနာပါးမနာ ပြင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ပြောလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါစာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စာအုပ်တွေကြည့်နေရင်းက လူတစ်ယောက်က စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ကြည့်ပြီး စာရေးဆရာနာမည်ကို ဖတ်လိုက်တာပေါ့။ ဆမ်းမားဆက် မော်ဂင်လို့ ဖတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာဦးသက်ဦး တစ်ယောက် သူ့နောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ကံဆိုးသူမောင်ရှင် မသိရှာဘူး။ တစ်ခါတည်း အဲဒီဖတ်သံ ကြားတာနဲ့ မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့ပြီး" ဘာတွေရှောက်ဖတ်နေတာလဲ မှားနေတယ်၊ အဲလို အသံ မထွက်ရဘူး၊ ဆမ်းမားဆက်မွန်လို့ အသံထွက်ရတယ် နားလည်လားလို့ ပြောချလိုက်တာပဲ ဟိုလူစိမ်း ခမျာက သဘောကောင်းလို့ တော်ရှာသေးရဲ့ ။မချိပြုံး၊ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ "ဟုတ်. ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ၊ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်"လို့ပြော ရှာတယ် "အမယ် " သူကတော့ အဲဒီလူကို လှည့်တောင်မကြည့်တော့ဘူး။ ကြည့်စရာ ရှိတဲ့ စာအုပ်တွေပဲ ရှေ့ဆက်ကြည့်နေတယ်။ လတ်မှာသာထိတ်လို့။ ကဲ..တကယ်လို့ ဟိုလူက ရှက်ပြီး လူတွေကြားထဲမှာ ခင်ဗျားနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ ဘာညာနဲ့ ရန်ဖြစ်ကုန်ရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲလို့။
တစ်ခါကလဲ ဂျပန်သံရုံးက ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပြန်အလာ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာပေါ့၊ လတ်တ်ို့ နောက်ဆုံးခုံတန်းကလူ နှစ်ယောက်ကလဲ ဂျပန်သံရုံး ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ပြန်လာတာနဲ့တူပါတယ်။ အဲဒီရုပ်ရှင် အကြောင်းကို နှစ်ယောက်ပြောကြပါလေရော။ ပြောတာတွေက တလွဲတချော် ဘာသာပြန်ပြီး ပြောနေ ကြတာ။ အဲဒါကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် နေပါလား။ မနေဘူး၊ တစ်ခွန်းကြားလိုက်တာနဲ့မျက်နှာက တစ်ခါ ရှုံ့မဲ့လိုက် ၊ဟိုဘက်လှည့်ရှုံ့မဲ့၊ ဒီဘက်လှည့်ရှုံ့မဲ့လိုက်နဲ့ဟာ နောက်ဆုံးတော့ ပက်ခနဲပြောချ လိုက်တော့ တာပါပဲ "လူတွေက တော်တော်ခက်တယ်၊အင်္ဂလိပ်စာလေး ချောက်တီးချောက် ချက်နဲ့၊ အရမ်းဘာသာ ပြန်ချင်ကြတယ်၊ ပြန်တော့တလွဲတွေ၊ အရှက်ကို မရှိကြဘူးတဲ့"
ဟိုလူတွေကြားတာပေါ့။ ရှေ့ခုံနဲကနောက်ခုံ၊ အသံကလဲ အကျယ်ကြီး၊ ဟိုလူနှစ်ယောက်သံ ငြိမ်သွားတာပဲ၊ လတ်တော့ နောက်ကျောကိုချမ်းနေတာပဲ။ လှည့်လဲမကြည့်ရဲတော့ဘူး။တော်ပါသေးတယ်။ ဟိုလူနှစ်ယောက်က ရှေ့မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းသွားလို့။ အဲ.. ဆင်းခါနီး မိုက်ကြည့်က ကြည့်သွားသေးတယ်။ အဲဒါ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်။ ကိုယ့်ရိုက်မသွားတာကံကောင်း။ အဲဒီလို အဲဒီလို ဦးသက်ဦးတို့ကတော့။
ဒါက ရီမုတ်ကွန်ထရိုး ပြန်နှိပ်ပြီး တီဗွီပြန်အဖွင့်မှာ သူသဘောကျတဲ့ အဆိုတော်ကို မြင်ရလို့ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဦးရဲ့ ရှားရှားပါးပါး ကျေနပ်သံလေ။
မြ၀တ်ရည်ဝသွားပြီကွာ၊ ဟိုတုန်းကပိန်ပိန်လေး၊ မြို့မခင်အုန်းမြင့်တုန်းက ပိန်ပိန်လေး၊ ခုဝသွားပြီကွာ အသံလေးကတော့ ကောင်းပါသေးတယ်။
သူတို့ အညာက မြို့မတီးဝိုင်းနဲ့အဆိုတော် ခင်အုန်းမြင့် (မြ၀တ်ရည်)ကိုတော့ ဦးကစွဲလန်းသလားမမေးနဲ့။ နှစ်ခြိုက် သလားမမေးနဲ့။ သူလူပျိုဘ၀က မြို့မနောက်ကို တကောက်ကောက်လိုက်နားထောင်ခဲ့တာလေ။
"ဟေး...သိကြားနဲ့ အသူရာ သမက်နဲ့ ယောက္ခမ ကျလို့လဲ အားမရနိုင်ရှာ၊ ဒါကို အနားက မတောင်းပန်ရှာ"
ဟော....ဟော၊ လုပ်ပြီ လုပ်ပြီ။ သူကြိုက်ရင် စိတ်ထဲမမူးဘဲနဲ့ လိုက်ဆိုပြီ။ အသံကျယ်ကျယ်ကြီးနဲ့ အသံကုန် အော်ပြီး။ပန်းကန်လင်ပန်းကို ကိုင်ပြီး မီးဖိုထဲ သွားတော့မယ့် လတ်ကိုလက်ညှိုးကထိုးလို့။
"ယောက္ခမဆိုတာ တည့်အောင်ပေါင်း၊ ကျောင်းကိုထုတ်၊ ဥပုသ်ရက်ရှည် စောင့်ခိုင်းမှာ ဟား..ဟား
ဦးကစိတ်လွတ်လက်လွတ် အားရပါးရ အော်ရယ်နေတယ်။ ဦးကဒီလိုချိန်မှာတော့ သိပ်ကို ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဦးသီချင်းဆက်ဆိုနေတုန်း လတ်ကမီးဖိုထဲမှာ ပန်းကန်တွေ ဆေးကြော သိမ်းဆည်း တယ်။
လတ်မီးဖိုထဲက ထွက်လာတော့ တီဗွီကရှစ်နာရီတီးလုံးလာနေပြီ။ လတ်သတိရတ အောက်မြန်မြန်ဆင်းပြီး ရေခလုတ်သွားဖွင့်လိုက်တယ်။ တော်သေးတယ်။ နေ့လယ်က ညနေရေချိုးဖို့ဖွင့်ထားလိုက်လို့။ ညနေက တစ်ချိန်လုံး အောက်လွှာ က ဖွင့်နေတာ။
လတ်ပြန်တက်လာတာနဲ့ ရှစ်နာရီ တီဗွီတီးလုံးဆုံးတာနဲ့ပဲ။ သတင်းကြော်ငြာမဲ့ သူပေါ်လာတယ်။
တီဗွီရီမုတ်ကွန်ထရိုးကို ပြင်နေပြီ ။ ဒေါသအပြည့်နဲ့နှိပ်တယ်ရှင်။ နှိပ်ပြီး နှိပ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ဖက်ရေဒီယိုကို ပြန်ဖွင့်ပြန်တယ်။ ကွီကွီကွာကွာ၊ ရှဲရှဲသံတွေ ဆူညံလာပြန်တယ်။ လတ်ကတော့ အဲလိုအသံတွေကို အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒါတွေနဲ့ ဦးအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လတ်က ကုလားထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာ အေးအေး ဆေးဆေး ထိုင်ပြီးတစ်ချောင်းထိုး ထိုးနေ လိုက်တာပဲ။ ဆောင်းမကုန်မီ သိုးမွေးအင်္ကျီရောင်စုံ ၀တ်ချင်လို့။ တစ်ရောင်ကျန်တာ လတ်မယ်အမီထိုးနေရာတာ။ ဦးအသံတွေကို တစ်ခါတစ်ခါ ကြားတောင်မကြားဘူး။
လတ်မှာ တစ်ချောင်းထိုး ထိုးစရာတွေကတော့ အမြဲရှိနေတာပါပဲ။ တီဗွီအဖုံး၊ ဆက်တီစားပွဲခင်း၊ ကုလား ထိုင်စွပ်၊ မှန်တင်ခုံအဖုံး။ အကုန် လတ်လက်ရာတွေချည်းပဲ။ ရောင်စုံထိုးထားတာ။ အရောင်ဆန်းပေါ်ရင် တစ်ခါ ထပ်ထိုး တာပဲ လတ်သိပ်ဝါသနာပါတာ။ အဲဒါကြောင့်လဲ လတ်တို့အခန်းဟာ သိပ်ကို လှပ ကျက်သရေ ရှိနေတာပေါ့။ ဒီနေ့အပြာဆို ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံးအပြာ။ (တံခါးပေါက်ခန်းဆီးလဲ ဧည့်ခန်း တစ်ခုလုံး အပြာရောင်)။ (တံခါး ပေါက်ခန်းဆီးလဲ လတ်ရောင်စုံ ချုပ်ထားတယ်)။ နောက်နေ့ အစိမ်းဆို ဧည့်ခန်း တစ်ခုလုံး အစိမ်း။
ဧည့်ခန်းကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ အေးချမ်းပြီးကြည်နူးသွားစေရမယ်။ ခုဆို လတ်နောက်ထပ် အသစ်ထိုးနေရာက ဦးပန်းအိုးလေးတွေ အောက်မှာ အလှခံတင်ဖို့ တစ်ချောင်းထိုး ဇာအ၀ိုင်းထိုးသေးသေးလေး တွေလေ။ ပွင့်မယ့်ပန်းရဲ့ အရောင်ကိုလိုက်ပြီး အောက်ကဇာ ကိုထိုးရတာ။ လတ်ကတော့ အရောင်ရှာရတာကို ပျော်နေတာပဲ။ ဒီလိုပဲ အကျီင်္နဲ့ လုံချည်အရောင်ဟပ်ဖို့တို့၊ ဖဲပြားနဲ့ဖိနပ် အရောင်ဟပ်ဖို့တို ဈေးမှာ လိုက်ရှာရတာ ကိုလည်း လယ်တော့မှ မပျင်းဘူး။ ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးက ဈေးတွေအနှံ့ လျှောက်ပတ် ရစေဦးတော့ ဘယ်တော့မှမမောဘူး၊ ဘယ်တော့မှ မညောင်းဘူး။
ရုတ်တရက် လတ်လက်ထဲက တစ်ချောင်းထိုးအပ် လွတ်ကျသွားတယ်။ အိပ်ခန်းထဲက ဦးရဲ့ တအားအော်လိုက်တဲ့အသံ။ ဘယ်အချိန်က ထသွားလိုက်ပါလိမ့်
"ဦး ဦးဘာလဲ၊ ဘာဖြစ်တာလဲဟင်"
လတ်အပြေးအလွားရောက်သွားတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ ဦးနဲ့ကြောင်နဲ့လေ။ ဦးရယ် ဦးနဲ့ တော့ လတ်နှလုံး ရောဂါဖြစ်တော့မယ် သိလား။ ဒီမှာ ရင်ဘတ်လာစမ်းကြည့်လှည့်စမ်းပါ။
ဦးက လတ်ရင်ဘတ်ကို လာစမ်းဖို့ဝေးလို့ ရေဒီယို တစ်ဖက်နဲ့ ကြောင်ကို လိုက်လို့ကောင်းတုန်း။ လတ်မှာ ဘယ်နေသာတော့ မှာတုံး။ ပြေးပေါက်ပိတ်နေတဲ့ကြောင်ကို ၀ရန်တာတစ်ဖက် ကူမောင်းပေးရတော့တယ်။
"ပြေးပြီ၊ ပြေးပြီ ၊ မိလိုက်ချင်တာကွာ၊ ကြောင်စုတ်ကို အသေသတ်မလို့၊ စော်စော်ကားကား အခန်းထဲဝင်ပြေးတယ်"
"ဖွင့်တာခဏရှိသေးတယ်၊ သစ်ပင်လေးတွေကြည့်ရင်း ရေဒီယိုနားထောင်ချင်လို့ဖွင့် တာ၊ တစ်ခါတည်းဝင်လာတယ်" "ကြောင်ဝင်တာပဲ..အော်လိုက်တာဦးရယ်၊ လတ်ဖြင့်ဘာ ဖြစ်တာတုံးလို့၊ ရင်တွေ ကို တုန်သွားတာပဲ၊ ညနေတုန်းကလဲ ကျူရှင်မှာ တစ်ခါတုန်ရပြီးပြီ၊ အော်လိုက်ဆိုတာ"
အော်ပါ၊ အော်ပါ။ မိန်းမကိုသာ နှလုံးရောဂါကုဖို့ ပြင်ထားဦးရေ..။ ညနေကျူရှင်မှာ တုန်းကလဲ ကျောင်းသူနှစ်ယောက် စကားပြောနေလို့ အော်လိုက်တာလေ၊ တစ်တန်းလုံး လန့်ဖျပ်သွားလိုက်ကြတာ မပြော နဲ့တော့။ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကလဲ ကောင်မလေးနှစ် ယောက်ပဲ။ ဦးစာသင်ကတည်းက တွတ်တွတ် တွတ်တွတ်လုပ်နေကြတယ်၊ လတ်ကမြင်လို့ ၊ဒီအရေးတွေကို ကြိုသိလွန်းလို့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ကို မျက်နှာရိပ်၊ မျက်နှာကဲနဲ့ သူတို့နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုး။ ဦးနဲ့ကျ နောက်ကျောပေး သင်နေတော့ လတ်မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲကို ဦးဘယ်မြင်ရမလဲ။
အဲဒါကို နားမလည်ဘူး၊ ဆက်ပြီး တီးတိုး တီးတိုးလည်း လုပ်နေရော၊ တစ်ခါတည်း သူတို့ဆရာနဲ့ တွေ့သွား တော့တာပဲ။
"ဟေ့" ဆိုပြီး ဒေါသနဲ့ အကျယ်ကြီး အော်လိုက်တာ တစ်တန်းလုံးငြိမ်ကျသွားတယ်။ ပြီးတော့မှ ဘယ်အတန်း က ဘာအကီ်ျင်္အရောင်နဲ့၊ ကျောင်းသူကောင်မနှစ်ယောက မတ်တပ်ရပ်လိုက်စမ်းဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ပက်ပက် စက်စက် တွေ ပြောတော့တာပဲ။ ကျူရှင်ဆိုပြီး ဒီအပေါက်မျိုး လာမချိုးနဲ့၊ငါပိုက်ဆံပေးထားတာ၊ ကြိုက်သလို နေမယ် ဆိုပြီး၊ လူပါးမ၀နဲ့၊ မကျေနပ်ရင် ခုထွတ်သွားနဲ့ စုံနေတာပဲ။ ကောင်မလေးတွေ မျက်ရည်လေး ကလည်ကလည်နဲ့။
ကလပ်စ်ပြီးတော့ ကျောင်းသူတွေ အကုန်လုံး တုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ကြောက်လိုက်တာ အမရယ်၊ သမီးတို့ ခုထိရင်တွေတုန်နေတုန်းတဲ့" လတ်မယ်ပြောရတယ်၊"ဟဲ့" နင်တို့ချည်းမှ မဟုတ်ဘူ၊ ငါလည်း ကြောက်တာ ပဲ၊ ငါလဲတုန်နေတာပဲလို့ပြောရတယ်။
၀ရန်တာ တံခါးကို လတ်သေချာပိတ်ခဲ့ပြီူး ဧည့်ခန်းထွက်ခဲ့တော့ ဦးတစ်ယောက် သူ့ဗီယိုကို ဖွင့်နေပြန်ပြီ။ ရေဒီယို ကလည်း ဆက်တီစားပွဲပေါ်မှာဖွင့်လျက်။ တီဗွီကိုတော့ ပိတ်ထားတယ်။ ဦးကလတ်ကို လှမ်းကြည့် တယ်၊ ရေသောက်မလားတဲ့ လတ်ခေါင်းရမ်းပြ လိုက်တယ်၊ တော်ပါပြီရှင်၊ ဒီလိုမေးဖော်ရတဲကအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by SHWE ZIN U at 5:12 AM2comments Links to this post
Labels: နုနုရည် (အင်းဝ)
ရွှေစင်ဦး နှင့် ခါတော်မှီ အင်တာဗျူး (၁)
မီဒီယာ တခုခု က ရွှေစင်ဦး ကို အင်တာဗျူး လာတဲ့ အခါ ဖြေဆို ဘို့ရာ အစမ်းလေ့ကျင့် ပါတယ်ခင်ဗျာ.. ကျေးဇူးပြုပြီး ပေးစရာ အကြံ (အကျန် မဟုတ်) လေးများ ရှိရင် ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ..။
အင်တာဗျူရာ... ဟလို အန်တီ ရေ ........ သတင်းဌာန က ပါ.... မြန်မာပြည်က ဘလော့ဂါ တယောက် ဖြစ်တဲ့ အန်တီ နဲ့ အင်တာဗျူး လေး လုပ်ချင်လို့ပါ....။
ရွှေ....... ရပါတယ် ညီမ ရယ် ... ညီမ ကြိုက်တာမေးပါနော်... အင်း ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး တော့ မမေးနဲ့.... အမ က ကိုယ့် နိုင်ငံ အရေး မပြောဘူး ..သူများ နိုင်ငံ အရေးဘဲ ပြောတယ် .........။
အထူးမှတ်ချက်.... (သူ ဘယ်လိုဘဲ အန်တီ ခေါ်ခေါ် အမ နဲ့ ညီမ လို့ဘဲ သုံးမယ် စိတ်ကူးထား ပါတယ်)။
အင်တာဗျူရာ ..... ဘယ်လိုသဘောထားကြောင့်လည်း အမ...............။
ရွှေ..................... ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး .. ကိုယ့် နိုင်ငံအရေး ဆို အကောင်းဘဲပြောမယ်.. သူများ နိုင်ငံ အရေး ဆို မကောင်း ဘဲ ပြောမယ် ဆိုတဲ့... မွေးရာပါ ဗီဇ ကြောင့်ပါ.... အမ က အကောင်းဘဲပြောရင် ဝေဖန်မဲ့ သူတွေ ရှိနေတော့ အမ ကိုယ့်နိုင်ငံအရေး ကို မပြောတာ အကောင်းဆုံး ဘဲလို့ ထင်လို့ပါ...။
အင်တာဗျူရာ..... သြ... အန်တီ အဲ အမ ရေ နိုင်ငံအရေး ကို မမေးနဲ့ ဆိုတော့ ဘာမေးရမလည်း ဟင်. ... ။
ရွှေ................အမ ဘလော့ဂ် ထဲ က ချစ်ချစ်ကြီး အကြောင်းတို့ အမ ချက်တဲ့ အညာဟင်း လေးတွေ အကြောင်း တို့ မေးပါလားဟင်...။
အင်တာဗျူရာ...... အမ က ချစ်ချစ်ကြီး အကြောင်း မေးဆိုလို့ တကယ်မေး မယ်နော် အမ ဖြေရမယ်... ချစ်ချစ်ကြီး က လာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဘယ် ပါတီ နိုင်မှာလည်း လို့ ခန့်မှန်းပါသလည်း ... ဘယ်ပါတီ ကို မဲပေးမှာလည်း.. အားပေးမှာလည်း ဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်.......။
ရွှေ.................. အမယ်လေး မှားပါပြီဗျာ.... ချစ်ချစ်ကြီး က .... ဒါဟာ အင်မတန် သေချာပြီးသား ကိစ္စ အဲ မေးစရာ မလိုတဲ့ မေးခွန်းလို့ ပြောပါတယ် ညီမ...။
အင်တာဗျူရာ.... ချစ်ချစ်ကြီး ဘယ်ပါတီ ကိုရည်ရွယ် ပြီး ပြောသလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်...။
ရွှေ............... မေးရဲပါဘူး ဗျာ .. ချစ်ချစ်ကြီး က လက်သီးဆုတ်လိုက် လက်ဝါးဖြန့်လိုက်.. ပုဆိုး မလိုက် လုပ်နေပါတယ်...။
အင်တာဗျူရာ.....ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါ... ဒါနဲ့ အန်တီ ..အဲ... အမ ရော ဘယ်ပါတီ ကို မဲပေးမှာ လည်း ဟင်...
ရွှေ................ သြ ညီမ ရယ် အမ တို့ မဲပေးတဲ့ နေရာ မှာတောင် လှိူ့ဝှက် မဲပေးရတယ်လေ.... ညီမ ကို ပြောလိုက်ရင် အားလုံး သိသွားမယ်.. ပြီးတော့ အမ က ဟိုပါတီ ကို ပေးမယ် .... ဒီပါတီ ကို ပေးမယ် ဆိုပြီး ရသမျှ အခွင့် အရေးကို လက်မလွှတ်တန်း ယူထားတာ ဆိုတော့ ညီမ ကို ပြောလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်... တော်ကြာ အမ ကို အမတ် လောင်း တွေက အညှိုးထား နေလို့ ... အမ လေ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးရင် ဟိုဟာလေ ... ဟိုဟာ... မလုပ်ရဘဲ နေလိမ့်မယ်....။
အင်တာဗျူရာ.... အမ ကလည်း ရှင်းရှင်းပြောပါ...ဘာမလုပ်ရဘဲ နေမှာလည်း...။
ရွှေ........ ဆိတ် ရဲ့ .........ဟိုဟာ ပါ (အမ က အဲဒီအတိုင်း သာ ကျင့်သုံးတာ ပြောရမှာတော့ ရှက်ပါတယ်.. ညီမ မသိသေးရင် ဟင်းလေး ပေးမယ် အဲ hint လေး ပေးမယ်လေ... ဆိတ်ကလေး သွားရင် ဟိုဘက် ပေါင် ကပ်လိုက်.. ဒီဘက်ပေါင် ကပ်လိုက်..)
အင်တာဗျူရာ......မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် အမ ရေ.... ဒါနဲ့ အမ က ဘလော့ထဲမှာ အညာဟင်း ဆိုပြီး ဟင်းကောင်းကောင်းလေး တွေ ချက်ရေးတယ် နော်....။
အမ တို့ ဆီ မှာ ဒီလိုဘဲ အမြဲတန်း စားနေတယ် ဆိုတော့ ညီမ တို့ ကြားနေရတာတွေက ကောလဟလ တွေပေါ့နော်...။
ရွှေ.......... အင်း ညီမ ရေ ကောလဟလ တွေကို မယုံပါနဲ့.. အမ တို့ စားတဲ့ အစားအစာ တွေကို အမ အညာဟင်း လေးတွေ ဆိုပြီး ချက်ရေးတာ သက်သေ ရှိပါတယ်..... ။
အင်တာဗျူရာ..... အမ နေ့တိုင်း အဲလိုချက်စားတယ်ပေါ့နော်....။
ရွှေ...................... အင်း တနှစ် မှာ ၂ခါလောက် တော့ အဲဒီ အတိုင်း ချက်ပါတယ်...။
အင်တာဗျူးရာ..... မှတ်လောက် သားလောက်သော အဆီတထပ် အသားတထပ် အင်တာဗျူး အတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် အမ ရေ...တာ တာ... ။
ရွှေ......... အမ ကလည်း ညီမ ကို ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်.... တာ တာ...။
ဤတွင် အချိန်စေ့ ၍ အင်တာဗျူး ပြီး၏။
Posted by SHWE ZIN U at 5:36 AM 27 comments Links to this post
တက္ကသိုလ် နေဝင်း ဘာသာပြန် ဇင်ဘာဘွေ အခန်း (၄ဝ) အဆက် (၁)
မီးလှူံပြီး လက်ဖက်ရည်ပူပူ သောက်လိုက်ရသောကြောင့် အအေးသက်သာလာပြီ ဖြစ်လင့် ကစား ခရိတ်သည် ဦးခေါင်းထဲမှ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို ခံရလေသည်။ခေါင်း အလွန်ကိုက် သလို ဖြစ်လာသည်။
အမှန်တော့ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းသည် ရေအောက်တွင် ပရက်ရှာ (ဖိအား) များသော အောက်ဆီ ဂျင်ဓာတ်ကို ရှူရှိူက် ရသဖြင့် အောက်ဆီဂျင်မှ အဆိပ်ဖြစ်လာခြင်း၏ဒဏ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ခရိတ်က ရိပ်မိလေသည်။
ထို့ကြောင့် နာကျင်ခြင်း သက်သာစေရန် အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးပြားသုံးပြားကို လက်ဖက် ရည်ပူပူဖြင့် သောက်ချ လိုက်သည်။
ဆေး၏ အာနိသင်ပြလာသည့်တိုင်အောင် စောင့်ဆိုင်းနေရင်း ခရိတ်သည် သူ့ကိုယ်သူပြန်၍ ဝေ ဖန်သုံးသပ် ကြည့်မိလေသည်။ သူသည် အလွန်အေးသော ရေအောက်ထဲသို့ နောက်တစ်ကြိမ် ဆင်းငုပ်ရန် အတတ်နိုိင်ဆုံး အချိန်ဆွဲထားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သုံးသပ်မိလေသည်။
တွန်ဂါတာ ကခရိတ်အား သေချာစွာ အကဲခတ်ကြည့်နေလေသည်။
ခရိတ်သည် သူ့အား တွန်ဂါတာ ကြည့်နေပုံမှာ နောက်ထပ် ရေဆင်းငုပ်နိုင်ပါမည်လောဟု စိန်ခေါ် နေသလို ဖြစ်နေသည်ဟု ယူဆလျက် ရုတ်တရက် မတ်တတ်ထလိုက်ပြီး သူ၏ကိုယ်မှ အနွေး အင်္ကျီထူထူကို ချွတ်ပစ် လိုက်သည်။
"ကိုင်း---လာ--သွားကြစို့။ ကျုပ် ရေပြန်ငုပ်ဦးမယ်။
ခရိတ်က ပြောလိုက်လျှင် တွန်ဂါတာလည်း အောက်ဆီဂျင် ကိရိယာကို ခရိတ်၏ကိုယ်တွင် ကူညီ တပ်ဆင် ပေးလေသည်။
နောက်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အလွန်အေးမြသော ရေထဲသို့ ဆင်းရပြန်လေရာ ခရိတ်သည် အ လွန်ချမ်းနေသော်လည်း သူ့စိတ်ကို ကြိုးစားတင်း၍ ဆင်းငုပ်သွားလေသည်။ သူသည် ရေထဲသို့ မဆင်းမဖြစ်၍ ဆင်းလိုက်ရသော်လည်း စိတ်အတော့ တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေမိလေသည်။
ဘုရင်လိုဘင်ဂူလာ၏ ရေအောက်သချိုင်းဂူကိုလည်း အာဖရိကတိုက် ရိုးရာရှေးဟောင်း ဒဏ္ဍာရီထဲ မှ ကြောက်မက်ဖွယ် သတ္တ၀ါကြီးတစ်ကောင်က လာသမျှကိုစားမျိုပစ်ရန် ပါးစပ်ကြီးဟထားသည်ဟု စိတ်ကူးယဉ် မြင်ယောင်မိလေသည်။
ခရိတ်သည် ရေငုပ်သွားပြီး သချိုင်းဂူအနီးသို့ ရောက်သွားသောအခါ ယခင်က နည်းတူ သူ၏ ကိုယ်ကို ရေပေါ်သို့ ပြန်ကြွမတက်စေရန် လေးလံသော ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုနှင့် ခိုင်မြဲစွာ ချည်နှောင်ကာ သင်းဘော် မှာ ကျောက်ဆူးချသလို ပြုလုပ်ထားလိုက်သည်။
ပထမ တစ်ခေါက်တုန်းက ကျောက်စအပဲ့များ၊ မြေမှုန်များ ထနေခြင်းသည် ငြိမ်သက်သွားပြီး ရေသည် ပြန်၍ကြည်လင်လာပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရိတ်သည် သူ၏ လက်နှိပ်ဓါတ်မီး အလင်းရောင်တွင် သချိုင်း ကို ကောင်းစွာ မြင်နေရလေသည်။
သို့သော် အချိန်မရွေး မြေမှုန်များ ၊ ရွှံ့တုံးများ လှုပ်ရှားထကြွပြီး လုံးဝ မမြင်ရနိုင်သည့် အခြေအနေ ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သည်ကို စိုးရိမ်ရလေသည်။
အရေးထဲ ခရိတ်သည် စိတ်ကျဉ်းကျပ်သလို မူးချင်သလို ဖြစ်လာလေသည်။ အလွန် ကျဉ်းမြောင်း သော အခန်းငယ်တစ်ခုအတွင်း ပိတ်လှောင်ခံရ၍ စိတ်ကျဉ်းကျပ်ပြီး နေရထိုင်ရခက်သလို ဖြစ် လာလေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လုပ်စရာရှိသည်ကိုတော့ ဆက်လုပ်မှ ဖြစ်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ ခရိတ်သည် သချိုင်းဂူမှ ထုံးကျောက်တုံး များကို ဆက်လက်၍ဖယ်ရှားပစ်ရန် ကြိုးစားလေသည်။ ကျောက်တုံး များ ဖယ်ရှား ပစ်လိုက်သည်နှင့် အောက်ခြေမှ မြေကြီးမှုန်စများကြွတက်လာကာ ရေသည် နောက် ကျိသွားပြန်လေသည်။
ခရိတ်သည် သူ၏ လက်နှိပ်ဓါတ်မီးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး မှောင်ထဲမှာပင်ဆက် အလုပ်လုပ်လေသည်။
ယခုဆိုလျှင် သူသည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လူအများနှင့် အဆက်အသွယ်ဆို၍ သူ၏ ခါးတွင် ချည် နှောင်ထားသော အချက်ပြ ကြိုးသာလျှင် ရရှိတော့သည်။ ယင်းကြိုးကပင်လျှင် သူ၏စိတ်တုန်လှုပ် ချောက်ချားမှုကို အနည်းငယ် သက်သာစေလေသည်။
မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ကြာသော် သူ၏ ခေါင်းထဲ ပြင်းစွာ ကိုက်ခဲလာလေသည်။ မူးနောက်နောက် ဖြစ်ရာမှ သတ်ိမေ့ချင် သလိုလည်း ဖြစ်လာသည်။ ငါတော့ နောက်ထပ်ဆယ်မိနစ်ခံနိုင်မှာ မဟုတ် ဘူး ဟုလည်း စိတ်ပျက်စွာ နှင့် သုံးသပ်မိသည်။
သို့သော် နောက်ထပ် ငါးမိနစ်ခန့် သတိမမေ့အောင် ကြိုးစား၍ သတိထားနေမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက် သည်။
ခရိတ်သည် သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂူတွင်းသို့ ၀င်သည့်ဝင်ပေါက်ထဲ တိုးဝင်ကြည့်ရာ အောက်ဆီဂျင်ထည့် သော သံမဏိဘူးနှင့် ကျောက်တုံးတစ်တုံး ထိမိပြီး ခေါင်းလောင်းတီးသလို အသံမြည်သွားလေသည်။
မျက်စိက ဘာမှမမြင်ရသဖြင့် ခရိတ်သည် လက်ဖြင့် စမ်းကြည့်ရာ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် (ထောင့်များ ချွန်ထက်နေသော) ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးကို စမ်းမိလေသည်။
သူသည် ထိုကျောက်တုံးကြီးကို အတင်း တွန်းဖယ်ပစ်ရန် ကြိုးစားရာ နုနယ်သော သူ၏ လက်များ သည် ကျောက်တုံး၏ အချွန်အတက်များနှင့် ခိုက်မိပြီး ပြင်းစွာ နာကျင်သွားလေသည်။ ပါးစပ်က အသံ ထွက်အောင် ဟစ်အော်ပြီး ညည်းညူလိုက်ချင်ပါသော်လည်း ရေအောက်ထဲဖြစ်နေ၍ အော်ရန်လည်း မဖြစ်ချေ။
လက်များ နာကျင်လျက်နှင့်ပင် ခရိတ်သည် ကျောက်တုံးကြီးကို ဆက်လက် တွန်းဖယ်လေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ကျောက်တုံးကြီး လိမ့်ထွက်သွားပြီး ဘေးပတ်ပတ်လည်မှ အင်္ဂတေအစအနများ မြေမှုန့်များ ဖွာကြဲသွားကုန်လေသည်။
"တော်လောက်ပြီ၊ ငါ ရေပေါ်ပြန်တက်မှ ဖြစ်ချေတော့မည်" ဟု ဆုံးဖြတ်လျက် ခရိတ်သည် နောက်ပြန် ဆုတ်ထွက်ရာ အံ့အားသင့်သွားမိလေသည်။ သူ၏ လက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်သည် အစိုင်အခဲထုထည် ဘာမျှ မထိဘဲ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်နေသည်ကို အံ့သြစွာ သိရလေသည်။
လက်ဖြင့် ထပ်မံ၍ စမ်းကြည့်သော်လည်း ဘာကိုမျှ မစမ်းမိချေ။ သည်တော့မှ သူသည် အဖြစ်မှန်ကို စဉ်းစား သဘောပေါက်မိတော့သည်။ ဘုရင်၏ သင်္ချိုင်းဂူအတွင်းဘက်ကို ကာဆီးသော နံရံကြီး ပြိုကွဲ ပျက်စီး သွားပြီ ဖြစ်၍ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်နေသည်ပါတကားဟု စဉ်းစားမိလေသည်။
ဤတွင် အာဖရိက တိုင်းရင်းသားတို့ ရှေးအစဉ်အဆက်က ယုံကြည်ပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တတ်သော အယူသီးမှုတစ်ခုကို ခရိတ်၏ စိတ်ထဲမှ ခံစားမိလေသည်။
တစ်ဖန် အပေါ်ဘက်သို့ စမ်းကြည့်လိုက်သောအခါူ၏ အမိုးမျက်နှာကြက်ကို စမ်းမိလေသည်။ သို့သော် မျက်စိက ဘာမှ မမြင်ရသဖြင့် မျက်ကန်းတစ်ယောက်လို ရမ်းသမ်းစမ်းနေရလေသည်။ မကြာမီ သူသ်ည ရေမရှိသော ကျောက်ဂူ၏ တစ်နေရာ (ကျောက်ဖျာလို ဖြစ်နေသောနေရာ)ကို စမ်းမိရာ ကြိုးစား၍ ထိုကျောက်ပြား ပေါ်သို့ တွယ်ကပ်လိုက်သည်။
ရေအောက်ထဲမှ ရေမမရှိသော ကျောက်ဖျာတစ်ခုပေါ်သို့ ထူးဆန်းစွာ ရောက်သွားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သူသည် မျက်နှာမှ ခေါင်းဆောင်းကိရိယာကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး လေကို အားရပါးရ ရှူရှိုက်လိုက်သည်။
ထိုအချိန် ခါးတွင် ချည်ထားသော ကြိုးကို အပေါ်မှ တွန်ဂါတာကာ ခြောက်ကြိမ်ဆက်၍ တုံ့ဆွဲအချက် ပေးလိုက်သည်။ ယင်းအချက်ပေးခြင်း၏ အဓိပ္ပာယ်က
"ရေအောက်မှာ အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ၊ အိုကေရဲ့လား" ဟု မေးလိုက်သည့် သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ခရိတ်ကလည်း အသက်ရှင်လျက်ရှိနေကြောင်း ပြန်၍ အချက်ပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက် သူသည် လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို ပြန်ထိုးလျက် မှုန်ဝါးဝါး အလင်းရောင်တွင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကို လှည့်ပတ် ကြည့်ရှုလေသည်။
တစ်ချိန်က ဗူဆာမန်ဇီ၏ ဘိုးဘေးဘီဘင်များ (မှော်ဆရာကြီးများ)က လိမ္မာပါးနပ်စွာ ထွင်းထားသော ရေအောက်လျှို့ဝှက်တစ်နေရာဖြစ်ပြီး ထိုနေရာမှတစ်ဆင့် အပေါ်သို့တက်င်္ရန် သစ်သားလှေကား ဟောင်းတစ်ခုကိုလည်း တွေ့ရလေသည်။
ခရိတ်သည် ထိုလှေကားက သူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာအလေးချိန်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိမရှိ စမ်းသပ်ကြည့်လေသည်။ အနည်းငယ် ဆွေးနေသော်လည်း လှေကားကား ကိုယ်၏ အလေးချိန်ကို ခံနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရလေ သည်။
ထိုအချိန်၌ ခရိတ်သည် အလွန်မောပန်းလျက်ရှိနေရာ ခေတ္တ အနားယူနေရန် ဆုံးဖြတ်လျက် မျက်လုံး နှစ်ဖက်ကို မှိတ်ကာ ငြိမ်နေလိုက်သည်။
ထိုအချိန် မှာပင် သူ၏ ခါးကြိုးကို အပေါ်မှ သုံးချက် လျင်မြန်စွာ ဆင့်ဆွဲလိုက်သည်။
ယင်းသို့ သုံးချက်ဆင့်ဆွဲခြင်းမှာ အရေးတကြီး အပေါ်သို့ ပြန်တက်လာရန် ခေါ်လိုက်သည့် အဓိပ္ပာယ် ပင် ဖြစ်သည်။ အန္တရာယ် တစ်စုံတစ်ရာ နီးကပ်နေကြောင်း ကြိုတင်သတိပေးလိုက်သည့် သဘော လည်း ဖြစ်သည်။ ခရိတ်အား တွန်ဂါတာက အရေးတကြီး ပြန်ခေါ်နေလေပြီ။
ထို့ကြောင့် ခရိတ်လည်း သူ့အား ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပြန်ဆွဲတင်ရန် အချက်ပေးလိုက်သည်။
သူသည် မျက်နှာဖုံးခေါင်းဆောင်းကို ပြန်လည် တပ်ဆင်လိုက်ပြီးနောက် ချက်ချင်းလိုပင် အပေါ်မှ တွန်ဂါတာ က လျင်မြန်စွာ ခရိတ်အား ရေပေါ်သို့ ဆွဲတင်လေသည်။
မာတာဘယ်လီ အမျိုးသမီး ကလေးအမေအား သူ၏ ရင်သွေးငယ်ကို ပြန်ပေးထားလိုက်သော်လည်း သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ကို တတိယတပ်မဟာမှ တပ်ကြပ်ကြီးနှင့်တွဲ၍ လက်ထိတ်ခတ်ထားလိုက်သည်။ အမျိုးသမီး ထွက်မပြေးနိုင်အောင် ဖမ်းဆီးထားလိုက်သည့် သဘောပင် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဖွန်ဂါဘီရာသည် တွန်ဂါတာနှင့် ခရိတ်တို့အား လျင်မြန်စွာ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ရဟတ်ယာဉ်ကို အသုံးပြုရန် စိတ်ကူးမိလေသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင် ခြေကျင်ပင်လိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဤသည်မှာလည်း အကြောင်း ရှိပေသည်။ တွန်ဂါတာနှင့် ခရိတ်တို့သည် အလွန်အကင်းပါးသူများ ဖြစ်၍ ရဟတ်ယာဉ်နှင့် လိုက်ပါက အင်ဂျင်စက်သံနှင့် ပန်ကာဒလက်မြည်သံကို ကြားရုံနှင့် မိမိတို့ မှန်းသိကာ လျင်မြန်စွာ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးသွားမည် ဖြစ်လေသည်။
မိမိတို့နောက်မှ လိုက်လာကြောင်း လုံးဝ မရိပ်မိစေရန် အရေးကြီးသဖြင့် ရဟတ်ယာဉ်ကို မသုံးဘဲ ခြေကျင် သွားရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
လူအင်အားကိုလည်း အမြောက်အမြား မသုံးဘဲ ထိန်းနိုင်းသိမ်းနိုင်ရုံ လက်ရွေးစင် တပ်သားနှစ်ဆယ် သာ ရွေးခေါ်လေသည်။
စစ်သည်များကိုလည်း တစ်ဦးချင်း အသေးစိတ် ညွှန်ကြားလေသည်။
"မင်းတို့ကို ငါအတိအကျ ပြောထားမယ်၊ လူလေးယောက်အနက် မာတာဘယ်လီလူမျိုးကို အရှင် ဖမ်းရမယ်။ ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းတို့ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ရှိရင်တောင်မှ မသတ်ရဘူး။ ဒီလူ့ကို ငါက အရှင်ဖမ်းချင်တယ်။ အဲဒါ မင်းတို့ အားလုံး မြဲမြဲ မှတ်ထားကြ။
ဖွန်ဂါဘီရာ၏ အစီအစဉ်မှာ တွန်ဂါတာတို့ လူစုရှိသည့်နေရာသို့ ရောက်သည်နှင့် ရဟတ်ယာဉ်သို့ ရေဒီယိုဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ တတိယတပ်မဟာမှ စစ်သည်အင်အား သုံးရာတို့ သည် ရန်သူရှိရာ ပတ်ပတ်လည်တွင် ၀ိုင်းထားလိုက်ပြီး မည်သူမှ ထွက်မပြေးနိုင်အောင် တားဆီးကြရ မည် ဖြစ်လေ သည်။
သို့နှင့်ပင် ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာ ခေါင်းဆောင်လျက် သူတို့သည် ခရိတ်နှင့် တွန်ဂါတာတို့နောက်သို့ အမဲလိုက် သလို လိုက်ကြလေတော့သည်။
အားလုံး ခြေလှမ်းသွက်သွက်သွားကြလေရာ မာတာဘယ်လီ အမျိုးသမီးကလေးအမေခမျာ မြန်မြန် မလိုက်နိုင်ရှာသော်လည်း ရှီုနာလူမျိုး တပ်ကြပ်ကြီးက အတင်းပင် ဆွဲခေါ်သွားလေသည်။
သူမသည် မိမိတို့လူမျိုး၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖော်ထုတ်သစ္စာဖောက်မိသည့်အတွက် အလွန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျကာ ငိုကြွေးရင်း လိုက်ပါခဲ့ရှာလေသည်။
"ကျေးရွာက လူတွေဟာ ဟိုလူလေးယောက်ကို မှန်မှန်ရိက္ခာပစ္စည်းတွေ ပေးနေတာ သေချာတယ်ဗျ။ အခု ကျုပ်တို့ သွားနေတဲ့ လူသွားလမ်းရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ရုံနဲ့ လူတွေ ဒီလမ်းက မကြာခဏ လျှောက်သွား တယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားနေတယ်"
ဖွန်ဂါဘီရာက ဗိုလ်မှူးကြီးအား ပြောလိုက်ရာ ဘူခါရင်သည် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တောင်ကုန်များကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
"ဒီနေရာက ချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရမှာ စိုးရိမ်ရတယ်။ ဒီလူလေးယောက်အပြင် ထွက်ပြေးသွားတဲ့ အမျိုးသား အချို့ သူတို့နဲ့ အတူရှိချင် ရှိနေနိုင်တယ်။"
"ချုံခိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့နဲ့ တိုက်ရိုက်တွေ့ရမှာမို့ ကျုပ်တော့ သဘောကျတယ်"
ဖွန်ဂါဘီရာက ပြောလိုက်ရာ ရှရုဗိုလ်မှူးကြီး ဘူခါရင်သည် ဘာမှ ဆက်မပြောသော်လည်း စိတ်ထဲမှ သဘောကျ ကျေနပ်သွားမိသည်။
ဇင်ဘာတွေနိုင်ငံတွေ သူရွေးချယ်လိုက်သော တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်သည် တကယ် လိုလား အပ်သူတစ်ယောက်ပေကား။ ဖွန်ဂါဘီရာသည် မိုက်ရူးရဲတစ်ယောက်ဖြစ်၍ မိမိတို့ လိုလားသည့် အတိုင်း တကယ်ပင် လုပ်ရဲကိုင်ရဲရှိသူ တစ်ယောက်ပင် ဖြစ်သည်။
ယခု အတိုင်းဆိုလျှင် ပြည်တွင်းရေးအခြေအနေ အနည်းငယ်သာ ပြောင်းလဲလာရန် လိုတော့သည်။ ထိုအခါ မိမိတို့၏ အထက်အာဏာပိုငများ (မော်စကိုမြို့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ)အနေဖြင့် အာဖရိကအလယ်ပိုင်း တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်ရေးအတွက် ခြေကုပ်ရရန် သေချာသလောက် ဖြစ်နေပေပြီ။
သို့သော် တစ်ခုတော့ ရှိသည်။ မိမိတို့ လိုအပ်ချက် ပြည့်ဝပြီးလျှင်ကား ဖွန်ဂါဘီရာဆိုသူအား အထူး သတိထားကြည့်ရန် လိုမည် ဖြစ်သည်။ သူသည် မိမိတို့ လိုသလို ကြိုးဆွဲရာ ကမည့်ရုပ်သေးလို သာမန် ပြောက်ကျား ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဟုတ်၊ အတွင်းစိတ်ထားက နက်ရှိုင်းပြီး ခန့်မှန်းရခက်သူ ဖြစ် သည်။
ထို့ကြောင့် ဖွန်ဂါဘီရာ၏ တကယ့်ရည်မှန်းချက်က ဘာဖြစ်သည်ကို လေ့လာစုံစမ်းရန် လိုအပ်သည်။ ယင်းသို့ လေ့လာစုံစမ်းရန် မိမိပင် တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
ဘူခါရင်အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာအား အနီးကပ် လေ့လာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရမည်ကိုပင် ကျေနပ် သဘောကျ မိလေသည်။
ဤသို့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် ရုရှဗိုလ်မှူးကြီး ဘူခါရင်သည် ဖွန်ဂါဘီရာ၏ နောက်မှ လိုက်လျှောက်လေ သည်။ တွန်ဂါတာ အနားရှိ မာတာဘယ်လီခေါင်းဆောင်အား အမဲလိုက်သလို လိုက်ရခြင်းကိုလည်း တောလိုက် ၀ါသနာ ပါသူအနေဖြင့် ကျေနပ်သဘောကျနေမိလေသည်။
သူ၏ စိတ်ထဲမှ နောက်တစ်ခု သိနေသည်ကား မာတာဘယ်လီခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းမိရုံနှင့် မိမိတို့ အမဲလိုက်ခြင်း သည် ကိစ္စမပြီးဆုံးသေးဟူ၍ပင် ဖြစ်သည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် နောက်ထပ် သားကောင်တစ်ကောင်အား ဆက်လိုက်ရဦးမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသားကောင် သည် အလွန်လျင်မြန်ပါးနပ်သဖြင့် အထူးဂရုစိုက်၍ လိုက်ရမည် ဖြစ်သည်။
ဘူခါရင် သည် ရှေ့မှ လျှောက်သွားနေသူ ဖွန်ဂါဘီရာ၏ ဦးခေါင်းနောက်စေ့ကို ကြည့်ရင်း ပြုံးနေလိုက် သည်။
သူ့အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရုရှထောက်လှမ်းရေးတွင် အမှုထမ်းခဲ့ခြင်းသည် ယခုတော့ အလွန် ကျေနပ် အားရ ဖွယ်ရာ အဆုံးသတ်ရတော့မည်ပါတကားဟု တွေးပြီး ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်မိလေသည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ရရှိမည့် ဆုလာဘ်သည်ကား မာတာဘယ်လီ၊ ရှိုနာနှင့် ဇင်ဘာတွေနိုင်ငံတစ်ခုလုံးပင် ဖြစ်သည် မဟုတ် ပါလား။
ဆက်သွားကြရင်းနှင့် တောင်ပေါ်ဒေသသို့ ရောက်လာကြလေရာ တောင်ကုန်းပေါ်သို့ တက်သည့် လမ်းက အလွန် ကျဉ်းမြောင်း လှသည်ကို သတိပြုမိကြလေသည်။
တွန်ဂါတာ သို့ ပုန်းအောင်းနေရာသို့ နီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှာလာပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုအခိုက် ရှေ့မှ လမ်းပြအဖြစ် သွားနေသူ မာတာဘယ်လီ အမျိုးသမီးသည် အသံကုန်ဟစ်၍ အော်လိုက် သည်။
ပုန်းအောင်းနေသူများအား သတိပေး ဟစ်အော်လိုက်ခြင်းဖြစ်၍ ဖွန်ဂါဘီရာသည် ပြင်းစွာ ဒေါသ ထွက်လျက် အမျိုးသမီး အနီးသို့ လျင်မြန်စွာ ချဉ်းကပ်သွားလေသည်။
ထို့နောက် သူ၏ သန်မာသောလက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏မေးစေ့ကို တင်းကျပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ကာ ကျန်လက် တစ်ဖက်ဖြင့် ဦးခေါင်းကို နောက်သို့ လှန်ချိုးလိုက်သည်။ မာတာဘယ်လီ အမျိုးသမီးခမျာ ချက်ချင်းပင် ဇက်ကျိုး လျက် ပျော့ခွေလဲကျကာ ငြိမ်သက်သွားရှာပေတော့သည်။
ဖွန်ဂါဘီရာသည် အမျိုးသမီး၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပစ်ချလိုက်ပြီး သူ၏ တပ်သားများအား အရေးတကြီး အချက်ပြ ညွှန်ကြားလိုက်ရာ စစ်သားများလည်း လမ်းဘေးသို့ ပြေးဝင်လျက် နေရာယူထားလိုက်ကြ သည်။
Posted by SHWE ZIN U at 5:30 AM2comments Links to this post
မြစိမ်းပြာ ကမာရွတ် အပိုင်း (၂ဝ)
သမီးနှစ်ယောက် က ဟေးခနဲအော်ပြီး ဖအေကို တစ်ဖက်တစ်ချက်ကနေ ဖက်တွယ် ထားကြသည်။ အငယ်ကောင် ကလဲ အားကျမခံ ဖအေရင်ခွင်ထဲ အတင်းဝင်လာတယ်။
"သြော်...ဒီ သုတ စွယ်စုံလေးကလဲ ဖယ်စမ်းပါဦး ဟိုမှာ ဒုံးပျံ၊ ဒုံးပျံ ကြည့်ရအောင်"
နေ့မှာ ဧည့်ခန်းရဲ့ထိုင်စရာ ၊ ညမှာယောက္ခကကြီးရဲ့အ်ိပ်ယာ ဖြစ်တဲ့သစ်သား ခုတင်နိမ့်လေးပေါ်မှာ ကိုဝင်းအောင်က လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံးမှာ အကောင်းဆုံးလို့ ဒီခုတင်တစ်လုံးရှိတော့တယ်။ မျောက်သုံးကောင်ဆိုလို့ ဒီကုတင်တစ် လုံးရှိ တော့တယ် မျောက်သုံးကောင် သောင်းကျန်းတာနဲ့ ဆက်တီ တွေ အကုန်ကြိမ်ပေါက်ချည်းပဲ။ အဲဒီကြိမ်ပေါက်တွေကို နေ့ခင်းကျ လူမြင်ကောင်းအောင် ခင်းလိုက်၊ ညကျဧည့်ခန်း ထောင့်တစ်ချို့၊ မီးဖိုထဲတချို့ ပို့လိုက်နဲ့ အဲ...ဆက်တီစားပွဲ တစ်ခုပဲ ဣနြေ္ဒရတယ်။ တီဗွီ တင်ထားလို့ သူက သူ့နေရာနဲ့သူ ငြိမ်နေတယ်။
" ဖေကြီး၊ နင်းပေးရမလား" "ဟာ... အကောင်းဆုံးပေါ့ ချစ်သမီးလေးရယ်" အစ်မကြီးမြတ်နိုးက တီဗွီကြည့်နေရာက ကောက်ကာငင်ကာ ထနင်းတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ယုယနဲ့သုတက လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်လာရော။
" ဟိုး တစ်ယောက်ပဲနင်း၊ သမီးနဲ့သားက မေကြီးလာမှာ နင်ပေးကြ၊ ဖေကြီးကို မမကြီးပဲ နင်းပစေနော်" "ဘွားဘွားကို နင်းမယ် " သုတက ကုလားထိုင် ကြိမ်ပေါက် တစ်လုံးပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ သူ့အဘွားဆီကို ပြေး သွားတယ်။ "ဖေကြီး" "ဟေ"
" သမီးနင်းပြီးရင် ဖေကြီး သမီးကိုပိုက်ဆံပေးရမယ်နော်" "ဟိုက်...သားသမီးတို့ မေတ္တာ တယ်လဲ ကြီးပါလားဟေ" နော်လို့...ဖေကြီး၊ ပေးမှာလားလို့ "ကဲ...ဖေကြီးက ဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲ" လေးဆယ့် ငါးကျပ်"
" အလိုလေးဆယ့်ငါးကျပ်၊ ဒါဆိုရင် ငါ့သမီး မုန့်ဝယ်စားဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ လင်နောက်များ လိုက်ပြေး မလို့လားဟေ"
" မုန့်ဝယ်စားဖို့ပါ ဖေကြီးရ၊ ချောကလက်စားချင်လို့၊ သမီးကျောင်းမှာ သမီးသူငယ်ချင်း အမြဲတမ်း စားတယ် နိုင်ငံခြားကလာတာ၊ တစ်ခုကို လေးဆယ့်ငါးကျပ်တဲ့"
"ကဲ မိခင်ကြီးရေ၊ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ဇာတ်လမ်းကတော့စလုံးရေစပြီ၊ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရပ်ကွက် ကျောင်းကလေးမှာပဲ ထားပါလို့ ငါပြောတော့ မင်းနားမထောင်ဘူး ထားချင်လိုက်ရတဲက ကျောင်း နာမည်ကြီး၊ စပြီ ဒါနောက်ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီးလာဦး မယ်"
"မြတ်နိုးသမီးကို မေကြီး ဘာပြောထားလဲ" သူ့ဆုံးမစာတွေကို ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ မယ်အေးတစ်ယောက် ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်လာတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ကိုဝင်းအောင်ကိုပါ ဆုံးမပို့ ချတော့တယ်။
"ဖအေလုပ်တဲ့သူကလဲ ဘယ်တော့မှ ပြောမရဘူး၊ ဒီပေါက်စလေးတွေကို လင်ကြောင်း သားကြောင်း တွေပဲ၊ တော်တော် လင်ပေးစားချင်နေတယ်ဟုတ်လား၊ ရှင်အပြောကောင်း လို့လေ၊ ဟိုနေ့က ကျုပ်ကို မေးတယ်၊ ရှင့်သမီး တင်ပါး လှုပ်တုပ် လှုပ်တုပ် ဖြစ်ပြီ လားတဲ့... ကဲ" "ဘာတဲ့တုံး "
"ရေချိုးခန်းထဲမှာ ရေချိုးရင်းသူတင်ပါးကိုပြပြီး မေကြီးသမီး တင်ပါး လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ် ဖြစ်ပြီလားတဲ့...ကဲ"
ကိုဝင်းအောင်က သူဘေးထိုင်ချလိုက်တဲ့ လေးတန်းကျောင်းသူ ဆယ့်တစ်နှစ်သမီးကို ကြည့်ပြီး တဟားဟား ရယ်တယ်။ မြတ်နိုးအောင်ကပါ ဖအေနဲ့အတူ လိုက်ရယ်တယ်။
"မေကြီးကလဲ၊ အဲဒါသမီးသူငယ်ချင်းက ပြောလို့ပါ၊ ဆယ့်သုံးနှစ်ဆို တင်ပါးလှုပ် တယ်တဲ့"
"ကဲ...ကဲ ကြားလား၊ အဲဒါ ငါ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့နာမည်ကြီးကျောင်းက တတ်လာတာ၊ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး"
"အိုး... ဖိုးအောင်လဲ ပါတာပဲ၊ မြတ်နိုး၊ယုယ၊လာစာကျက်မယ်၊ လွယ်အိတ်ယူ"
"ဟုတ်ကဲ့ပါ မေကြီးကလဲ၊ ဖေကြီး မနက်ကျ ပိုက်ဆံပေးနော်၊ ချောကလက် ၀ယ်မလို့ဆို၊နော် ဖေကြီး
နေပါဦးကွာ၊ သမီးကလဲ၊ ချေကလက်စားချင်တဲ့စိတ်လေး အောင့်ထားလိုက်ဦး၊ သိလား၊ ဒီမှာ ဈေးကြီးတယ်ကွ၊ ဖေကြီးနိုင်ငံခြားသွားမှ အများကြီးဝယ်လာခဲ့မယ်နော်"
"ဟာ..ဖေကြီးက ဘယ်တော့သွားမှာလဲ" "နက်ဖြန်၊ သန်ဘက်ခါသွားမှာပေါ့ သမီးရ" "တကယ်နော်" "နှစ်ကယ်ကွာ၊ သွားစာကျက်တော့" "ဖေကြီး၊ သမီးဖို့ရောနော်" အေး..အေး
ကိုဝင်းအောင်တစ်ယောက် ငြိမ်သွားတယ်။ တီဗွီကိုကြည့်နေပေမယ့် စိတ်တွေက ပျံ့လွင့်နေတယ်။ မိဘတို့ရဲ့ အသည်းနှလုံးဟာ သားသမီးနဲ့ကျတော့ တယ်လဲတုန်လှုပ်လွယ် ပါလားနော်။ ကလေးတွေကို အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချုပ်ချယ်တာကို ကိုဝင်းအောင် အင်မတန်မုန်းတာပါ။
သားသမီးတွေကို ရုပ်ပိုင်းရော စိတ်ပိုင်းရော လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖွံဖြိုးစေချင်လွန်းလို့ တတ်နိုင်သမျှ ကိုဝင်းအောင် ပြုစုပျိုးထောင်နေသားပဲ။ "သမီးတို့ရေ ၊အ လျင်လို ဆိုရင်တော့ ဖေကြီးချက်ချင်း ၀ယ်ကျွေး မှာပါကွာ။ အင်းနောက်လခ စပြီး ဖေကြီး ကျူရှင်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်း ပြုတ်သွားပြီကွ။ တစ်ဝိုင်းစာ လျော့သွားပြီဆိုတော့ ဖေကြီးအလျင်လို မမိုက်ရဲတော့ဘူးကွ၊ ပိုက်ဆံပေါတဲ့နေ့ သမီးတို့ကို ဆယ်ခုတိတိ ၀ယ်ကျွေး ပါ့မယ်ကွာ"
"အမေ၊ အမေ လုပ်ပါဦး" ကိုဝင်းအောင် ခုတင်ပေါ်ကနေ အလန့်တကြား ထထိုင်လိုက်တယ်။
ဖိုးကျော်လေ၊ ၀ရန်တာကနေ ပြေးလာတာ။ ယောက္ခမကြီးက ငိုက်နေရာက ကပျာကယာ ထရပ်တယ်။
"ဘာလဲ၊ ဘာလဲ သား" "ဟေ့ ကောင်ဘာတုံးဟ၊ အလန့်တကြား" "ဝေေ၀လေ၊ ဟိုမှာ မူးလဲနေတယ်၊ ဝေေ၀ပြသာနာပဲ မူးလဲတာကိုထားခဲ့ရသလားဟာ"
ကိုဝင်းအောင် တို့ တစ်အိမ်လုံး ၀ရန်တာဘက် အပြေးအလွှား ရောက်သွားကြတယ်။ ၀ရန်တာကို မှီပြီး ဝေေ၀ က မျက်လုံးတွေမှိတ်လို့၊ ချွေးစေးတွေနဲ့။ ဖိုးကျော်က ကြောင်စီစီနဲ့ သူ့မိန်းမဘေးမှာ ထိုင်ချ လိုက်တယ်။ "ပွေ့လိုက်လေ" လို့ ကိုဝင်းအောင်က အော်တော့မှ သူ့မိန်းမကို ဆွဲပွေ့တယ်။
"ဝေေ၀ သမီး၊ သတိရလား၊ ဝေေ၀"
အဘွားကြီးက ချွေးမလေးကို စိုးရိမ်တကြီး ခေါ်ရင်း ဝေေ၀့လက်ကို လှုပ်တယ်" "မုန်းတယ်"
ဝေေ၀ဆီက အသံသဲ့သဲ့ လေးထွက်လာတယ်။ မယ်အေးက သမီးကြီးယူလာတဲ့ ယပ်တောင်နဲ့ ခေါင်း ကို လှမ်းခတ်တယ်။
ရှူဆေးဘူးကို ကိုဝင်းအောင်ပြေးယူပြီး ယောက္ခကကြီးကို ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မယ်အေးနဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် အဓိပ္ပါယ်သော အကြည့်များနဲ့ ကြည့်လိုက်ကြတယ်။
"ဝေေ၀၊ ရှူဆေး ရှူလေ၊ သက်သာလားဟင် အမေ အမေ လုပ်ပါဦး"
"အို...ကိစ္စမရှိပါဘူးသားရယ်၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး" ဟေ့ကောင်-မင်း ဘာမှပူမနေနဲ့ ၊ပူရမှာက မင်းမိန်းမ မင်းကလေး အဖေဖြစ်တော့မယ်၊ နားလည်လား"
မနေနိုင်တဲ့ ကိုဝင်းအောင် ပါးစပ်က အလျင်စလို ထွတ်သွားတယ်။ ဖိုးကျော်က ကြောင်စီစီနဲ့ သူ့အမေ ကို ကြည့်တယ်။
မအေလုပ်သူက ခေါင်းညိတ်ပြီး ကလေးဆိုတာကို ၀မ်းသာဟန်မပြဘဲ ရှုပ်ထွေးအံ့ သြဟန် ပြနေတဲ့ သားမျက်နှာကို နားလည်သလို ကြည့်တယ်။
"ဟာ ဒုက္ခပဲ၊ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အခန်းလေးနဲကိုယ်ဖြစ်တော့မှ ကလေးယူမလို့၊ ပြသာနာပဲ" ကိုဝင်းအောင်က ယောက်ဖပခုံးကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ပြီး လှုပ်လိုက်တယ်။
"မင်းကလဲကွာ အဲဒါတွေ ဘာတွေဘာမှ တွေးမနေနဲ့၊ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး၊ ပျော်ရမယ့်အချိန် ပျော်ပစ်လိုက်စမ်း၊ ဟဲ..ဟဲ.. ငါ့တုန်းကဆို ကွေးနေအောင် ထကတာကွ မင်းလဲတစ်ချီလောက် ကလိုက် ပါလား"
"မှန်တာပြောတာလေ၊ ဟေ့ကောင်ဖိုးကျော်၊ ပွေ့ပြီးအိပ်ရာပေါ်သာခေါ်သွားတော့၊ ဖြည်းဖြည်းသက်သာ သွားမှာပါ၊ ဒီလိုပဲ၊ သွား.. မယ်အေးက အိပ်ရာခင်းပေးလိုက်"
ယောက္ခမကြီးပျာလို့။ နောက်မြေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုက္ခကိုခံဖို့အတွက် ခုကတည်းက ပျာလို့။ ဖိုးကျော် တို့ရဲ့ မွေ့ရာခင်းက၊ခေါင်းအုံးတွေချ၊ သစ်သားလိုက်ကာလေး နှစ်ခုကာ၊ ခြင်ထောင်ကို အဆင်သင့်လုပ်နဲ့။
မိန်းမကို ပွေ့ချီပြီး မသယ်နိုင်တဲ့ ဖိုးကျော်က နည်းနည်းသက်သာလာတဲ့ မိန်းမကို ပခုံးမှီပြီး လမ်းတရွေ့ရွေ့လျှောက်စေတယ်။
"မြတ်နိုး၊ယုယ၊သုတစွယ်စုံ၊ မကြာခင် ဖေကြီးတို့အခန်းထဲ အူဝဲလေးရောက် လာတော့ မယ်"
"ဖိုးအောင်ရယ်၊ ကလေးတွေကို လျှောက်ကပြောပါနဲ့ဆိုနေမှ"
မယ်အေးမျက်နှာထားကြောင့် ကိုဝင်းအောင် တဟဲဟဲနှင့် ပါးစပ်ပိတ်သွားတယ်။ မိန်းမမျက်နှာတော့ ကိုလူပျော်ကြီး သိသားပဲ၊ အင်းကိုလူပျော်ကြီးလို မယ်အေး နေနိုင်ရင်လဲကောင်းသား။ မောင်လုပ်သူပြောတဲ့ စကားလေး ကြားရတာ မယ်အေး စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။
ကိုယ်အခန်းလေးနဲ့ကိုယ်တဲ့၊ ဟုတ်တာပဲ၊ သူအားကိုးနေတဲ့ အစ်မရဲ့အိမ်ကရော။ တစ်နှစ်အိမ်လေ၊ တစ်နှစ်သာနေခွင့်ရှိတဲ့အိမ်။ တစ်နှစ်ဆိုရင်ကလေး နီတာရဲလေးနဲ့။ မယ်အေးတို့ကလဲ ဘယ်မှာဘယ်လို နေကြရမှန်းမသိတဲ့။ အို... ကိုလူပျော်ရဲ့ နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေးကို မယ်အေး နှလုံးသွင်းမှ ဖြစ်မယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ မယ်အေး ဒီညအိပ်ပျော်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။တိုက်အပေါ်ဆုံးထပ် ဘယ်ဘက်ခြမ်း အပေါ်လွှာ မှာတော့ ညဦးပိုင်းအချိန်ဆိုရင် လူသံမဆူညံပဲ စက်သံနှစ်သံ အမြဲဆူညံလေ့ရှိတယ်။ "တီဗွီသံနဲ့ ရေဒီယိုသံ လေ။
တီဗွီနဲ့ ရေဒီယိုကို တစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်ထားတဲ့ အသံဟာ တိုက်ခန်းကျဉ်းကလေးထဲမှာ ထိုင်းကြာဆံပြုတ် အနံ နှင့် အတူ ရောနှော ထွက်ပေါ်နေတတ်တယ်။
ပလေကတ်လုံချည် တစ်ပတ်နွမ်း၊ အင်္ကျီတုံးလုံးကျွတ်မူပိုင် ဟန်နဲ့ ဆရာဦးသက်ဦး ဟာ ခလုတ်ရေဒီယိုလေးကို မြှောက်ကိုင်ရင်း ဧည့်ခန်းထဲမှာ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက် သတင်း နားထောင် တတ်တယ်။
ဦးရဲ့လက်ကတော့ အဲဒီအချိန်မီးဖိုထဲမှာ။ ညစာထမင်းမစားတဲ့ လတ်တို့နှစ်ယောက် စာ ရယ်ဒီမိတ် ထိုင်းကြာဆံထုပ်နှစ်ထုပ်ကို ပြုတ်နေရတယ်လေ။လတ်တို့နှစ်ယောက် ညနေစာထမင်းမစားတာ ကြာလှပြီ။ ဦးရဲ့ ၀ိတ်လျှော့ရေး အစီအစဉ်ပေါ့။ ဦးကလတ်နဲ့ မရခင်ကတည်းက ညနေစာထမင်းစားတဲ့ အကျင့် မရှိတာတဲ့။ လတ်ကတော့ ဦးနဲ့ရပြီးတောင် တော်တော်နဲ့ အကျင့်လုပ်လို့မရဘူး။ လတ်လတ်ထွေး ဆိုတဲ့ မိန်းမ က ထမင်းကို သိပ်ကြိုက်တာ။နို့မို့ဆို တစ်ခုခုလိုသလိုနဲ့ အိပ်တော်မပျော်ဘူး ထမင်းကြိုက်တဲ့ မိန်းမ။
ဦးသက်ဦး မိန်းမဖြစ်တော့မှပဲ ဒုက္ခလှလှ တွေ့တော့တာပဲ။ အိမ်မှာတုန်းကတော့ မုန့်တီ၊ ခေါက်ဆွဲ့အ၀ လုပ်စားတဲ့နေ့၊ ထမင်းမချက်ဘူးဟေ့လို့ ဘယ်လောက် ကြွေးကြော်ကြော်၊ မလတ်လတ်အတွက်တော့ ထမင်းအိုးသေးတစ်လုံး ချက်ရတာချည်းပဲ။ အဲလောက် ထမင်းကြိုက်ခဲ့တာလေ။ ဦးနဲ့ကျမှ ဦးနဲ့ကျမှ။ အမေသိရင် ဘယ်လောက်များ ဆဲလိုက်မလဲ။
အစကတော့ လတ်ဦးတို့ လိုက်မစားပါဘူး။ ညနေစာထမင်းတစ်စာကို နံနက်ကတည်းက ပိုချက် ထားတယ်။
ဟင်းလဲ ဒီလိုပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတော့ စိတ်ပျက်လာတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လေ၊ လင်မယား နှစ်ယောက်ရှိတာ ကိုတစ်ယောက်က တစ်မျိုး၊ တစ်ယောက်တစ်မျိုးနဲ့၊ ညနေစာကို နှစ်မျိုးလုပ်ရတယ်။ စားတော့လဲ အကွဲကွဲ အပြားပြားနဲ့ လုပ်ရတာကိုလဲ လတ်စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ လတ်အကြောက် ဆုံးကတော့ အမြဲတမ်းမြည်နေတဲ့ ဦးရဲ့ဝမ်နင်ဘဲလ်ကြီးပေါ့။ ထမင်းတွေစားလို့ ၀လာရင် နောက်တစ်ယောက် ယူမယ်ဆိုတာလေ။ အဲဒါကိုတော့ လတ်လတ်ကြောက်တယ်။ ဒါနဲ့ လတ်လဲ ဦးရဲ့ ညနေစာ မစားရေးအသင်းထဲမှာ ၀င်လိုက်ရတော့တာပေါ့
ခုတော့လဲ စားတတ်သွားပါပြီ။ စားခါစကတော့ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိဘူး။ လတ်ထုံးစံအတိုင်း ဟာတာတာ နဲ့ မ၀သလိုလို၊ မတင်းတိမ်သလိုလို။ နောက်တော့မှ နေတတ်သွားတာ။
ကြာဆံပြုတ်ပြီးရင် လတ်ကော်ဖီ တစ်ခါ နှပ်ရဦးမယ်။ ကြာဆံပြုတ်သောက်ပြီး ကော်ဖီနဲ့ မုန့်တစ်ခုခုကို အစာပိတ်စားဦးမှလေ။ ကော်ဖီကတော့ ဦးအရက်မသောက်တဲ့ နေ့မျိုးမှာ လုပ်ရတာ။ ဦးအရက် သောက်တဲ့နေ့ကျရင်တော့ မလိုပါဘူး။
ဦးကတစ်ပတ်မှာ နှစ်ရက်သောက်တယ်။ နားရက်မတိုင်ခင်နေ့ ညနေရယ်၊ နားရက်ညရယ်မှာ သောက်တယ်။ ဦးမှာ တစ်ပတ်မှာ တစ်ရက်ပဲ နားရက်ရှိရှာတာ။ နားရက်ကလဲ သူများတွေလို စနေ၊တနင်္ဂနွေ နားရတာ မဟုတ်ဘူး။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆိုတာ ကျူရှင်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးနေ့တွေလေ။ ဘယ်နားလို့ ဖြစ်မှာလဲ။ ကြားရက် ပဲ နားလို့ရတယ်။
ဦးက ကြာသပဒေးနေ့မှာနားတယ်။ အဲဒါ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေဆိုရင် လတ်က ဦးကြိုက်တတ်တဲ့ အမြည်း ဖွယ်ဖွယ် ရာရာ လုပ်ရပြီး။ ပြီးမှတော့ အရက်ကောင်းကောင်းကို ဆော်ဒါနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ဇိမ်ခံသောက် တော့တယ်။ အများကြီးလဲမသောက်ဘူး။ နောက်နေ့ ကြာသပဒေးနေ့ ညနေမှာလဲ ဒီလိုပဲသောက်တယ်။
Posted by SHWE ZIN U at 5:20 AM 1 comments Links to this post
တက္ကသိုလ် နေဝင်း ဘာသာပြန် ဇင်ဘာဘွေ အခန်း (၃၉) အဆက် (၃)
စကားပြန်လုပ်သူလည်း အသံကိုမြှင့်၍ ကြိုးစားပြောလေသည်။
သို့ရာတွင် သူ၏ စကားမဆုံးသေးမီ အဘိုးကြီးဗူဆာမန်ဇီက အော်ပြောလိုက်သံသည် ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ် လာလေသည်။
" သင်တို့ထဲမှ မည်သူမဆို ရှိုနာတိရစ္ဆာန်ကောင်အား စကားပြောဆိုမည်ဆိုပါက ထိုလူအား ငါသည် ကျိန်ဆဲ ပါ၏။ သင်တို့အားလုံး ဆိတ်ဆိတ်နေကြရန် ငါအမိန့်ပေး၏။ ငါ့အား မည်သို့ပင် ပြုလုပ်စေကာမူ လုံးဝ စကားမပြော ကြရန် ငါသတိပေး၏။ ငါ၏ အမိန့်ကို လွန်ဆန်ဖောက်ဖျက်သူသည် ကျိန်စာသင့်ပါအံ့။ ဤကား ရေ တို့ကို လွမ်းမိုးနိုင်သော ငါ၏ တင်းကျပ်သော အမိန့်ပင် ဖြစ်၏။"
ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာသည် မျက်နှာထား တင်းမာလာကာ သူ၏ စစ်သည်များဘက်သို့ လှမ်း၍ ...
" ဟေ့ ... စလုပ်ကြတော့ " ဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
ရှိုနာလူမျိး တပ်ကြပ်ကြီးသည် အသင့်ကိုင်ထားသော ကြိုးစတစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆွဲလိုက်ရာ ကြိုးကွင်း က အဘိုးကြီး၏ လည်ပင်းတွင် ညှပ်လိုက်သလို တင်းကျပ်လာကာ အဘိုးကြီးသည် မြေကြီးနျင့် ခြေနှစ်ဖက် ထောက်မိရုံ ဖြစ်သွားလေသည်။
နောက်ထပ်ကြိုးစကို ဆွဲလိုက်လျှင် အဘိုးကြီးသည် အပေါ်သို့ မြှောက်တက်သွားကာ သေဆုံးရတော့ မည်ဖြစ်သည်။
" ဟေ့ ... တော်တော့ ရပ်လိုက်ဦး "
ဖွန်ဂါဘီရာ က အမိန့်ပေးလိုက်သဖြင့် တပ်ကြပ်ကြီးက ကြိုးစတစ်ဖက်ကို ချည်နှောင်ထားလိုက်သည်။
ဖွန်ဂါဘီရာ သည် စကားပြန် အကျဉ်းသားအား အမိန့်ပေးလိုက်ပြန်သည်။
" လူတွေကိုပြောလိုက် အခုအချိန်မှာ သူတို့က ရှေ့ကို ထွက်လာပြီး ငါမေးတာကို ပြောဖို့ အချိန်ရှိသေးတယ်လို့ ပြောလိုက် "
စကားပြန်လည်း အမျိုးသမီးများ ရပ်နေရာသို့ လျှောက်သွားကာ တစ်ဦးချင်း ဖျောင်းဖျ ပြောဆိုကြည့် လေ သည်။
သို့ရာတွင် အဘိုးကြီးရဲ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်စမ်း "
ဖွန်ဂါဘီရာ က အမိန့်ပေးလိုက်သည်တွင် ရှိုနာတပ်ကြပ်ကြီးသည် သူ၏ ရိုင်ဖယ်သေနတ်ဒင်ဖြင့် အဘိုးကြီး၏ ခြေတစ်ဖက် ကို အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ချိုးလိုက်သည်။ တအား လွှဲရိုက်ခြင်းဖြစ်၍ အဘိုးကြီး၏ ခြေထောက်မှ အရိုးများ ကျိုးသည့် အသံကိုပင် ကြားနေရလေရာ အမျိုးသမီးအချို့က ဟစ်အော်ငိုကြွေး ကြလေသည်။
သို့သော် ဖွန်ဂါဘီရာက လူလေးယောက် ပုန်းအောင်းနေသော နေရာကို ပြောရန် ထပ်မံမေး၍ အမျိုးသမီး များက မပြောဘဲ နေကြပြန်သဖြင့် သူ၏တပ်ကြပ်ကြီးအား အဘိုးကြီး၏ နောက်ခြေတစ်ဖက်ကို ရိုက်ချိုး ခိုင်းလိုက် ပြန်သည်။
အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီသည် မခံမရပ်နိုင်အောင် ပြင်းစွာနာကျင်ခြင်း ဝေဒနာကို ခံစားနေရသဖြင့် ရှုံ့မဲ့ နေရှာ လေသည်။ ခြေနှစ်ဖက်လုံး ကျိုးနေပြီဖြစ်၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို ခြေထောက်များက ထောက်ကူ၍ မထားနိုင် သောကြောင့် လည်ပင်းမှ ကြိုးကွင်းသည် တင်းသည်ထက် တင်းကျပ်လာပြီဖြစ်သည်။
အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး (အဘိုးကြီး၏ အကြီးဆုံး ဇနီး) သည် အမျိုးသမီးများမှ ထွက်လာကာ ဗူဆာမန်ဇီရိုရာသို့ ပြေးဝင်လာလေသည်။ စစ်သားများက ဟန့်တားမည်ပြုသောအခါ ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာက -
" ဟေ့ ... နေပါစေ၊ မင်းတို့ဘာသာ ကြည့်နေလိုက် " ဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
" မာတာဘယ်လီ ကြက်ဖအိုကြီး သေခါနီးမှာ သူ့ကြက်မကြီးက လာပြီး အလွမ်းသယ်တာကို မင်းတို့ ကြည့်ကြ ပေတော့။ ဟား ... ဟား "
ဖွန်ဂါဘီရာ က ရယ်လျက်ပြောရာ ရှိုနာစစ်သားများလည်း ၀ိုင်း၍ ရယ်မောကြလေသည်။
သို့ရာတွင် မကြာပါချေ။ အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီသည် လည်ပင်း၌ စွပ်ထာ်းသော ကြိုးကွင်းတင်းသည်ထက် တင်း လာပြီးနောက် အသက်ပျောက် သွားရှာလေတော့သည်။
ဖွန်ဂါဘီရာသည် ရုရှဗိုလ်မှူးကြီးရှိရာသို့ ပြန်လျှောက်လာရာ ဘူခါရင်က စီးကရက်တစ်လိပ်ကို မီးညှိရင်း အထင်မကြီး သလို ဟန်မျိုးဖြင့် -
" ခင်ဗျားရဲ့ နည်းက အလွန် အဆင့်အတန်း နိမ့်တယ်။ ဘာမှလည်း မထိရောက်ဘူး "ဟု ဝေဖန်လိုက်သည်။
" ထိရောက်တာတော့ သေချာပါတယ်ဗျ။ အမျိုးသမိးတွေရဲ့ မျက်နှာကိုပဲ ကြည့်ပေတော့ "
ဖွန်ဂါဘီရာ က ပြန်ပြောပြီးနောက် စကားပြန်အား -
" နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရန်သူတွေ ဘယ်မှာပုန်းနေတယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့ ထပ်မေးလိုက်စမ်း " ဟု အမိန့်ပေး လိုက်ပြန် သည်။
စကားပြန်က ဘာသာပြန်ပြော၍ မဆုံးမီ မာတာဘယ်လီ အမျိုးသမီးကြီးသည် ဖွန်ဂါဘီရာရှိရာသို့ ပြေးလာပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်သည်။
" ကျုပ်တို့ရဲ့ သခင်ကြီးဟာ ရှင်တို့မေးတာကို လုံးဝမဖြေဘဲ အသေခံသွားပြီ မဟုတ်လား။ သူက ကျုပ်တို့ကို လည်း အမိန့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ် "
အဘွားကြီးက ရန်တွေ့သလို ပြောလေရာ ဖါန်ဂါဘီရာသည် အဘွားကြီး၏ ရင်ဘတ်သို့ သူ၏ လက်ကိုင် တုတ်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ထိုးလိုက်သည်။
အဘွားကြီးသည် ပုံလျက်သား လဲကျသွားရှာလေသည်။
ထို့နောက် ဖွန်ဂါဘီရာသည် အသက်အငယ်ဆုံး ကလေးမိခင်တစ်ဦးဆီသို့ လျှောက်သွားပြီး သူ၏လက်မှ ကလေးငယ် ကို အတင်းဆွဲယူလိုက်သည်။
ကလေးက ယောက်ျားကလေးဖြစ်ပြီး မိခင်နို့စို့နေရာမှ ဆွဲယူခံလိုက်ရသဖြင့် အော်ငိုလေတော့သည်။
ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာသည် ကလေးငယ်အား ခြေထောက်မှကိုင်ကာ ဇောက်ထိုးဆွဲ၍ အသင့်ရှိနေသော မီးဖိုပေါ် တွင် မြှောက်ကိုင်ထားလိုက်သည်။
" နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရန်သူတွေ ဘယ်မှာလဲဆိုိတာ မေးစမ်း "
ဖွန်ဂါဘီရာက စကားပြန်မှတစ်ဆင့် မေးလိုက်သည်။
" အမျိုးသမီး က သူမသိဘူးလို့ ပြောပါတယ် ဗိုလ်ချုပ် "
စကားပြန်က အမျိုးသမီး၏ အဖြေကို ဘာသာပြန်ပြောရာ ဖါန်ဂါဘီရာလည်း ကလေးငယ်ကို မီးဖိုရှိ မီးတောက် မီးလျှံ များအနီးသို့ နှိမ့်ချလိုက်သည်။
စင်စစ်အားဖြင့် ဖါန်ဂါဘီရာသည် မိခင်တို့က မိမိရင်၌ဖြစ်သော ရင်သွေးငယ်အပေါ်ထားရှိသည့် ကြီးမားသော မေတ္တာတရားကိုသိသဖြင့် အသုံးချလိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်။
ကလေးငယ်အား ဇောက်ထိုးဆွဲလျက် တဖြည်းဖြည်း မီးပုံပေါ်သို့ နှိပ်ချရာမှ စကားပြန်အား အမိန့်ပေး လိုက်ပြန် သည်။
" ဟေ့ ... သူ့ကို ပြောလိုက်စမ်း၊ ငါက ဒီကောင်လေးကို အရှင်လတ်လတ် မီးကင်လိုက်ပြီး အဲဒီကလေးရဲ့ အသားကို သူကိုယ်တိုင် အတင်းစားစေမယ်လို့ ပြောလိုက် "
မိန်းကလေးသည် သူ၏သားငယ်ကို ပြန်လုယူရန် ကြိုးစားရှာလေသည်။ သို့သော် ဖွန်ဂါဘီရာက လက်လှမ်း မမီသည့် နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ကိုင်လိုက်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် မိခင်သည် မိမိသားငယ်ကလေးဖြစ်အင်ကို မကြည့်ရက်တော့ချေ။
" လူလေးယောက် ပုန်းနေတဲ့နေရာကို လိုက်ပြပါတော့မယ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် "
စကားပြန် က ပြန်ပြောလိုက်တော့မှ ဖွန်ဂါဘီရာသည် ကလေးငယ်အား မိခင်လက်သို့ ပြန်ပစ်ပေးလိုက် လေသည်။
ခရိတ်သည် ရေအောက် ပေလေးဆယ်ခန့်အနက်တွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ် ရေပေါ်သို့ ပြန်တက်မသွားစေရန် ကျောက်တုံးတစ်တုံးနှင့် ခိုင်မြဲစွာချည်နှောင်ထားလေသည်။
သူသည် လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၏ မှုန်ဝါးဝါးအလင်းရောင်နှင့်ပင် သင်္ချိုင်းဂူ၏ အနေအထားကို လေ့လာ စစ်ဆေးကြည့် နေသည်။ အင်္ဂတေကိုင်ထားသော အုတ်ဂူ၌ အလွယ်တကူ ဖောက်ဝင်နိုင်မည့် နေရာ ကိုလည်း စမ်းသပ်ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
ခိုင်ခံ့သော အုတ်နံရံတစ်ခုသဖွယ် ဖြစ်နေသည့် သင်္ချိုင်းဂူ၏ အောက်ခြေတွင်ကား ထုံးကျောက်ကြီးများ အလွန် စိပ်စိပ် စီချထားသည်ကို သတိပြုမိလေသည်။
ဤဂူကို ပိတ်ဆို့ခဲ့သူ မှော်ဆရာကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် အကြီးဆုံးကျောက်တုံးများကို ရွေးချယ်အသုံးပြုခဲ့ပုံ ရသော် လည်း အချို့ ကျောက်တုံးများက ခပ်ငယ်ငယ် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
ရေအောက် ထဲ ကျောက်တုံးကြီးကြီး လိုသလောက်ရှာမရသဖြင့် ရရာကျောက်တုံးငယ်များကိုယူ၍ ပိတ်ဆို့ ခဲ့ဟန် တူပေသည်။ သို့သော် အသေးဆုံး ကျောက်တုံးက လူတစ်ယောက်၏ ဦးခေါင်းပမာဏခန့် ရှိလေ သည်။
ခရိတ်သည် အငယ်ဆုံး ကျောက်တုံးတစ်တုံးကို လက်ဖြင့် တွန်းဖယ်ပစ်ရန် ကြိုးစားကြည့်လေသည်။ သူ၏ လက်များ မှာ ရေထဲ ကြာရှည်နေရန် အလွန်နုနယ်နေလေရာ ကျောက်တုံးနှင့် ခိုက်မိပြီး ပွန်းရှလျက် သွေးစ အနည်းငယ် ထွက်လာလေသည်။
သို့သော် ရေထဲ ကြာရှည်နေရသဖြင့် ထုံကျဉ်နေသောကြောင့်ပဲလား မပြောတတ်။ နာကျင်ခြင်းဝေဒနာ မခံစားရချေ။
ထို့ကြောင့် ဆက်လက်ပြီး ကျောက်တုံးကို ကြိုးစားတွန်းဖယ်ကြည့်ရာ သူ၏ လက်မှ သွေးထွက်၍ ရေများ နီရဲနေရာမှ ရုတ်တရက် အရောင်အဆင်း ပြောင်းလာလေသည်။ မြေမှုန်များကြောင့် ပိတ်မှောင် လာလေ သည်။
ထိုအတောအတွင်း သူရှူရှိုက်နေသော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်က တစ်မျိုးဖြစ်လာသည်။ ဓာတ်ပြု ပြောင်းလဲ လာပုံ ရသည်။ ချောင်းဆိုးချင်လာသော်လည်း ချောင်းမဆိုးရဲဘဲ ချုပ်ထိန်းထားရသည်။ ချောင်းဆိုးလိုက်ပါက သူ၏ မျက်နှာတွင် တပ်ဆင်ထားသော ခေါင်းဆောင်းကိရိယာ ပြုတ်ထွက်သွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် ရှိသောကြောင့် ပင် ဖြစ်သည်။
အရေးထဲ ရေက အလွန်အေးမြနေရာ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေပြန်သည်။ ထို့ပြင် ဤအတိုင်း ကြာရှည်ဆက်နေပါက အောက်ဆီဂျင်က အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ အဖြစ် ဓာတ်ပြုပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် လည်း စိုးရိမ်ရပေသည်။
သို့ဖြစ်လင့်ကစား ခရိတ်သည် စိတ်ကို တအားတင်း၍ သင်္ချိုင်းဂူတွင်းသို့ ၀င်နိုင်အောင် ကျောက်တုံး များကို ကြိုးစား ဖယ်ရှား နေလေသည်။
ထိုအချိန်၌ သူ၏ စိတ်ထဲမှ အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီ၏ ဘိုးဘေးဘီဘင်များအား ဤမျှ ခက်ခက်ခဲခဲ သင်္ချိုင်းဂူကို ပိတ်ဆို့ထားရကောင်းလားဟု ကျိန်ဆဲနေမိသည်။
နာရီဝက်ခန့် ကြိုးစားလိုက်သောအခါ သင်္ချိုင်းဂူကို ပိတ်ဆို့ထားသည့် နံရံမှ ကျောက်တုံး အတော်များများ ဖယ်ရှားပြီးစီး သွားလျက် လူတစ်ယောက် ကျဉ်းကျသ်းကျပ်ကျပ် ၀င်သာရုံ အပေါက်တစ်ခု ဖြစ်လာလေ သည်။ သို့သော် ကျောက်တုံးများစီ၍ ပြုလုပ်ထားသည့် ဂူနံရံက ထုထည်မည်မျှရှိကြောင်းကို တိကျစွာ ခန့်မှန်း ၍ မရသေးချေ။
ခရိတ်သည် ကြာကြာဆက်၍ ရေအောက်ထဲ မနေနိုင်တော့သဖြင့် ခေတ္တအပန်းဖြေရန် ဆုံးဖြတ်ကာ သူ၏ ကိုယ်နှင့် ဆွဲချည်ထားသော ကျောက်တုံးကို ကြိုးဖြုတ်လိုက်သည်။ သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်လည်း လျင်မြန်စွာ ရေမျက်နှာပြင် သို့ တက်သွားလေသည်။
အပေါ်သို့ ရောက်သည်နှင့် အသင့်စောင့်နေသူ တွန်ဂါတာက ခရိတ်အား ကူညီတွဲခေါ်လေသည်။ တွဲမခေါ်၍ လည်း မဖြစ်တော့၊ ခရိတ်မှာ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပြီဖြစ်သည်။ ရေအောက်ထဲ ကောင်းစွာ အသက်မရှူ ရသဖြင့် အားအင်ချည့်နဲ့နေသည့် အပြင် သူ၏ ကျောတွင် ပိုးလွယ်ထားသော ပစ္စည်းကိရိယာ၏ အလေးချိန် က ပင်ပန်းစေလေသည်။
တွန်ဂါတာသည် ခရိတ်၏ မျက်နှာတွင် စွပ်ထားသော ဦးခေါင်းဆောင်း (သဲခမောက်)ကို ဖြုတ်ပေးလိုက် သည်။ ဆာရာ ကလည်း လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပူပူ ခပ်ကျကျ တစ်ခွက်ကို ခရိတ်အား တိုက်လေသည်။
ဆယ်လီ တစ်ယောက် ကောဟု ခရိတ်က မေးလိုက်ရာ တွန်ဂါတာက -
" အပေါ် ဂူခန်းမကျယ်ကြီးမှာ ကင်းစောင့်နေတယ် "ဟု ပြန်ပြောလေသည်။
ခရိတ်သည် လက်ဖက်ရည် ထည့်ထားသော မတ်ခွက်ကိုကိုင်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း သောက်ရင်း မီးဖိုနား ဆီသို့ တိုးသွားပြီး မှ ရေအောက်မှ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြလေသည်။
" ကျုပ် က သင်္ချိုငြ်းဂူရဲ့ နံရံမှာ အပေါက်ငယ်တစ်ခု ဖောက်လိုက်ပြီးအတွင်းကို သုံးပေလောက်အထိ ၀င်နိုင်ပြီ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် ဘယ်လောက်ဝေးဝေး သွားရဦးမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်သေးဘူး။ တစ်ခုတော့ လိုအပ် တယ်။ ကျုပ်က စိန်ရတနာတွေ ရှာလို့တွေ့ပြီ ဆိုပါတော့။ အဲဒါတွေထည့်ပြီး သယ်ယူလာဖို့ ထည့်စရာ တစ်ခုခု ယူသွားမှ ဖြစ်မယ်။
မူလက စိန်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ဘီယာအိုးဆိုတာက သိတဲ့အတိုင်းပဲ အလွန်ကွဲရှလွယ်တယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက အယ်ဆူရှာဆိုတဲ့ လူကြီးတောင် အိုးတစ်လုံး ခွဲမိခဲ့သေးတယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ကျုပ်ကိုယ်တိုင် လက်ဆွဲ ထိုင်ခုံ အဖုံးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အိတ်တွေကို ဒီတစ်ခေါက် ဆင်းငုပ်ရင် ယူသွားမှဖြစ်မယ်။ နောက်ပြီး အချိန်စေ့လို့ ဆာရာက အပေါ်ကိုတက်ပြီး ကင်းစောင့်တာဝန် အလှည့်ယူတဲ့အခါ ဆယ်လီကို ဒီကို လွှတ်လိုက် စေချင်တယ်"
Posted by SHWE ZIN U at 6:11 AM5comments Links to this post
မြစိမ်းပြာ ကမာရွတ် အပိုင်း (၁၉)
နို့မို့ဆို ရှေးဟောင်း နေရှင်နယ်ရေဒီယိုကြီးကိုပဲ အန်တီခင်လေးက ပြင်ပြီး ဖွင့်နေဦးမှာ။ ခုတော့လဲ အဲဒီရေဒီ ယိုကြီး ကပြင်လို့လဲမရတော့ပါဘူး။ အ၀တ်နဲ့ သေချာထုပ်ပြီး သေတ္တာထဲမှာ တရိုတသေ သိမ်းထားလိုက်ပြီ။
" နေပါဦးမွန်၊ ဟိုကျောင်းဆရာမယူသွားတဲ့ ပါတိတ်က ထိုင်းလား၊ အမ်အာအက်စ်လား "
" အမ်အာအက်စ် လေ၊ တစ်ထည် ငါးရာ့ငါးဆယ်နဲ့ ပေးတာ "
အန်တီခင်လေးက ထုံးစံအတိုင်း တစ်ချက် တစ်ချက်မေးတာကို မယဉ်မွန်ကဖြေလိုက်ပြီးရင် အခန်းကပြန်ပြီး ငြိမ်သက်သွား ပြန်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီညအဖို့မှာတော့ အန်တီခင်လေးတို့ တူဝရီးမှာ ပြောစရာစကားရနေတယ်။
အန်တီခင်လေး က သူ့မျက်မှန်ကို ချွတ်လိုက်တယ်။
" အန်တီမေရီဆိုတဲ့ မိန်းမကြီးကတော့ တကယ့် မိန်းမကြီးနော်၊ တော်တော်လဲ စပ်စုနိုင်တယ်အေ "
" သြော် ... ကြီးမေကလဲ၊ မနက်ပိုင်း သူသွားစရာအလုပ်မရှိရင် တိုက်ပေါ်က ဆင်းလာသမျှ လူအကုန် လိုက်ကြည့်နေတာပဲဟာ၊ ညနေဆိုလဲ အဲလိုပဲ၊ ဘာဝယ်လာလဲ၊ ဘာချက်မှာလဲ၊ ဘယ်လောက်ဈေး လဲနဲ့၊ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်၊ ဆန်နီလေးကတော့ ခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်၊ သနားစရားလေး"
အေး.... ဟုတ်တယ်၊ ဆန်နိလေးက တော်ပါတယ် ကြီးမေတို့တစ်ခါ မီးချောင်းပျက်တာ သူပဲလာပြင်ပေးရှာ တာနော် "
" ကြီးမေက မေရီဂျိန်းအကြောင်း ရှင်းမပြခဲ့တော့ သူ မကျေမနပ်ဖြစ်နေခဲ့မှာပါ "
" အေးပေါ့၊ ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလဲ၊ မေရီဂျိန်းဆိုတာ နတ်ကနားစီးပါ၊ နတ်ကတော်ပါလို့များ သိလိုက်လို့ ကတော့ စပ်စုလို့ကို ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး၊ တို့သွားမယ့်နောက် လိုက်တောင် ကြည့်ဦးမယ် "
" တော်သေး တယ်နော် ကြီးမေ၊ နတ်ပွဲက ဥပုသ်နေ့နဲ့ တိုက်လို့၊ ပုဇွန်တောင်ဘက်ဟုတ်လား "
" အေး ... ဟုတ်တယ်၊ နက်ဖြန်ကျ ကျပ်တန်ဘဏ်ထုပ်... ဈေးထဲလိုက်လဲရဦးမယ်၊ အိမ်မှာ ငါးကျပ်တန် တစ်ထုပ်"
" ဒါဆို ... နက်ဖြန်ည ကြီးမေ သရက်သီးသနပ်လုပ်ဦးလေ ဥပုသ်နေ့ကျ လုပ်အားမှာမဟုတ်ဘူး "
" အေး ... အေး ... ဟုတ်တယ် "
နတ်ပွဲသွားဖို့အရေးမှာ တူဝရီးနှစ်ယောက် စိတ်တူသဘောတူရှိနေတုန်း သံဆွဲတံခါးခေါက်သံ ပေးလာတယ်။
အန်တီခင်လေး က သူ့အကျင့်အတိုင်း လန့်သွားပြီး ရင်ဘတ်ဖိလိုက်တယ်။ ဒီလိုအချိန် ဧည့်သည်မှ မလာ တတ်တာ။ ဘယ်သူများပါလိမ့်။
မယဉ်မွန်က ထိုင်ရာက ထလိုက်တယ်။
" ဟဲ့ ... မွန် ... ရမ်းမဖွင့်နဲ့လေ၊ အချိန်မတော်ကြီး အနုကြမ်းဖြစ်နေဦးမယ် "
" ဟာ ... ကြီးမေကလဲ၊ အစောကြီး ရှိပါသေးတယ်၊ ဈေးကတစ်ယောက်ယောက်ဖြစ်မျာပေါ့ "
အန်တီခင်လေး နည်းနည်းအကြောက်ပြေသွားပုံရတယ်။ ရင်ဘတ်ဖိထားတဲ့လက်ကို ပြန်ချလိုက်တယ်။
" ကဲ ... ဖွင့် ... ဖွင့်၊ ညည်းတို့ ဘာမှမသိဘူးနော်၊ ကိုယ်က မိန်းမသားချည်းနေရတာ၊ ကြောက်နိုင်မှတော်ရုံကျတာ "
အန်တီခင်လေး ညည်းညူနေဆဲမှာ မယဉ်မွန် တံခါးဖွင့်လိုက်တယ်။ သစ်သားတံခါး၊ ပြီးတော့ သော့ခတ် ထား တဲ့ သံဆွဲတံခါးကို ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ...
" သြော် ... "
မယဉ်မွန်အံ့သြသွားသလို သြော် ... လိုက်ပြီးမှ ဈေးသည် မျက်နှာလေးကို တပ်ဆင်လိုက်တယ်။
ဘယ်သူရမှာလဲ။ အောက်လွှာကလူလေ။ မျက်မှန်နဲ့ပြုံးဖြဲဖြဲ၊ ကွမ်းစားစားလူပေါ့။ တစ်ခါမှလဲ စကား မပြောဖူးဘူး။
" လာလေ ... ၀င်ပါ "
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်နီးချင်းလေ၊ ခေါ်ရမှာပေါ့။ တစ်ခုပဲ ကိုယ်က အိမ်နေရင်း ဖြစ်သလိုဝတ်ထားမိတော့ နည်းနည်း ရှက်တယ်။
" ဟဲ့ ဟဲ့ စားပြီးကြပြီလား ခင်ဗျ "
ကွမ်းစားစားလူက နှုတ်သွက်လျှာထွက်နဲ့ နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း အခန်းထဲ လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။
" နေဦး၊ နေဦး၊ မောင်ဟိုသင်း၊ မင်း ခြေထောက်တွေ သုတ်လိုက်ဦး "
ကြီးမေတို့ ကတော့ လုပ်တော့မယ်။ သူ့ကြမ်းကို သူက အရိပ်ကြည့်နေတာလေ။ အားလဲမနာဘူး၊ ဟိုလူကလဲ ရေချိုးရာကထ၊ လာတာလား၊ ခြေထောက်မှာ ရေတွေစိုလို့။
" ဆောရီး၊ ဆောရီး အန်တီ၊ ကျွန်တောကချက်ရင်းပြုတ်ရင်း မီးဖိုကလာလို့၊ ဟဲ...ဟဲ၊ ကျွန်တော့် နာမည် ၀င်းအောင် ပါ၊ အောက်လွှာကလေ "
" သြော် ... ဟုတ်ကဲ့၊ လူတော့ မြင်ဖူးနေပါတယ် "
" ဒါနဲ့ ... အန်တီ ငရုတ်သီးစမ်းလေးများရှိရင် ကျွန်တော့် နည်းနည်းပေးစမ်းပါ ၊ ရှိလား "
" ရှင် .... "
" ငရုတ်သီးစိမ်းလေ၊ အသေးရှိရှိ၊ အကြီးရှိရှိရတယ်၊ ကျွန်တော် ငါးပိထောင်းချင်လို့၊ အိမ်မှာ ကုန်နေလို့ခင်ဗျ၊ ကျွန်တော် လိုက်တောင်းတာ အခန်းစေ့ နေပြီ။ ဟဲ ... ဟဲ ဒီအခန်းမှာတော့ ရကောင်းပါရဲ့ "
" သြော် ... အင်းအင်း၊ နည်းနည်းတော့ရှိတယ် ထင်တယ်၊ မွန်ယူပေးလိုက်ပါကွယ် "
" ဟာ ... ဟန်ကျပြီ "
အပျိုကြီးလေးက မိးဖိုခန်းဘက်ထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ အပျိုကြီးကြီးက ကိုဝင်းအောင်ကို အံ့သြစရာ သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ကို ကြည့်သလို ကြည့်နေတယ်။
ကိုဝင်းအောင် မျက်စိထဲမှာတော့ တဖိတ်ဖိတ် အရောင်လက်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်အသစ်နဲ့ စိမ်းပြာနုရောင် တိုက်နံရံ အသစ်ရဲ့ ကြားမှာ မလိုက်ဖက်စွာ တည်ရှိနေတဲ့ ပရိဘောဂ အဟောင်းအမြင်းတွေလိုပဲ အဘွားကြီး ကို ကြည့်ရတာရှေးဟောင်းပစ္စည်းကြီး တစ်ခုနဲ့ တူနေတယ်။
ချိန်သီးရပ်နေတဲ့ နံရံပေါ်က နာရီအိုကြီးနဲ့လဲ အဘွားကြီးက ဆင်တယ်။ ဟဲ ... ဟဲ ငရုတ်သီးစိမ်းယူပြီး ထွက်လာတဲ့အပျိုဟိုင်း အဘွားကြီးလေးကတော့ ဧည့်ခန်းကတစ်ခုတည်းသော ခေတ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ရှိုးကေ့စ် မှန်ဗီရိုလေးနဲ့တူတယ်။
" ကျေးဇူးပဲခင်ဗျ၊ ကျေးဇူးပဲ၊ ကျွန်တော်က စားချင်ပြီဆို အဲလိုပဲ ဟဲ ... ဟဲ၊ စားပြီးကြပြီလား၊ ငါးပိထောင်း စားကြ မလား၊ မပြီးသေးရင် ကျွန်တော်လာပို့မယ်လေ "
" အို အန်တီ တို့ ပြီးပါပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "
" ဟဲ့ ဟဲ့ ကျွန်တော့် လက်ရာလေး မမြည်းရတော့ဘူးပေါ့၊ သွားမယ်ခင်ဗျ"
" ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့ "
မယဉ်မါန်က တံခါးပြန်ပိတ်မလို့ရှိသေး၊ ဘယ်အချိန်ထွက်သွားလိုက်မှန်းမသိတဲ့ ဖိုးကဲတို့အော်သံကို တိုက် လှေကား ဆီကနေ ကြားလိုက်ရတယ်။
" အဲ ကြီးမေ၊ ဖိုးကဲတို့အောက်ရောက်သွားပြီ၊ ဘယ်တုန်းကထွက်လိုက်တယ်မသိဘူး "
" ခေါ်စမ်း၊ ခေါ်စမ်း၊ ဟိုအောက်မှာ ၀ဲစားနေတဲ့ ကြောင်မတစ်ကောင် ညနေကမြင်ခဲ့တယ်။ အဲဒါ ၀ဲတွေ ကူးလာမှာ "
" ဟာ အန်တီကလဲ၊ သူများ ချစ်ခြင်းကို မခွင်းနဲ့လေ၊ ဟဲ ဟဲ ကြောင်မှာလဲ အသည်းနဲ့ပဲခင်ဗျ၊ အန်တီ မကြား ဖူးဘူးလား၊ ၀ဋ်လိုက်တတ်တယ်၊ မောင်မောင်သတိထား ဆိုတာလေ ဟဲ ဟဲ"
အပျိုကြီးနှစ်ယောက် ကြောင်ကို တမြည်မြည်ခေါ်ရင်းက တိုက်လှေကား တစ်ဆစ်ချိုးကွေ့ ကနေ လှမ်းအော်တဲ့ ကိုဝင်းအောင်ကို မျက်စောင်းပြိုင်တူထိုးလိုက်ကြတယ်။
ကိုဝင်းအောင်ကတော့ တဟားဟား အော်ရယ်ရင်း သူ့အောက်လွှာတံခါးကို ခေါက်လိုက်တယ်။
" မယ်အေးရေ ကိုကို့အချစ်ကလေး၊ ငရုတ်သီးစိမ်းရခဲ့ပြီ မင်းစားချင်တဲ့ ငါးပိထောင်း စားရပြီ "
တ့ခါးဖွင့် ပေးတဲ့မယ်အေးကိုမြင်တာနဲ့ ကိုဝင်းအောင်က အော်လိုက်တယ်။ ၀ရန်တာမှာထိုင်နေကြတဲ့ ယောက်ဖ ကြင်စဦး မောင်နှံက ပြုံးကြတယ်။ မယ်အေးက မျက်စောင်းထိုးပြီး လက်မောင်းဆွဲလိမ်တယ်။
" ဘယ်လို ဖြစ်နေတာလဲ၊ တိုးတိုး ပြောစမ်းပါ ဖိုးအောင်ရယ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းရှာပုံတော်ဖွင့်သွားတာ ကြာလှပြီ၊ ဒီမှာဆာလှပြီ"
" စားမယ်လေ၊ လာပြီလေ၊ အချစ်ကလေး ဆာနေပြီဆိုတာ ဖိုးအောင်သိတာပေါ့"
" သွားစမ်းပါ၊ ငါးပိထောင်းလဲကျုပ်ဖြင့်စားချင်တယ်လို့ မပြောမိပေါင် "
" အို မပြောပေမယ့် မင်း စားချင်နေတာ ဖိုးအောင်သိတာပေါ့၊ သိနေတယ်လေ "
တီဗွီ ရှေ့မှာ ရောက်နေကြတဲ့ သမီးနှစ်ယောက်က ဖအေကို မြင်တာနဲ့ ထ ပြေးလာကြတယ်။ အငယ်ကောင် ကတော့ ဘွားအေရင်ခွင်ကနေ တီဗွီကြော်ငြာတွေကို မျက်တောင်မခတ်၊ နည်းနည်းလေးမှ မလှုပ်ဘဲ ကြည့်နေတယ်။
" ဖေကြီး၊ ဖေကြီး ကြောင်လေးတွေ အော်သံကြားတယ်၊ အပေါ်ထပ်ကလားဟင် "
" သမီးတို့ဖို့ မဖမ်းခဲ့ဘူးလားလို့ "
" မဖမ်းခဲ့ပါဘူး၊ ကြောင်လေးတွေက ငယ်သေးတယ် သမီးတို့ရ "
" ဟာ ငယ်ငယ်လေးတွေမှ သမီးတို့က ချစ်တာ "
" ငယ်တာ မကောင်းဘူး သမီးရ။ စားရတာ ချွဲတယ်၊ လေးဆယ်သားငါးဆယ်သားကောင် မှ စားလို့ ကောင်းတာ
" ဟာ ဖေကြီးကလဲ "
ရုတ်တရက် နားမလည်ဘဲ နားထောင်နေကြတဲ့ သမီးနှစ်ကောင်က ဖအေကို ၀ိုင်းထုကြတယ်။
" ဖိုးအောင်ကလဲနော်၊ ကလေးတွေကို ပေါက်ကရတွေ မပြောစမ်းပါနဲ့ဆိုတာ ပြောလို့ကို မရဘူး "
" ဟ ... မှန်တာ ပြောတာပဲကွ၊ ကြောင်သားဆီပြန် သိပ်စားလို့ ကောင်းတာ၊ မဆလာနံ့လေး တသင်းသင်းနဲ့ ဟို အပျိုကြီး တွေဆီ စားကောင်းမယ့် တစ်ကောင်လောက် ငါတောင်းခဲ့ဦးမလို့၊ သူတို့မှာ အများကြီးပဲ "
" ဖိုးအောင်နော် ... မလုပ်နဲ့၊ သူများက အမြတ်တနိုးချစ်နေတာကို၊ အိမ်နီးချင်းတွေ မကောင်းဘဲ ဖြစ်ကုန်မယ် "
" အိုကွာ...၊ သူတို့လဲ ဟင်းတစ်ခွက်ပေးမှာပေါ့၊ အဲဒါမှ လျှာလည်ပြီး တစ်နေ့ကို တစ်ကောင်၊ တစ်ကောင်... "
" တော်စမ်း ပါ၊ ဒီငရုတ်သိးက သူတို့ဆီက ရလာတာလား "
" ဟုတ်တယ်၊ ငါအခန်းစေ့ လျှောက်တောင်းတာ၊ ဟိုဘက်ခန်းကလဲ မရဘူး၊ အောက်က အန်တီ ဘိုကြက်ချေး ဆီကလဲမရဘူး၊ ဟို အချစ်နှင့် သူဒ ပါပါအခန်းကလဲ မရှိဘူးတဲ့"
" ဘယ် ... အချစ်နှင့်သူ၏ ပါပါလဲ "
" ဟို ... အပေါ်ဆုံးထပ် အလွှာကလေကွာ၊ အသက်ကြီးကြီးဆရာနဲ့ သူ့မိန်းမ ငယ်ငယ်လေးလေ... ဟဲဟဲ၊ အချစ် နှင့် သူ၏ ပါပါလေ "
" ဖိုးအောင်နော်၊ လျှောက်ပြောမနေနဲ့၊ ကြားသွားရင် အားနာစရာ "
" လျှောက်မပြောပါဘူး၊မတ်တတ်ရပ်နေတာပါ၊ ပေး ... ပေး ... ငါးပိကင်ပြီးသားပေး "
" ရော့ ... ရော့၊ မြန်မြန်ထောင်း၊ အမေလဲ ဆာနေပြီ "
" အေးပါ၊ ရပါတယ် ယောက္ခမကြီးက၊ ပိုင်ပါတယ် "
" အာသွက်ခယံ တော်တော် ဖြစ်နေနော် ဖိုးအောင်၊ အပြင်က ပါလာသေးတယ် မဟုတ်လား "
" မပါ ပါဘူး မိန်းမရယ် ...၊ အာသွက်တာကတော့ ပင်ကို အရည်အချင်းပါ၊ ဟော ဒီမှာ မယုံ နမ်းကြည့် ... ဟား"
" ဖယ်စမ်းပါ .... အာပုပ်စော်နံတယ် "
" ဒီလိုဆို မကြာခင်မှာ ကြာညိုသူရာနံ့ သင်းစေမယ်၊ သွား ကြောင်အိမ်ထဲက ဂျော်နီဝါကား ပုလင်းလေး ယူလိုက် စမ်းပါ "
" အများကြီး မလုပ်နဲ့နော် ဖိုးအောင်၊ မြန်မြန်လဲလုပ် "
" အေးပါ ... အေးပါ မိန်းမရာ၊ ဒါ မင်းယောက်ျား မနက်ကျ စာသင်ကောင်းအောင် ဥာဏ်ရည်လောင်း တာပါကွ "
ကိုဝင်းအောင်က မယ်အေး ယူလာတဲ့ ဂျော်နိဝါကား ပုလင်းထဲက အာမီရမ် (သူ့အခေါ် အာမီဝီစကီ)ကို ဖန်ခွက် ထဲ တူးပက်လောက် ထည့်တယ်။ ပြီးတော့ ရေရောပြီး တစ်ကျိုက်ကျိုက်လိုက်တယ်။ မခူးရသေးတဲ့ ငရုတ်ဆုံ ထဲက ငါးပိထောင်းတစ်တို့ကိုလဲ မြည်းလိုက်တယ်။
" ကောင်း ... ကောင်း၊ သိပ်ကိုကောင်း၊ မယ်အေးထမင်းခူးတော့လေ "
" ဖိုးအောင် က ရပလား "
" ရတာပေါ့ သိပ်ရတာပေါ့ "
ကိုဝင်းအောင်က အရက်ခွက်ကိုကိုင်ရင်း တစ်ကျိုက် ကျိုက်လိုက်၊ ဟိုဟင်း ဒီဟင်း နှိုက်စားလိုက်နဲ့ သူ့ထုံးစံ အတိုင်း ထမင်းခူးခပ်ပြီးတာနဲ့ အရက်ခွက်လဲ ပြောင်ပြီ။
" ဖိုးအောင် ထမင်းအိုး ပလပ်က ဓာတ်လိုက်နေသလိုပဲနော်၊ ညနေ ချက်တုန်းက အ၀တ်နဲ့ ကိုင်ရတယ် "
မင်း ယောက်ျား ရူပဗေဒဆရာ၊ ဘယ်တုန်းက ရိုက်စ်ကွတ်ကာ ပြင်တတ်လို့လဲကွာ၊ နက်ဖြန်ကျ ဆရာကြီး ဆန်နီ ပြလိုက်ပေါ့ "
" အေး ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်၊ ဆန်နီ့ ခေါ်ရမယ်၊ မီးဖိုကွိုင်လဲ လဲခိုင်းချင်လို့၊ လုပ်ပေးရှာပါတယ် ကောင်လေးက"
" အေးကွာ ဒီကောင် တကယ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကောင်၊ ဟိုဘက်ခန်းမှာလဲ မနန်းစိုး၊ မနန်းစံတို့ကို မီးပူ တိုက်ပေး နေတယ်၊ ငါတွေ့ခဲ့တယ် "
" ဘယ်မနန်းစိုး၊ မနန်းစံလဲ "
" ဟိုဘက်ခန်းက အမြွှာ ညီအစ်မကော့လန်ကော့လန်လေး တွေပေါ့ကွ "
" သြော် ... ဟုတ်လား ဆန်နီလေးက သိပ်သဘောကောင်းရှာတာနော်၊ သနားပါတယ် "
" သူ့အမေ အန်တီ ဘိုကြက်ချေးကလဲ စပ်စုတာလေးက လွဲရင် သဘောကောင်းပါတယ်ကွ "
" ဟင်း ... မကောင်းပါဘူး၊ သူက မယ်အေးတို့ဆို အထင်သေးသလို ကြည့်တတ်တယ်၊ တိုက်ခန်းပိုင် မဟုတ် လို့လား မသိဘူး "
" အို ... အဲဒီတော့ ပြောလိုက်ပေါ့ကွာ၊ ကျွန်မတို့က ၀င်ဒါမီယာမှာ ခြံရှိတယ်လို့၊ ဒီမှာ ပျင်းလို့ ခဏလာနေတာလို့ "
" မနောက်စမ်း ပါနဲ့ ဖိုးအောင်ရယ်။ ဒီနေ့ရုံးမှာ မြေကွက်မဲနှိုက်တာ မပေါက်လို့ စိတ်ညစ်နေရတဲ့ထဲ"
" မြေတွေက အကုန်ဗလာတွေချည်း လိပ်ထားတယ်နဲ့ တူတယ်ကွ "
" သွားစမ်းပါ၊ ပေါက်ကရ "
" ယောက္ခမကြီးရေ လာဗျို့၊ မံမံ စားမယ်ဗျို့ "
ကိုဝင်းအောင်က မယ်အေး စကားကို ဖြတ်ပစ်ပြီး ထမင်းကို ကုန်းလွေးတယ်။ သူကိုယ်တိုင် စပါယ်ရှယ် ချက်ထားတဲ့ မုန်ညင်းချဉ်ရည်ရယ်၊ ငါးခေါင်းဟင်းရယ်၊ ငါးပိထောင်းရယ်နဲ့၊ စားလို့ကောင်းလိုက်တဲ့ အမျိုး။
" ယောက္ခမကြီးရော့ ထည့်စား၊ သမက်ကလေး ချက်ထားတာလေးတွေ မကောင်းဘူးလား၊ မကောင်းလဲ ကောင်းတယ် လို့ ပြောနော် သိလား "
" ကောင်းပါတယ် တော်၊ ကောင်းပါတယ် "
ထမင်းဝိုင်းမှာ ထုံးစံအတိုင်း ကိုဝင်းအောင် အသံချည်းပဲ။ ကလေးတွေကကျောင်းက ပြန်ပြန်ချင်း အလျင် ကျွေးရတာဆိုတော့ သူတို့ကိစ္စပြီးပြီ။ ယောက်ဖစုံတွဲကလဲ ထမင်းအစောကြီး စားတတ်တယ်။ စားပြီးတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ လွတ်လပ်နယ်မြေ ၀ရန်တာမှာ ချစ်လေညင်းခံ ထွက်ကြပြီ။
ရော့ ပူတူးတူးလေးလဲစား၊ မြေမရတာနဲ့တော့ စိတ်ညစ်ပြီး မစားဘဲ မနေပါနဲ့ မိန်းမရယ်၊ မင်း လုပ်သက်ကလဲ ဘယ်လောက်ရှိသေးလို့တုံး၊ ဆယ့်နှစ်နှစ်နဲ့ လ သမီးရှိသေးတယ်၊ အဲလိုလဲ ဖြေစမ်းပါ၊ တစ်နေ့တော့ ရမှာပေါ့၊ ဒါနဲ့များတော့ စိတ်ညစ်ပြီး ထမင်းစား မပျက်လိုက်ပါနဲ့၊ စလင်းဘော်ဒီဖြစ်ပြီး ဆင်ကိုယ် လိပ်ခါး အစဉ်အလာ လေး ပျက်သွားပါ့မယ်ကွာ "
နောက်ဆုံးတော့ မယ်အေး ဖိုးအောင်ကို အရှုံးပေးပြီး ရယ်လိုက် ရတော့တယ်။ ယောက္ခမကြီးကပါ ထောက်ခံ တယ်။
" အေးဟဲ့၊ အေးအေးလဲ တစ်နေ့တစ်ခြား ၀လာနေတာပဲ "
" ဟုတ်တယ် အမေရယ်။ သမီးဖြင့် စိတ်တောင်ပျက်တယ် "
" အို ဘာပျက်စရာရှိတုံးဗျာ သိပ်ဝတာမှ မဟုတ်တာ၊ ငါထင်တယ်၊ မင်းကို ငါကြည့်နေတာ၊ ရုံးပြန်ရင် ရုံးသွားတုန်းကထက် ပိုဝလာသလိုပဲ"
" သွားစမ်းပါ အဲလောက်ကြီးများသာဆိုရင်တော့ သေရချည်ရဲ့၊ လူကလဲ ဘာအစားကောင်း၊ အသောက် ကောင်းမှလဲ မစားရဘဲနဲ့၊ ဘာလို့ ၀လာတယ် မသိပါဘူး၊တော်ပြီ... ပိန်ဆေးစားတော့မယ် "
" ပိုက်ဆံ မကုန်တဲ့ ပိန်နည်းရှိတယ်၊ တစ်ခါတည်း ချုံးချုံးကျအောင် ပိန်သွားစေရမယ်၊ ဘယ့်နှယ်လဲ မယ်အေး ... ယူမလား "
" ဘယ်မှာလဲ၊ ဘာဆေးလဲ "
ကိုဝင်းအောင် မျက်နှာကပိုပြီး ပြုံးဖြဲဖြဲ ဖြစ်လာပြီး ယောက္ခမကြီး ထမင်းဝိုင်းက ထအသွားကို ခဏစောင့်လိုက် သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ မယ်အေးဘက် အသာ ယိုင်လိုက်ပြီး " စမောထားတဲ့နည်းလေ"တဲ့။
မယ်အေးက ကိုဝင်းအောင် လက်မောင်းကို အားရှိသရွေ့ ဆွဲလိမ်ပစ်လိုက်တယ်။ ကိုဝင်းအောင်က တအားအား အော်ရင်း တဟားဟားရယ်တယ်။
" နာတယ်ဟ မယ်အေးရ၊ လွှတ်ဟ၊ ဟိုမှာ ဂြိုလ်တုလာတော့မယ် "
ကိုဝင်းအောင် ထမင်းစားပွဲက ထတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ လက်သွားဆေးတယ်။
" အင်း... ညစာတော့ ပြီးသွားပြန်ပြီ ရှင်မရေ၊ မနက်စာတော့ ကျန်သေးသဟ"
ကိုဝင်းအောင်က သူ့ထုံးစ့အတိုင်း အော်ချင်ရာအော်ရင်း တီဗွီရှေ့သွားထိုင်တယ်။
" ဟဲ့ ... မြတ်နိုး၊ ယုယ၊ သုတဆိုတဲ့ ခွေးကလေးသုံးကောင်အိပ်ချင်ကြသေးဘူးလားဟေ"
သူ့သားသမီးတွေနဲ့ တီဗွီရှေ့မှာ တရုန်းရုန်းလုပ်တော့ မယ်ဆိုတာကို သိတဲ့မယ်အေးက လှမ်းအော်တယ်။
" ဖိုးအောင်၊ မြတ်နိုးနဲ့ ယုယကို စာကျက်ခိုင်းဦး၊ ညနေက အိမ်စာတွေပဲ လုပ်ကြတာ "
" ဟာ ... မေကြီးကလဲ တီဗွီကြည့်ချင်တယ်၊ တီဗွီပြီးမှ စာကျက်မယ်၊ နော် ... ဖေကြီး"
" မရဘူး၊ တီဗွီတောင် မပြီးသေးဘူး၊ နင်တို့ အဲဒီရှေ့မှာ အကုန်အိပ်ပျော်မှာ အခုကျယ်ကြ "
" နေပါစေကွာ၊ ညနေက လုပ်ထားပြီးပြီပဲ၊ ကြည့်ကြ ကြည့်ကြ သမီးတို့ ကြည့်ကြ"
Posted by SHWE ZIN U at 5:51 AM2comments Links to this post
တက္ကသိုလ် နေဝင်း ဘာသာပြန် ဇင်ဘာဘွေ အခန်း (၃၉) အဆက် (၂)
အကယ်၍ ရန်သူရှိနာစစ်သားများ ကင်းလှည့်၍ ဂူအတွင်းသို့ ရောက်လာ လျှင်လည်း အောက်သို့ဆင်း၍ ခရိတ် တို့အား အချိန်မီ သတင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ခရိတ်နှင့် တွန်ဂါတာသည် ရေငုတ်ကိရိယာများကို လက်တွေ့စမ်းသပ် မကြည့်မီ လျှို့ဝှက်ရေအိုင်ရှိရာသို့ သွားသည့် လမ်းကို အထူးဂရုစိုက်၍ လေ့လာကြလေသည်။ မတော်တဆ ရန်သူရှိနာစစ်သားများ ၀င်ရောက် လာပါ က ခုခံကာကွယ်နိုင်ရန် ခံတပ်သဖွယ် အကာအကွယ်ယူနိုင်မည့် နေရာများကိုလည်း ကြည့်ထားကြ လေသည်။
အမှန်တော့ မြေအောက်သို့ရေအိုင်သို့ဆင်းသည့် လမ်းမှာ အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသဖြင့် ရန်သူနှင့် ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ရန် မလွယ်ကူလေရာ တကယ်တမ်း သူသေကိုယ်သေ တိုက်ရမည်ဆိုလျှင် ရေအိုင်ထဲသို့ပင် ဆင်း၍ တိုက်ရန်မှ တပါး တစ်ခြားနည်းလမ်းမရှိကြောင်း သူတို့နှစ်ဦးစလုံး စိတ်ထဲမှသိနေကြသည်။
တွန်ဂါတာသည် အရေးရှိလျှင် အသုံးပြုရန်အတွက် တိုကာရက်ဗ် ပစ္စတိုလ်သေနတ် ၏ ကျည်ဆန် လေးတောင့် ယူ၍ ဆီစိမ်စက္ကူပါးဖြင့် သေချာစွာ ရစ်ပတ်သုတ်လိုက်ပြီး ရေကန်၏ အစပ်နားရှိ ထုံးကျောက် တုံး နှစ်တုံးကြား တွင် ၀ှက်ထားလိုက်သည်။
ယင်းအပြုအမူကို ခရိတ်နှင့်တကွ မိန်းကလေးနှစ်ဦးကပါ မြင်၍ အဓိပ္ပာယ်ကို ချက်ချင်း ရိပ်မိကြလေသည်။ အကယ်၍ ရန်သူအင်းအားများပြီး နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း ကိုတော့ မခံလို။ မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ် အဆုံး စီရင်လိုက်ရန် တွန်ဂါတာ က ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သိသာလေသည်။
ယင်းကြောင့်ပင်လျှင် ပစ္စတိုကျည်ဆန် လေးတောင့်ကို သီးသန့်ဖယ်ထားလိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
လူလေးယောက်အတွက် ကျည်ဆန်လေးတောင့် အဓိပ္ပာယ်က ရှင်းနေပေသည်။ "အိုကေ အားလုံးတော့ အဆင်သင့်ပဲ။ ကျုပ်တို့ ဒီကိရိယာတွေ အခြေအနေတကယ် ကောင်းမကောင်း တစ်ခေါက် ဆင်းပြီး စမ်းကြည့် မယ်"
ခရိတ်ကပြောလိုက်သဖြင့် တွန်ဂါတာနှင့် မိန်းကလေးနှစ်ဦးတို့က ရေငုတ်ကိရိယာ များကို ကူညီပြီး တပ်ဆင် ပေးကြလေသည်။
မျက်နှာတွင် ဆောင်းရမည့် ဦးခေါင်းဆောင်း (ခမောက်) နှင့်တကွ အောက်ဆီဂျင်ဘူးများကို စနစ်တကျ တပ်ဆင် လိုက်ပြီးနောက် ခရိတ်သည် ရေအိုင်ထဲသို့ စတင်၍ ဆင်းလိုက်သည်။
ကြိုတင်တွက်မိသည့်တိုင် ဘွိုင်ယင်စီခေါ် သူ၏ ကိုယ်ပေါ့နေခြင်းသည် ပထမဆုံး ပြသာနာ ပင်ဖြစ်ကြောင်း လက်တွေ့ သိရလေသည်။ ရေထဲတွင် ကိုယ်ပေါ့နေသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို တည့်မတ်စွာ ထားရန် ပင် ခက်နေလေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောက်တုံးလေးလေးကြီး တစ်လုံးကို သူ၏ကိုယ်တွင် ဆွဲထားလိုက် ပြီးမှ ပြန်၍ စမ်းသပ်ကြည့် ရလေသည်။ သို့သော် ကျောက်တုံးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက် သည်နှင့်သူ၏ ကိုယ်သည် ပေါ့လာပြန်ကာ ရေမျက်နှာပြင် ဆီသို့ တိုးတက်လာ လေသည်။
ရေထဲ သို့ တစ်ခေါက်ငုပ်ကြည့်ပြီးနောက် ခရိတ်က သူ၏ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြလေသည်။
"ရေအောက်ထဲကျတော့ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ရှိလို့ အသက်ရှူလို့တော့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်နှာဖုံး ခေါင်းဆောင်း က မလုံတဲ့အတွက်ေ၇တွေဝင်လာတယ်။ ဒါကသိပ်တော့ အရေးမကြဲီးပါဘူး။ ကျုပ်က ရေအောက် ထဲမှာပဲ နေရင်း အဲဒီရေတွေကို ပြန်ထုတ်ပစ်လို့ ရပါတယ်။
"ဒါဖြင့် ရှင် ဘယ်တော့လောက် ဆင်းငုပ်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်မှာလဲ"
ဆယ်လီ က မေးရ၊ ခရိတ်က-
"အခုပဲ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ"ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်။
တကယ်တော့ သူ၏စိတ်ထဲတွင်ကား ရေအောင်ထဲဆင်းငုပ်ခြင်းသည် အလွန်အန္တရာယ်များလှသဖြင့် ချောမော အောင်မြင် မည်ဟု တထစ်ချ တွက်၍ မရနိုင်ကြောင်း သူ၏ စိတ်ထဲတွင် သိနေလေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဖွန်ဂါဘီရာသည် အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီအားပြုံးလျက် စကားကို ညင်သာစွာပြောလေသည်။
"ကျုပ်က ကျေးရွာသူရွာသားတွေကို ကျုပ်ရဲ့ သားသမီးတွေ လို သဘော ထား တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား နားလည် စေချင်တယ်။ ကျုပ်တို့ ရှိနာဘာသာနဲ့ တွေ့ကရာရှစ်သောင်းပြောတာကို ကောင်းကောင်း နားမလည် ဘူး"
အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီက ရည်မွန်စွာပြောသယောင် ပြောလိုက်သော်လည်း သရော်သည့်လေသံပါနေလေရာ ဖွန်ဂါဘီယာ သည် စိတ်တိုလာလျက် သူ၏အနီးရှိ ရှိနာ တပ်ကြပ်ကြီးအား လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။
"ဟေ့.. စကားပြန်လုပ်မယ့်လူက ဘယ်မလဲကွ"
တပ်ကြပ်ကြီးက ရိုသေစွာ သူ၏စစ်သားများက စုရုံးခေါ်ယူထားသော ရွာသူရွာသားများရှိရာသို့ လျှောက် သွား လေသည်။ ပြောင်းခင်းများတွင် အလုပ်လုပ်သူများနှင့် တဲအိမ်များတွင် ရှိနေသူများအား ရှိနာစစ်သား များက အတင်းဆွဲခေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယောကျာ်းဆို၍ အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီတစ်ဦး တည်းသာပါပြီး ကျန်လူများမှာ အမျိုးတမီးနှင့် ကလေးသူငယ် လူမမညမအရွယ်များသာ ဖြစ်လေသည်။
အချို့ အမျိုးသမီးများဆိုလျှင် သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်လျက် အဘိုးကြီးဗူဆာမန်ဇီ နှင့် ရွယ်တူနီးပါး ဖြစ်နေ ကြသည်။ အမျိုးသမီးငယ်များကမူ သူတို့၏ ရင်သွေး
ငယ်များ ကို ကျောတွင် ပိုးလွယ်ထားကြသည်။
ကလေးသူငယ်များမှာကား အ၀တ်အစာမပါ ဗလာကျင်းနေကြသည်။. ပြည့်ဖြိုး လှပသော ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုင်ရှင် မိန်းမပျို များလည်း ပါလေသည်။ ဖွန်ဂါဘီရာသည် ထိုလုံမပျိုတို့အား ပြုံး၍ ကြည့်လေသည်။
သို့ရာတွင် မိန်းမပျိုလေးများနှင့်တကွ ကျန်လူများအားလုံးတို့က မျက်နှာထား တည် တည် နှင့် ဖွန်ဂါဘီရာ အား ပြန်ကြည့် နေကြသည်။
"အသင် မာတာဘယ်ဘီ ခွေးငယ်ကလေး များသည် ယနေ့ညနေ မတိုင်မီ တ၀ုတ် ၀ုတ်နှင့် ဟောင်ကြ ဆူကြ ရပေဦးမည် "
ဖွန်ဂါဘီရာက သရော်သလို ပြောလိုက်ပြီးနောက် ရုရှဗိုလ်မှုးကြီး ရပ်စောင့်နေရာ သို့ ပြန်လျှောက် ခဲ့လေ သည်။
ဗိုလ်မှုးကြီးဘူခါ သည် စီးကရက်သောက်နေရာမှ သူ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောလေ သည်။
"ဒီအဘိုးကြီးက ခင်ဗျားဘာမှ မေးလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။. သူက နာကျင်ခြင်းကို ခံရမှာတုန်လှုပ်မယ့်လူ မဟုတ်ဘုူး။ သူ့မျက်လုံးတွေကိုပဲ ကြည့်တော့။ အလွန်အ ယူသီးပြီး ခေါင်းမာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပေါ်လွင် ထင်ရှားနေတယ်"
"ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလည်းပဲ တကယ်နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရရင် ကြာရှည် ခေါင်းမာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး "
ဖွန်ဂါဘီရာ သည် ပြောလိုက်ပြဲီးနောက် စိတ်မရှည်ဟန်နှင့် လက်ပက်နာရီကို ကြည့်လိုက်ပြန်သည်။
" ဤသို့အော်ငေါက်၍ မေးလိုက်ပြန်သည်။
သို့ရာတွင် နောက်ထပ် တစ်နာရီခန့်အကြာမှ စကားပြန်လုပ်မည့် မာတာဘယ် လီအကျဉ်းသား ရောက်ရှိ လာလေသည်။ ထိုလူသည် ရှိုနာဘာသာစကးလည်း တတ်သူဖြစ်၍ အကျဉ်းစခန်းမှ ခေါ်ထုတ်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ထ်ိတ်ခတ်လျက် ခေါ်လာကြလေရာ ဖွန်ဂါဘီရာသည် ထိုလူ၏ လက်ထိပ် ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်၇န် သူ၏ ရှိ်ုနာ စစ်သားများ အား အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက် အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီအား ကျေးရွာအလယ်ဗဟိုရှိ ကွက်လပ်သို့ ဆွဲခေါ်လာစေလေသည်။
ဖွန်ဂါဘီရာသည် အကျဉ်းသား (မာတာဘယ်လီ လူမျိုးအား) ရှိုနာဘာသာဖြင့် ညွန်ကြားချက် ပေးလေသည်။ သူက မေးသည့်မေးခွန်းကို အကျဉ်းသားက မာတာဘယ်လီဘာသာဖြင့် အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီအား မေးရမည် ဖြစ်ပြဲီး အဘိုး ကြီးက ပြန်ဖြေကြားသည်ကို ရှိုနာဘာသာဖြင့် ဖွန်ဂါဘီရာထံ ပြန်၍ အစီရင်ခံရ မည် ဟု အမိန့်ပေး လိုက်သည်။
ယင်းသို့ ညွန်ကြားပြဲီးနောက် ဖွန်ဂါဘီရာက စတင်မေးခွန်းထုတ်လေသည်။
"ကဲ… အဘိုးကြီးကို ပြောလိုက်စမ်း ငါဟာ သူ့အဖေပဲလို့"
မာတာလီ အကျဉ်းသားလည်း အဘိုးကြီးနှင့် အပြန်အလှန် ပြောလိုက်ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာထံ ပြန် အစီရင်ခံ လေသည်။
"ဗိုလ်မှုးခင်ဗျား အဘိုးကြီးက ပြောပါတယ်။ သူ့ဖခင်ဟာ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ တောခွေး တစ်ကောင် မဟုတ်ဘူးတဲ့"
ဖွန်ဂါဘီရာ သည် သူ့အား တောခွေးနှင့် နှိုင်းပြောခံရသည်ကို ဒေါသထွက်လာ လေသည်။
"ဟေ့ကောင် သူ့ကို ပြောလိုက်စမ်း။ ငါဟာ သူနဲ့တကွ သူတို့ ရွာသားတွေကို စိတ်စေတနာကောင်း ထားခဲ့ သလောက် အခုတော့ အဘိုးကြီးကို ငါက အလွန်မကျေမနပ် ဖြစ်မိတယ်။ စိတ်လည်းဆိုးတယ်လို့ပြောလိုက်။ ငါ့မှာ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်တယ်"
"ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဗျား အဘိုးကြီးဗူဆာမန်ဇီက ပြောပါတယ်။ သူ့ကြေင့် ဗိုလ်ချုပ်က စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်၇တယ် ဆိုရင် သူကတော့ အလွန်ကျေနပ် သဘောကျပါ တယ်တဲ့"
"အဘိုးကြီးဟာ ငါတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရန်သူလေးဦးကို အကာအကွယ်ပေးပြီး အစာ ရေစာ တွပါ ကူညီ ထေက်ပံ့ နေတာ ငါသိတယ်လို့ ပြောလိုက်"
"နို်င်ငံတော် ရဲ့ ရန်သူတွေ ၀ှက်ထားတာ လုံးဝမရှိပါဘူးလို့ ပြောပါတယ်"
"ကောင်းပြီ၊ အခု မင်းက ဟိုဘက်က ရွာသူရွာသားတွေကို ပြောလိုက်စမ်း။ ငါတို့က နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်သူတွေ ပုန်းနေတဲ့နေရာကို သိချင်တယ်လို့ ထပ်ပြောလိုက်။ အဲဒီလူတွေရှိရာနေရာကို ရွာသူ ရွာသား တွေက ငါတို့ကို လိုက်ပြမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ထိခိုက်နစ်နာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်"
မာတာဘယ်လီ အကျဉ်သား (စကားပြန်) က အမျိူးသမီးများဘက်သို့ လှည့်၍ မာတာဘယ်လီဘာသာဖြင့် ဖွန်ဂါဘီရာ ၏ စကားကို အသေးစိတ် ပြောပြလိုက် သည်။
သို့သော် အမျိုးသမီးများသည် ဘာမှပြန်မပြောဘဲ စကားပြန်လုပ်သူကိုသာ ပြူး ကျယ်သော မျက်လုံးများဖြင့် ပြန်ကြည့် နေကြသည်။
ထိုအခိုက် ကလေးငယ်တစ်ဦး ဟစ်အော်ငိုကြွေးလေရာ မိခင်ဖြစ်သူက ကလေး အား ကပျာကယာ ချော့မော့ရင်း နို့တိုက်လိုက်မှ ငြိမ်သွားတော့သည်။ ကျန်လူ အားလုံးသည် တစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ် နေ၍သာ ငေးကြည့်နေကြလေသည်။
ဗိုလ်ချုပ်နာစစ်သားများသည် အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီအား လက်ပြန်ကြိုးတပ်နှောင် လိုက်ပြီး စစ်သားတစ်ဦးက ကြိုးပေး သတ်ရန် ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် ကြိုးတစ် ဖက်၌ ကွင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လိုက်သည်။
ထို့နောက် ကြိုးစတစ်ဖက်ကို ပြောင်းဖူးသိုလှောင်သည့် စင်ကြ၊ီး၏ သစ်သားတန်း ကြီးပေါ်သို့ ပစ်တင် ချည်နှောင် လိုက်ပြီး ကွင်းပါသော ကြိုးတစ်ဖက်ကိုမူ အဘိုး ကြီး၏ လည်ပင်းတွင် စွပ်ထားလိုက်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဖွန်ဂါဘီရာ သည် စကားပြန် အကျဉ်းသားအားပြောပြသည်။
"သည်လူတွေကို ရှင်းရှင်းနားလည်အောင် ပြောလိုက်စမ်း။ သူတို့အထဲက တစ်ယောက်ယောက်က သစ္စာဖောက် ကောင်တွေ ပုန်းအောင်းနေတဲ့နေရာကို လိုက်ပြမယ်ဆိုရင် အခုပေးမယ့် အပြစ်ဒဏ်ကို ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်ရပ်ပစ်လိုက် မယ်လို့ ပြောလိုက် ယောကျာ်းဆို၍ အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီ တစ်ဦးတည်းသာ ပါပြီး ကျန်လူများမှာ အမျိုးတမီးနှင့် ကလေးသူငယ် လူမမညမအရွယ်များသာ ဖြစ်လေသည်။
အချို့ အမျိုးသမီးများဆိုလျှင် သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်လျက် အဘိုးကြီးဗူဆာမန် ဇီနှင့် ရွယ်တူနီးပါး ဖြစ်နေ ကြသည်။ အမျိုးသမီးငယ်များကမူ သူတို့၏ ရင်သွေး
ကလေးသူငယ်များမှာကား အ၀တ်အစာမပါ ဗလာကျင်းနေကြသည်။. ပြည့်ဖြိုး လှပသော ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်ရှင် မိန်းမပျိုများလည်း ပါလေသည်။ ဖွန်ဂါဘီရာသည် ထိုလုံမပျိုတို့အား ပြုံး၍ ကြည့်လေသည်။
သို့ရာတွင် မိန်းမပျိုလေးများနှင့်တကွ ကျန်လူများအားလုံးတို့ကျက်နှာထားတည် တည် နှင့် ဖွန်ဂါဘီရာ အား ပြန်ကြည့် နေကြသည်။
"အသင် မာတာဘယ်ဘီ ခွေးငယ်ကလေးများသည် ယနေ့ညနေမတိုင်မီ တ၀ုတ် ၀ုတ်နှင့် ဟောင်ကြ ဆူကြရပေဦးမည် "
ဖွန်ဂါဘီရာ က သရော်သလို ပြောလိုက်ပြီးနောက် ရုရှဗိုလ်မှုးကြီး ရပ်စောင့်နေရာ သို့ ပြန်လျှောက်ခဲ့ လေသည်။
ဗိုလ်မှုးကြီးဘူခါသည် စီးကရက်သောက်နေရာမှ သူ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ပြောလေ သည်။
"ဒီအဘိုးကြီး က ခင်ဗျားဘာမှ မေးလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။. သူက နာကျင်ခြင်းကို ခံရမှာတုန်လှုပ်မယ့်လူ မဟုတ်ဘုူး။ သူ့မျက်လုံးတွေကိုပဲ ကြည့်တော့။ အလွန်အ ယူသီးပြီး ခေါင်းမာတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပေါ်လွင် ထင်ရှား နေတယ်"
သို့ရာတွင် နောက်ထပ် တစ်နာရီခန့်အကြာမှ စကားပြန်လုပ်မည့် မာတာဘယ် လီအကျဉ်းသား ရောက်ရှိ လာလေသည်။ ထိုလူသည် ရှိုနာဘာသာစကးလည်း တတ်သူဖြစ်၍ အကျဉ်းစခန်းမှ ခေါ်ထုတ် လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ထ်ိတ်ခတ် လျက် ခေါ်လာကြလေရာ ဖွန်ဂါဘီရာသည် ထိုလူ၏ လက်ထိပ် ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်ရန် သူ၏ ရှိ်ုနာစစ်သား များအား အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
ဖွန်ဂါဘီရာသည် အကျဉ်းသား (မာတာဘယ်လီ လူမျိုးအား) ရှိုနဘာသာဖြင့် ညွန်ကြားချက် ပေးလေသည်။ သူက မေးသည့်မေးခွန်းကို အကျဉ်းသားက မာတာဘယ်လီဘာသာဖြင့် အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီအား မေးရမည် ဖြစ်ပြဲီး အဘိုး ကြီးက ပြန်ဖြေကြားသည်ကို ရှိုနာဘာသာဖြင့် ဖွန်ဂါဘီရာထံ ပြန်၍ အစီရင်ခံရ မည် ဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
မာတာလီ အကျဉ်းသားလည်း အဘိုးကြီးနှင့် အပြန်အလှန် ပြောလိုက်ပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ် ဖွန်ဂါဘီရာထံ ပြန် အစီရင်ခံလေသည်။
"ဗိုလ်မှုး ခင်ဗျား အဘိုးကြီးက ပြောပါတယ်။ သူ့ဖခင်ဟာ လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ တောခွေး တစ်ကောင် မဟုတ်ဘူးတဲ့"
"ဟေ့ကောင် သူ့ကို ပြောလိုက်စမ်း။ ငါဟာ သူနဲ့တကွ သူတို့ ရွာသားတွေကို စိတ်စေတနာကောင်း ထားခဲ့သလောက် အခုတော့ အဘိုးကြီးကို ငါက အလွန် မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ်။ စိတ်လည်း ဆိုးတယ်လို့ ပြောလိုက်။ ငါ့မှာ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်တယ်"
"ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဗျား အဘိုးကြီးဗူဆာမန်ဇီက ပြောပါတယ်။ သူ့ကြေင့် ဗိုလ်ချုပ်က စိတ်ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်၇တယ်ဆိုရင် သူကတော့ အလွန်ကျေနပ် သဘောကျပါ တယ်တဲ့"
"အဘိုးကြီး ဟာ ငါတို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ ရန်သူလေးဦးကို အကာအကွယ်ပေးပြီး အစာ ရေစသာတွေပါ ကူညီ ထေက်ပံ့ နေတာ ငါသိတယ်လို့ ပြောလိုက်"
"ကောင်းပြီ၊ အခု မင်းက ဟိုဘက်က ရွာသူရွာသားတွေကို ပြောလိုက်စမ်း။ ငါတို့က နိုင်ငံတော်ကို သစ္စာဖောက်သူတွေ ပုန်းနေတဲ့နေရာကို သိချင်တယ်လို့ ထပ်ပြောလိုက်။ အဲဒီလူတွေရှိရာနေရာကို ရွာသူရွာသား တွေက ငါတို့ကို လိုက်ပြမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ ထိခိုက်နစ်နာမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်"
မာတာဘယ်လီ အကျဉ်သား (စကားပြန်) က အမျိူးသမီးများဘက်သို့ လှည့်၍ မာတာဘယ်လီဘာသာဖြင့် ဖွန်ဂါဘီရာ၏ စကားကို အသေးစိတ် ပြောပြလိုက် သည်။
ဗိုလ်ချုပ်နာစစ်သားများသည် အဘိုးကြီး ဗူဆာမန်ဇီအား လက်ပြန်ကြိုးတပ်နှောင် လိုက်ပြီး စစ်သားတစ်ဦးက ကြိုးပေးသတ်ရန် ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် ကြိုးတစ် ဖက်၌ ကွင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လိုက်သည်။
ထို့နောက်ကြိုးစတစ်ဖက်ကို ပြောင်းဖူးသိုလှောင်သည့် စင်ကြ၊ီး၏ သစ်သားတန်း ကြီးပေါ်သို့ ပစ်တင်ချည်နှောင်လိုက်ပြီး ကွင်းပါသော ကြိုးတစ်ဖက်ကိုမူ အဘိုး ကြီး၏ လည်ပင်းတွင် စွပ်ထားလိုက် သည်။
"သည်လူတွေ ကို ရှင်းရှင်းနားလည်အောင် ပြောလိုက်စမ်း။ သူတို့အထဲက တစ်ယောက်ယောက်က သစ္စာ ဖောက်ကောင် တွေ ပုန်းအောင်းနေတဲ့နေရာကို လိုက်ပြမယ်ဆိုရင် အခုပေးမယ့် အပြစ်ဒဏ်ကို ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်ရပ်ပစ်လိုက် မယ်လို့ ပြောလိုက်"
Posted by SHWE ZIN U at 6:52 AM3comments Links to this post